(Health issues for gay men and men who have sex with men)
ကျန်းမာ​ရေး ပြဿနာတွေ ရောဂါကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးတွေကို ဘယ်လိုလူမျိုးမဆို တစ်ကြိမ်ကြိမ်တော့ ကြုံဆုံကြရပါတယ်။ လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သူ (gay) များနှင့် လိင်တူခြင်းဆက်ဆံသူ (men who have sex with men_MSM)များမှာတော့ လိင်ဆက်ဆံမှုကတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါ သို့မဟုတ် ကာလသားရောဂါ (sexually transmitted infections _ STDs) တစ်မျိုးမျိုး ကူးစက်ခံရချိန် ဒါမှမဟုတ်​ ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချိန်တွေဆို
စိတ်အားငယ်စိတ်ဝင်လာရာက စိတ်ဓာတ်ကျ ရောဂါတစ်ခုအသွင် ခံစားရမိတဲ့ ကျန်းမာ​ရေး ပြဿနာအခြေအနေမျိုးရှိတာကို ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် နည်းလမ်းလေးတွေ ကြိုတင်သိထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့သည်လောက် အခြေအနေ မယိုယွင်းသွားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။
ပျှမ်းမျှပြောရရင် အမျိုးသား အတော်များများဟာ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ သို့မဟုတ် အခက်အခဲတွေကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြရတာ ယုံမှားဖွယ်မရှိပါ။ လိင်တူခြင်း ကြိုက်နှစ်သက်သူ ဂေးများနှင့် လိင်တူခြင်းဆက်ဆံသူ MSM များအတွက်ကတော့ အထူးဂရုပြုသင့်တဲ့ စိုးရိမ်ဖွယ် ကျန်းမာ​ရေးအခြေအနေအချို့ရှိပါတယ်။
လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုနဲ့ အတူ လက်တွေ့ပြုလုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွေအရ စာဖတ်သူရဲ့ တစ်​သီးပုဂ္ဂလ ပြဿနာ များကို အကြောင်းအရင်းများစွာဖြင့် ပုံဖော်ပေးလို့ရပါတယ်။ မိသားစုရာဇ၀င်နှင့် အသက်​အရွယ်​လည်း ထည့်တွက်ရမှာပါ။ လိင်တူခြင်း ကြိုက်နှစ်သက်သူ အမျိုးသားရဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ အများစုကို နားလည်ဖို့နဲ့ ကျန်းကျန်းမာမာနေထိုင်လျှောက်လှမ်းဖို့ အရေးပါတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကာလသားရောဂါ မကူးစက်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ပါ (Protect yourself from sexually transmitted infections)
လိင်တူခြင်းဆက်ဆံသူ (MSM) များဟာ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ (AIDS) ဖြစ်ပွားစေမယ့် HIV ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖို့နဲ့ အခြား လိင်ဆက်ဆံခြင်းကတစ်ဆင့်ကူးဆက်တတ်သော ရောဂါများ (STDs) ကူးစက်ဖို့ အခြေအနေတွေရှိနေ တိုးပွားနေပါတယ်။
လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ မကူးစက်ရအောင် မိမိကိုယ်​ကို ကာကွယ်ပါ (To protect yourself from sexually transmitted infections)
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကွန်ဒုံးတစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအကာအကွယ်များကို အသုံးပြုပါ။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါတိုင်း ကွန်ဒုံးအသစ်တစ်ခုကို သုံးစွဲရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် စအိုအသုံးပြုဆက်ဆံတဲ့အခါ (anal sex) မှာ ပိုသုံးစွဲသင့်သလို ပါးစပ်အသုံးပြု လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ(Oral sex)မှာလည်း ကွန်ဒုံးကို ကောင်းကောင်း အသုံးပြရမှာပါ။ ရေဓာတ်အခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ချောဆီ (water-based lubricants) ကို သာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်လိမ်းကျံတဲ့ လိုရှင်း၊ အဆီ၊ နောက်တခါ Vaseline လို့လူသိများတဲ့ Petroleum Jelly တွေကို လိင်ဆက်ဆံချိန် အသုံးမပြုပါနဲ့။ အဆီအခြေခံတဲ့ ချောဆီ(Oil-based Lubricants) တွေဟာ ကွန်ဒုံးရဲ့ ရာဘာသားကို အားလျော့စေပြီး ကွဲပြဲဖို့ လွယ်ကူစေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်လင်တစ်မယားစနစ် သို့မဟုတ် လိင်ဆက်ဆံဖော် တစ်ဦးသာ ထားရှိနေထိုင်ပါ။ ကာလကြာရှည် အတူနေတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုပုံစံ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ဟာ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိနေပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် လိင်ဆက်ဆံမှုကတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါများ (STDs) ကူးစက်နိုင်ခြေနည်းစွာဖြင့် နေထိုင်ဖို့ ဖြစ်စေပါတယ်။
အရက် (alcohol) သောက်သည့် ပမာဏကို ကန့်သတ်ချက် ထားသင့်သလို မူးယစ်ဆေးဝါးကို အစပျိုး မသုံးစွဲပါနဲ့။ တကယ်လို့ အရက်သောက်ထား မူးယစ်​​ဆေးဝါး သုံးစွဲထားချိန်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုမျိုးပြုလုပ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းကွပ်မရဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားထဲကို မူးယစ်ဆေးထိုးသွင်း သုံးစွဲနေသူတစ်ယောက်ဆိုပါက မိမိအပ်ကို တခြားသူနဲ့ မျှဝေသုံးစွဲတာမျိုး မလုပ်ရပါ။
ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပါ။ အသဲရောင် အေပိုး (Hepatitis A) နဲ့ အသဲရောင် ဘီပိုး (Hepatitis B) ကာကွယ်ဆေးတွေကို ထိုးထားခြင်းဖြင့် လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါ တမျိုးဖြစ်တဲ့ အသဲရောင်ရောဂါပိုးကြောင့် ဒဏ်ဖြစ်တာ အသဲခြောက်တာ စတဲ့အသဲရောဂါတွေ မဖြစ်စေတော့ဘူးလေ။ လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတိုင်းကိုတော့ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ တားလို့မရပါဘူး။ အသည်းရောင် စီပိုး (Hepatitis C)ကတော့ ကာကွယ်လို့မရသလို အသည်းပျက်စီးခြင်း၊ အသည်းကင်ဆာနဲ့ သေဆုံးခြင်းတွေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေး [Human Papillomavirus (HPV) Vaccine] က လိင်တူခြင်းဆက်ဆံသူ အမျိုးသားများ (MSM) မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ စအိုကင်ဆာအတွက်ပါ ကာကွယ်လို့ရနိုင်တာကြောင့် လူပျိုဖော်ဝင်ချိန် အသက်​အရွယ်​ကအစ နှစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ်အလွန်အထိ ဆေးထိုးပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။HPV ဟာ လိင်တူခြင်းဆက်ဆံသော အမျိုးသားများ (MSM) ကို စအိုကင်ဆာရောဂါနှင့် နှီးနွယ်စေလို့ ကာကွယ်နိုင်အောင် ကြိုးစားထားရင် ကောင်းတယ်ဗျ။
စာဖတ်သူကော စာဖတ်သူရဲ့ ပါတနာကော နှစ်ဦးသား သွေးအမြဲ စစ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ ကိုယ့်ပါတနာမှာ HIV ကူးစက်ခံရသလား ၊ အခြား လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ကူးစက်ခံရသလား မသေချာဘဲ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို မပြုလုပ်ပါနဲ့။ သွေးစစ်ဆေးခြင်းဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အမှန်အတိုင်း သိနိုင်တာကြောင့် အရေးပါတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရပြီးသူများကိုယ်တိုင်က မိမိအခြေအနေမှန်ကို မသိထားကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း [Pre-exposure prophylaxis (PrEP)] ပြုလုပ်ဖို့ တတ်သိသူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ PrEP ဆိုတာ HIV မရှိသေးသူများ HIV ကူးစက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆေးတစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ရတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သော HIV ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်ခြေမြင့်သည့်သူတစ်ဦးအား ကူးနိုင်ခြေလျော့အောင် ဆေးနှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Truvada (emtricitabine-tenofovir)ကို အသုံးပြုပေးတာပါ။ Truvada ဆေးက HIV ကူးစက်ထားနှင့်ပြီးသူများကို အခြားသော ဆေးဝါးကုသမှုများနဲ့ တွဲဖက်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ဆေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူသည် HIV ကူးစက်ခြင်းမှ အကာအကွယ်အဖြစ် Truvada ကို အသုံးပြုချိန်မှာ ကူးစက်ခံရခြင်းမရှိသေးပါဘူးဆိုတာ သေချာဖို့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ယောက်က အတည်ပြုဖို့လိုပါတယ်။ စာဖတ်သူမှာ အသည်းယောင် ဘီပိုး (Hepatitis B) ကူးစက်ထားခြင်းရှိမရှိကိုလည်း ဆရာဝန်အနေနဲ့ စစ်ဆေးသင့်သလို အသည်းရောင် ဘီပိုးရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း Truvada ကို သုံးစွဲဖို့ ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းစဉ်အား အဆင်ပြေမပြေ စမ်းသပ်စစ်ဆေးသင့်ပါသေးတယ်။ ဆေးသောက်စဉ်မှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း နေ့စဉ် သောက်သုံးပါ။ အကာအကွယ်အတားအဆီးအနေနဲ့ ဆေးသောက်သလို လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်း ကွန်ဒုံး အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော အပြုအမူကို လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျမှုအား ကိုင်တွယ်ခြင်း (Tackle depression)
လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သူ (Gay) အမျိုးသားများနှင့် လိင်တူခြင်းဆက်ဆံသူ (MSM) အမျိုးသားများအနေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျ စိတ်အားငယ်တာရယ် စိုးရိမ့်ကြောင့်ကျစိတ်ပိုတာရယ် ဆိုတာမျိုးခံစားရနိုင်ခြေ အမြင့်ဆုံးပါပဲ။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ ကုထုံးရှာဖွေဖို့ တုန့်နှေးနေပါရင်လည်း အဦးအစအနေဖြင့် မိမိဖွင့်ဟသမျှ နားထောင် လက်ခံပေးနိုင်တဲ့ အယုံကြည်ရဆုံး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် သို့မဟုတ် ချစ်ရသောသူ တစ်ယောက်ကို ယုံကြည်အားထားလိုက်ပါ။
ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်များကို ဝေမျှဖွင့်ဟခြင်းသည် ကုထုံးတစ်ရပ်နဲ့ ကုသမှုမပြုခင် စတင်လှမ်းလိုက်သော ပထမခြေလှမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာ သွင်ပြင်နဲ့ပတ်သက်သော စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ရင်ဆိုင်ခြင်း(Address body image concerns)
လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား အများစုတွင် ခံတွင်းပျက်ခြင်း (anorexia) နှင့် စိတ်ခံစားမှုကြောင့် အစားအစာ အလွန်​အကျွံ စားခြင်း (bulimia nervosa)တို့ကဲ့သို့သော အစာစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်သော ရောဂါများအပြင် ခန္ဓာကိုယ် ပုံပန်းအပြောင်းအလဲနဲ့ ပက်သက်သော ပြဿနာ အစုံအား ရင်ဆိုင်ရသည့် အတွေ့အကြုံ ပိုစုံဟန်တူပါတယ်။ သာမန် လိင်​ကွဲကြိုက် အမျိုးသားများထက် ပိုများတယ် လို့ယူဆမိတာပါ။
သိသာထင်ရှားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ညွှန်းရရင် ခန္ဓာကိုယ် ပိုမို ကျစ်လစ်သွယ်လျလာခြင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​ပိုမိုထွားကြိုင်း တောင့်တင်းလာခြင်း ရလဒ်များဟာ မိန်းမဆန်သော လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား (gay)များ သို့မဟုတ် လှပတဲ့ ကြွက်သားပြည့် ခန္ဓာကိုယ်​ပိုင်ရှင် အမျိုးသားများအတွက် စွမ်းရည်​ပြ ပြကွက်တစ်ခုအသွင်ဆောင်ကြောင်းပါ။
အချို့သော လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား နှင့် လိင်တူလိင်ကွဲ နှစ်မျိုးစလုံးကြိုက်နှစ်သက်သော အမျိုးသားများဟာ သူတို့​တွေ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးစိုးရိမ် စိတ်ဝင်စားတတ်ကြတာကိုးနော်။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ် သို့မဟုတ် အစာစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်သော ရောဂါ တစ်ခု ရင်ဆိုင်နေရတယ် ဆိုပါလျှင် အကူအညီတစ်ခုခုကို ရယူပါ။ စာဖတ်သူ့ မိသားစုဆရာဝန်ကို ပြောပြတာ သို့မဟုတ် စိတ်ကျန်းမာရေး အတိုင်အပင်ခံ တစ်ဦးဦးနဲ့ ဆွေးနွေးပြီး ကုထုံးရွေးချယ်တာမျိုးတွေ လုပ်နိုင်တယ် မဟုတ်လား။
ဆေးတလွဲသုံးမိနေခြင်းအတွက် အကူအညီရယူပါ (Seek help for substance abuse)
အမေရိကန်ပြည်မှာတော့ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသားရဲ့ ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုနှုန်းသည် သာမန် လိင်ကွဲကြိုက်အမျိုးသားများ (heterosexual)ထက် ပိုမိုသယောင်ထင်မြင်ရသလို အရက်သေစာစွဲလမ်းမှုကိစ္စမှာလည်း အခြေခံ လူဦးရေထက် များနေနိုင်ဖွယ် ရှိနေပါသတဲ့။
စာဖတ်သူမှာ ဆေးဝါး၊မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အရက်သေစာနှင့် ဆေးလိပ် အစရှိသည်တို့ကို ပုံမှန်ထက် ပိုမိုအသုံးပြုမိနေတယ် တလွဲစွဲလန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စများ ဖြစ်လာပါက အကူအညီရယူဖို့ သတိပြုပါ။
ပြည်တွင်းမှာလည်း လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား (gay)၊ လိင်တူကြိုက် အမျိုးသမီး (Lesbian) ၊ လိင်တူ/လိင်​ကွဲ နှစ်မျိုးစလုံးကြိုက်နှစ်သက်သူ (bisexual) များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်အသွင်ပြောင်းလဲ ၀တ်ဆင်သူ (Transgender) များအတွက် ကျန်းမာရေး ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးတို့အတွက်သာမက ဆေးစွဲခြင်း/ဆေးတလွဲသုံးခြင်းများကို ကုသပြုပြင်ပေးသည့် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်း ဌာနတွေရှိနေပါပြီ။ MMNA က ဦးစီးဦးဆောင် စီမံထားတဲ့ နေရာတွေရှိပြီး ရန်ကုန်မှာဆို ရွာသာကြီးဆေးရုံမှာ သွားရောက် တိုင်ပင်ကုသလို့ ရနေတာပါ။
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရခြင်းကို အမှတ်ရခြင်း (Recognize domestic violence)
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်တဲ့ ကိစ္စရပ်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ ဖြစ်တည်နေတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုအတွင်းရှိ မည်သူမဆိုအတွက် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အခြားသူနဲ့ အရာရာ မျှဝေသုံးစွဲနေရသော အခြေအနေနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ကြောင့် အဆိုပါ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု တစ်မျိုးမျိုးကို ခံစားရချိန်မှာ လိင်တူကြိုက်အမျိုးသား (gay) တွေဟာ နှုတ်ဆိတ်နေလေ့ရှိကြပါတယ်။
အနိုင်ကျင့်ခံ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာ ကျင်လည်နေရသူအဖို့ ၀မ်းနည်းအားငယ်မှု၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ် သို့မဟုတ် မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့တဲ့စိတ်များဖြင့် နေထိုင်နေကြရပါတယ်။
စာဖတ်သူဟာ ကိုယ့်လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုကို ဖုံးကွယ်မထားချင်တော့ဘူးဆိုပါက ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှုတစ်ကြိမ် ပြုကျင့်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း အကူအညီရှာဖွေရပါမယ်။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု ခံရခြင်း သံသရာကို ဖြတ်တောက်ဖို့အတွက် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတာက တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် လုပ်တာကောင်းပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ်​ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုပဲ ဦးတည်ချက်ထားချင်ရင်တော့ အနိုင်ကျင့်တဲ့အကြောင်း တစ်ယောက်ယောက်ဖွင့်ပြောပြလိုက်ပါ။ ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ အချစ်ခင်ရဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်၊ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ပေးနေသူ ဖြစ်မယ် သို့မဟုတ်​ အခြားသော
အနီးကပ် အဆက်​အသွယ်​ ရှိသူဖြစ်နိုင်တာပဲ။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု အတွက် အကြောင်းကြားလို့ရတဲ့ အရေးပေါ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို ခေါ်ဆိုဖို့ တွေးတောလိုက်တာနဲ့တင် စာဖတ်သူကို အနိုင်ကျင့်သူစီက ခွာဖို့ အစီအစဉ်​ တစ်ရပ်ကို ဖန်တီးရပါမယ်။
ပုံမှန် ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်မှု ပြုလုပ်ပါ (Make routine health careapriority)
မိမိရဲ့ နေ့စဉ် ကျန်းမာရေးဂရုစိုက် ကာကွယ်မှုအတွက် လိင်တူခြင်းကြိုက်တာမုန်းတီးသူများ (homophobia)ကို ရင်ဆိုင်ရမှာ သို့မဟုတ် လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ်သက်မှုကိစ္စနဲ့
အမည်းစက်ထင်မလား ဆိုသည်များကို စိုးရိမ်စိတ် ၀င်ခွင့်မပြုသင့်ပါ။ ဒါဟာ စာဖတ်သူရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အဖိုးအခပဲဗျာ။
စာဖတ်သူအတွက် အရာရာ ပြသတိုင်ပင်လို့ အဆင်ပြေတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကိုရှာပါ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သူ (gay) သို့မဟုတ် လိင်တူ/လိင်​ကွဲ နှစ်မျိုးစလုံးကြိုက်နှစ်သက်သူ (bisexual) ဖြစ်ကြောင်း ဆန်းစစ်ခွဲခြားကာ ကိုယ်တွေအသက်အရွယ်ဝန်းကျင် အမျိုးသားများအတွက် ဘယ်လို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုပြု သင့်သလဲ မေးမြန်းပါ။ သွေးဖိအား (blood pressure) ၊ သွေးတွင်း ကိုလက်စထရော် ပမာဏအတိုင်းအတာ(cholesterol) ၊ ပရော့စတိတ် ဂလင်း အခြေအနေ(prostate)၊ လိင်ဥတွေရဲ့ အနေအထား(testicular)နှင့် အူမကြီးကင်ဆာ(colon cancers) ရှိမရှိတို့လို အ​ကြောင်းအရာတွေမျိုးပေါ့။
စာဖတ်သူဟာ ကာလကြာရှည် တွဲနေသူမရှိဘူး၊ နှစ်ဦးသား တစ်လင်တစ်မယားစနစ် မှတ်ယူ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေသူ မရှိဘူးဆိုသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါက လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ (STDs) ကူးစက်မှုရှိမရှိ ပုံမှန် စစ်ဆေးဖို့ အစီအစဉ်​ ဆွဲထားရပါမယ်။ မိမိစိတ်ထဲက ယုံမှား စိုးရိမ်မိသော အခြားကျန်းမာရေး ကိစ္စများကိုလည်း ပြနေကြဆရာဝန်အား ပြောပြ အသိပေးတာ တိုင်ပင်တာမျိုး လုပ်ရပါမယ်။ ခပ်စောစော ရောဂါလက္ခဏာများ သိရှိတွေ့မိပြီး အလျှင်အမြန် ကုသနိုင်ခြင်းသည် အသက်ရှည်ရှည် ကျန်းကျန်းမာမာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့အကူအညီ ဖြစ်ပါသည်။
Alex Aung (28 May 2018)
Ref: Health issues for gay men and men who have sex with men by Mayo Clinic
Labels: Sexual Health, ဘာသာပြန်, ဆောင်းပါး
Hong Kong မှာနေတုန်း နာမည်လည်းကြီးသလို လူလည်းရှုပ်တဲ့ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်မှာ ဖက်ထုပ်စားရတာ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိဘူး။ ရောင်းချတာကလည်း မြန်မာပြည်မှာ မြင်ဖူး စားဖူးနေကြထက် အမျိုးအမည်ပိုစုံပြီး လူတွေဆို အလှူပေးနေလို့ ၀င်စားတဲ့အတိုင်းစားနေကြတာပါ။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်း သူတို့ဖောက်သည်တွေအကြိုက်သေချာသိပြီး အမြဲတစေ စူးစမ်းနေကြဟန်လည်းပေါက်တယ်။ ဒီလိုဆိုင်ထဲ သနားစရာ ကျွန်တော့်မှာ ကျယ်​ကျယ်​ပြန့်ပြန့်​ထိုင်စရာမရှိလို့ ဟိုသည်ကြည့်ကာ အရသာရှိတဲ့ အစားအစာတွေ ငေးရင်း စောင့်ဆိုင်းဖို့ကို စိတ်မရှည်တာအမှန်။ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းလာတာတော့ မဟုတ်​ဘူးဗျ သူငယ်​ချင်း သုံးယောက်လောက် ပါလာသေးတယ်။ ဖက်ထုပ်စားရတာ ကောင်းတယ် သွားစားကြမယ်ဆိုပြီး ထွက်လာကြတာလေ။
`ကျွတ်....စားဖို့သောက်ဖို့ စောင့်ရတာ ငါစိတ်မရှည်တော့ဘူးကွာ။ အိမ်က အဖေတို့ အမေတို့ဆို ငါ့အတွက်​ အမြဲအဆင်သင့်။ အဲ....အမြန်ရတဲ့ဆိုင်တွေပဲ ငါကသွားစားနေကြ။ ဟူး....အနံ့တွေကတော့ ရှယ်ပဲ´ နေရာလွတ်သွားတဲ့ ခုံမှာ ကျွန်တော် ပစ်ထိုင်လိုက်တာ ညွှတ်ကျ သွားမလား လန့်စရာ။ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်က နည်းနည်း ၀တယ်ဗျ။ အရပ် ၅ပေ ၆လက်မ၊ ဆံပင်အနက်ရောင်၊ အသက်က ၂၂လောက်ရှိပြီး An လို့ ဟောင်ကောင်က သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်ကြတဲ့ အမည်ပိုင်ရှင်ပါ။ ကျန်းမာ​ရေးနဲ့မညီတဲ့ အစားအစာလို့ သူများပြောတာတွေ လက်မခံဘဲ အမြန်ရအစားအစာ၊ ချိစ်တွေ ဘာညာ အများကြီးပါတဲ့ ဘာဂါတွေဆို အလွန်စားတယ်။ အဲတာတွေကလည်း အရသာကောင်းတာကိုးဗျ။
တစ်နာရီလောက်ကြာတော့ ခုံကျိုးပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ဘိုင်းကနဲ ကျွန်တော် ထိုင်ရက်ကျတယ်။ ထိုင်နေတဲ့ စားပွဲဝန်းကျင်ကလူတွေ ကျွန်တော့်ကို ၀ိုင်းဝန်း စူးစမ်းကြည့်နေတာကြောင့် ရှက်ပြီး အမြန်ထကာ ​ပေးစရာ လျော်စရာရှိတာတွေ ပေးလိုက်ဖို့ ခပ်တိုးတိုးဖြေရှင်းနိုင်အောင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လက်ထဲ ပိုက်ဆံတစ်ထပ်ထိုးထည့်ကာ ဆိုင်အပြင်ကို ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။ `၀နေတာကောင်းကို မကောင်းဘူး။ ထိုင်ရပြုရ အဆင်မပြေတာများ မုန်းဖို့ကောင်းတယ်။ ခုံကျိုးကျတာကလည်း မြန်လိုက်တာကွာ´ ကျွန်တော် ခုံမခိုင်တာကို ရမယ်​ရှာ အရှက်ပြေပြောလိုက်မိသေး။
`An မင်း မပြန်ခင် ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့ပြ ဒါမှမဟုတ်​ အခြား ၀ိတ်ချဖို့ အစီအစဉ်​ တစ်ခုခုလုပ်သင့်နေပြီ...မင်း သဘောနော်...ငါက အကြံပေးတာ´ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က အကြံပေးစကား ခပ်တိုးတိုး ပြောရဲ့။
အစက စိတ်ထဲ ဖျဉ်းကနဲဖြစ်သွားသေးတာ။ နောက် စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ သူငယ်​ချင်းပြောတဲ့ အ​ကြောင်းအရာက အမှန်တရား တစ်ခုပဲဆိုတာ သတိကပ်မိတယ်။ `စိတ်ကူးကောင်းပဲကွ။ ငါ အဟာရ ဆရာဝန်နဲ့ မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် appointment ယူလိုက်မယ်။ အစားအ​သောက်​နဲ့ ပတ်သက်ရင် ငါ့ကိုယ်​ငါ မထိန်းနိုင်ဘူး အစားကြူးဘီလူးဖြစ်နေပြီ´
`အို....လာစမ်းပါ သူငယ်ချင်းရာ...စိတ်ထဲထားမနေနဲ့.....ငါတို့သွားတော့မယ်၊ နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့၊ အချိန်ရရင် အတူစုပြီး ချက်စားကြရအောင် ´ သူငယ်ချင်းတွေ စကား ပြောလည်းပြော နှုတ်လည်းဆက်ရင်း ကျွန်တော့်ကို အိမ်ပြန်ပို့သွားကြတယ်။
ရက်သတ္တပါတ် နှစ်ပတ်အကြာ အင်္ဂါနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာ အသိ သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက် ညွှန်းတဲ့ ဆရာဝန်​ရဲ့ ဆေးခန်းကို ပေါင်အနည်းငယ် လျော့ချနိုင်ဖို့ သွားဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ သူများလိုမဟုတ် ခုံနှစ်လုံးဆက်ထိုင်မှ သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်လို့ အသာထိုင်ရင်း စာရင်းပေးထားတာကို အကြောင်းပြန်စောင့်နေလိုက်တယ်။ နောက်တော့ သူနာပြုဆရာမ လှမ်းခေါ်သံကို နားစွင့် အသင့်အနေအထား ပြင်ထားတာပေါ့။ သူနာပြုဆရာမ ခေါ်သံလည်းကြားရော ဆရာဝန် စစ်ဆေးကုသတဲ့အခန်းရှိရာ လှမ်းသွားပါတယ်။
အလွန်အကြူးချောမောတဲ့ ဆရာဝန်ကို မြင်လိုက်ရချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်သွားရပါရော။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ အာမေဋိတ် ခပ်တိုးတိုးအသံမည်သွားပုံက `ချောလိုက်တာ ´လို့။ ဒေါက်တာ အသွင်​အပြင်​အရ အရပ် ၆ပေ၊ အသက် ၃၄နှစ်လောက်ရှိပြီး ကျစ်လစ်သန်မာသော ကိုယ်ဟန်နဲ့ အတော်သားနားသူ တရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်တွေ ပွယောင်းယောင်းဖြစ်နေပေမယ့် သူ့အသားအရေက ​ချောမွတ်​ တောက်ပ နေတာများ သဘောကျစရာပါ။ သူ့နာမည်က Chang တဲ့ဗျ။
`ဟယ်လို....An....နေကောင်းတယ်ဟုတ် ´ ခပ်ပြုံးပြုံး ဖော်ရွေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ လက်တစ်ဖက် ကမ်းပေးတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အချိန်ကြာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖြစ်ကြတယ်။
`ဟုတ်​ကဲ့.. .နေကောင်းပါတယ် ဆရာ။ ဒါပေမဲ့ overweight ဖြစ်နေတာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိသလို ဖြစ်နေတယ်။ ´
`အိုကေ....ဆရာတို့ အဲ့ဒီအကြောင်း ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ Gym သွားဖို့ အားကစားတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆဖူးလား ညီလေး´ Chang က မေးခွန်းထုတ်တယ်။
`No....​လေ့ကျင့်​ခန်း လုပ်ရင် ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံး နာကျင်နေတာဗျ။ ၀ိတ်ကျအောင်လို့ ဟိုဆေးသည်
ဆေးလည်း သောက်ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် အတွက် ဘယ်နည်းလမ်းက သင့်တော်လည်း အဆင်ပြေမလည်း မေးချင်နေတာပါ။´
`ကောင်းပါပြီ၊ ညီလေးအနေနဲ့ Gym ကိုသွားပြီး ၀ိတ်ကျဖို့ ​လေ့ကျင့်​ခန်း တစ်မျိုးမျိုးကို လုပ်သင့်တာပေါ့လေ။ ပိန်ဆေးတွေ သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ အသည်းကို ပျက်စီးစေတာ ထိခိုက်စေနိုင်တာ သတိပြုရမယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ ညီလေး သဘောပါ´ Chang က ချိုချိုသာသာ ပြောတယ်။
ဘယ်လိုပြောမလဲ ကျွန်တော့် ဘ၀ထဲ Chang အတူရှိနေစေချင်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ ကျောထောက်နောက်ခံ အ​ကြောင်းအရာတွေ ကျွန်တော် လုံးဝမသိဘူး။ သူ့လက်သူကြွယ်မှာ လက်​စွပ်​မရှိတာ သတိပြုမိထားတော့ သူ Single ဆိုတာသေချာနေတယ်။
ရက်သတ္တပါတ် နှစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်လောက်တွေ့ရတာ ပုံမှန်ဖြစ်ချင်လာပြီကွာ Chang က အလွန်ပဲ စွဲဆောင်မှုပြင်းလွန်းတယ်။ တွေ့ရတဲ့ အကြိမ်တိုင်း သူ့ချောမောပြေပျစ်မှုကို မနာလိုစိတ် ၀င်ရသလို လူတွေရဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေး ပြုလုပ်ဖို့ ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းကို သဘောကျရပါတယ်။
Overweight Group တစ်ခုနဲ့ ​လေ့ကျင့်​ခန်း ပြုလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်​ချ တစ်နှစ်စာငွေချေခဲ့လိုက်တယ်။ ခပ်မိုက်မိုက် ထရိန်နာကို မြင်ရချိန်မှာ သူ့ထက်ပိုကြည့်ကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ အဓိဌာန်ချမိပါရော။
`ဟိုင်း....ကျွန်တော်က An ပါ´
`ဟုတ်​ကဲ့ ၊ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ။ ခပ်သွက်သွက်လေး လှုပ်ရှားဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီလား ​ဘော်​ဒါ? Ready?´ သူက ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ မေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ထဲ အသေအချာ ငြိမ်အောင် လုပ်ရင်း `Ready´ လို့ စကားပြန်လိုက်ရော။
`ကောင်းပြီ၊ ​ဘော်​ဒါ​တွေ.. ...စလိုက်​ကြရ​အောင်​ ´
Check-Up အခန်းထဲရောက်တော့ စိတ်ထဲမကြေလည်တာတွေ မုန်းမိတာတွေ Chang ကို ပြောပြလိုက်တယ်ဗျ။ `တကိုယ်လုံး တအားနာတယ်ဗျ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆင်ခြေစကားပြောဖို့ မသင့်ဘူးဆိုတာ သိတော့သိပါတယ်။ လေ့ကျင်ခန်းလုပ်တာ ၁၀ မိနစ်လောက်နဲ့ ကျွန်တော် လက်လန်တော့တာပဲ။ အိမ်ပြန်ဖို့ လုပ်မိတယ်လေ။ သူက အဲ နည်းပြလေးက ပေးမပြန်ဘူးဗျ။ ကျနော် အလွယ်​တကူ လက်လျော့တတ်သူ မဟုတ်ပေမယ့် သူက တအား Train တယ်ဗျာ။´
`ဒါ ကောင်းတာပေါ့။ သူက ညီလေး ကျန်းမာရေးအတွက်ကော အခြားကိစ္စတွေကိုကော သေချာဂရုစိုက်တာပဲ မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုယ် သေချာဂရုတစိုက်မရှိရင် အဆင်မပြေဘူးနော်။ အဲ....နည်းနည်း မေးပါရစေ.....ညီလေး ချစ်သူထားဖူးတယ် မဟုတ်လား? ချစ်သူရှိတယ်နော်?´ Chang က ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေ မေးနေလဲမသိဘူး။
ကျွန်တော် Chang ရဲ့ အမေးစကားလုံးတွေကြောင့် အံ့အားသင့်​ကာ ခပ်တိုးတိုး အဖြေပေးမိပါတယ်။ `Uh....အချစ်အကြောင်းဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် သေချာမသိဘူး။ အစားအစာတွေက ကျွန်တော့် အချစ်တွေပဲ။ လက်သင့်ခံလို့ရတယ် ဟုတ်? ကျွန်တော် ဆိုလိုတာကဗျာ.....အစားအစာတွေ မြင်လိုက်ရတဲ့ အချိန်တိုင်း ရုတ်ခြည်း ဗိုက်ဆာလာပြီး အကုန်​လုံးလိုလို စားပစ်လိုက်တာပဲ။´
`ကောင်းပါပြီ၊ ညီလေး ဘယ်အရာကို ပိုဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း Share ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ အကို့အနေနဲ့ပြောရရင် လေ့ကျင့်ခန်းကို ညီလေးဆက်လုပ်ပါ။ အကိုတော့ ညီလေး ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်စိတ် ၀င်မိတယ်။ ကျန်းမာရေး အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းက ညီလေးကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုသလဲ မသိသေးဘူးပေါ့။ နောက်တစ်ခါပြောပါမယ် ညီလေး အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဆက်လုပ် မလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်​ချက်​ ချပါ။´ Chang စိတ်​ပျက်​လက်​ပျက်​ ဖြစ်သွားတယ်။
ကျွန်တော်လည်း စိတ်ထဲ စိတ်လက်မချမ်းသာဖြစ်သွားရတော့ `Uh.....ကျွန်တော်.....ဒေါက်တာ ပြောတာကို သဘောတူပါတယ်။ ´
“Bravo!” Chang ရယ်ပြုံးပြုံး ဖြစ်သွားပြီး ကျွန်တော့် ပခုံးတွေကို လက်အစုံနဲ့ အသာညှစ်တယ်။ ဒီလိုလုပ်တော့ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်​မှု တိုးလာသလို နှာစိတ်လည်း ထန်မိရော။ `ငါ့ညီအတွက် အကောင်းဆုံးပေါ့။ နောက် နှစ်ပတ်ကြာရင် ပြန်တွေ့ကြမယ်။´Chang ရုံးခန်းထဲ ဦးဆောင်ထွက်သွားတော့ ကျွန်တော်လည်း လိုက်ထွက်ကာ အိမ်ပြန်လာလိုက်ပါတယ်။ Gym သွားတဲ့လမ်းမှာ Chang နဲ့ ဘယ်လို အချိတ်အဆက် လုပ်ရမလဲ ကျွန်တော် တွေးမိတယ်။ သူနဲ့ Date ချင်လောက်အောင် ဆွဲ​ဆောင်​မှု ပြင်းသူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုလို ခပ်ဖိုင့်ဖိုင့်ကိုယ်ခန္ဓာမျိုးနဲ့ သူတို့လို ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ငနဲ တွေကို ချိပ်ဖို့ RS ဖန်ဖို့ မလုပ်နိုင်ဘူးဗျာ။
သူတုိ့အတွက် ကို့ရို့ကားယား ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ကျွန်တော် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက် ကြိုးစားပမ်းစား လေ့ကျင့်ကစားတာ အလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျ ယုံကြည်မှု တိုးလာတယ်လေ။ ၀ိတ်ကျ ဖို့အရေး Stationary Bicycle လေးနင်းရတာကို ရင်​ခုန်​သံတွေ အလွန်ပဲ မြန်နေရော။ အစပိုင်းဆိုတော့ဘယ်လိုရပ်ရမလဲ ကျွန်တော်မသိသလို အရှိန်လျော့ဖို့အတွက်လည်း ဗျာများ​နေတယ်​။
`ရပ်...ရပ်တော့၊ မောင်လေးကို ကြည့်ရတာ မူးလဲတော့မယ်´ ကျွန်တော့် နံဘေးကနေ အလားတူ Stationary Bicycle နင်းနေတဲ့ ရင်သားခပ်ထွားထွား တရုတ်မတစ်ယောက်က လှမ်းပြောတယ်လေ။ `ဒီလို နင်းနေတဲ့ အရှိန်က မောင်လေးအတွက် ပုံမှန် မဟုတ်သေးဘူး မြန်နေတယ်။´
`ကျွန်တော် နင်းဖူးပါတယ်ဗျာ´ ကျွန်တော် သက်ပြင်းမောချရင်း စကားပြန်လိုက်တယ်။
`အော်....မ..သဘောပေါက်ပြီ။ လေ့ကျင်ခန်းလုပ်တာတွေ အမြန်ပြီးချင်လို တွန်းလုပ်နေတာ´ အမျိုးသမီးက စိုးရိမ်သလိုပြုံးပြရင်း မျက်ဝန်းတွေကို နှစ်ကြိမ်လောက် မှိတ်လိုက် ဖွင့်လိုက်လုပ်တယ်ဗျ။ `၀ိတ်ချပြီး ရည်​မှန်းချက်​ မြောက်သွားရင် ဘာလုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားလဲ´
ကျွန်တော်လည်း စက်ဘီး အနင်းရပ်ပြီး `ချစ်သူ ရှာမလို့´ ဖြေလိုက်တယ်။
`အို...မ ဖုန်းနံပါတ်​ ယူထားချင်လား?´ အမျိုးသမီးက တခစ်ခစ်ရယ်မောရင်း စကားစတယ်။
ကျွန်တော် workout ကို လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ပြီး `တော်ပါပြီဗျာ.....ကျနော် ဘာလိုချင်လည်း သိပြီးသားပါ´ လို့ပြောလိုက်ရော။
`ဟမ်.....ဘော်ဒါကဏ္ဍပေါ့ ရှင်´ အမျိုးသမီးက အသံစာစာနဲ့ ပြန်ပြောတယ်။
ကျွန်တော် ဆက်မလုပ်ချင်တော့တာနဲ့ ခဏငြိမ်လိုက်ပြီး `မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.....ကျွန်တော့်မှာ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်း မရှိလို့...အဲ မထားလို့ပါ....ပြန်ပြီဗျို့´ ကျွန်တော် ယူစရာရှိတာတွေယူပြီး အိမ်ပြန်လာလိုက်တယ် ရှေ့ဆက်ပွားတာတွေ မကြားချင်ဘူးလေ။
ဒါကိုပဲ အမျိုးသမီးက သူ့ခြေတံတွေကို ဟိုသည်ကြည့်ကာ ပါးစပ်က `အိုကေလေ....Gym လာကစားတဲ့ ဖက်တီးတွေစီက ကြားဖူးနေကြ ကကြိုးကကြောင် အဖြေမျိုးပဲဥစ္စာ။´ ပြောလည်းပြော သူ့ရင်သားက ကျွန်တော့် ရင်အုပ်တွေထက်လှတယ်ဆိုတဲ့ အထာနဲ့ ကော့ပြသေးတာပါ။
ကျွန်တော် အိမ်ကို မြေအောက်ရထားစီးပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်အရောက် ခြေလှမ်း ဆယ့်သုံးလှမ်းစာလောက်မှာ Chang ထိုင်နေတာ ကျွန်တော် မြင်လိုက်ရတော့ ခေါင်းထဲမယ် လင်းကနဲ ဖြစ်သွားရော။ သူ့ နောက်ကနေ အသာလိုက်ကြည့်ဖို့ အတွေးပေါ်လို့လေ။
`အို....လိုက်ကြည့်တာပေါ့....ဘယ်မှာနေတာလဲ ၊ အိမ်ပုံစံက ဘယ်​လိုမျိုးလဲ သိရမယ်။´ တစ်နာရီလောက် အသာလိုက်သွားတော့ Apartment တစ်ခုမှာ လမ်းဆုံးတယ်။ အ​ဆောက်​အဦးကြီးထဲ ကျွန်တော် လိုက်မ၀င်ဖြစ်ဘူး။ ၀င်ပေါက်တံခါးမကြီး အထက်မှာ CCTV တွေက တစ်လုံးမက ချိန်ထားကြတာလေ။ သိရတာကောင်းသား....အတော်လန်းတဲ့ အ​ဆောက်​အဦးကြီးပဲ။ အခုလောလောဆယ် အိမ်ပြန်တာပဲကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော် ကိုယ်ခန္ဓာ ကျစ်လစ်ကြံ့ခိုင်ရေးကိစ္စအပေါ်ပဲ အာရုံစိုက်ကာ အလုပ်များနေခဲ့တယ်။ နည်းပြကလည်းတော် အတူကစားကြသူများကလည်း လုံ့လ၀ီရိယကောင်း ကျနော်ကလည်း အစားအစာကို စနစ်​တကျ စားဖြစ်အောင် မွမ်းမံ ကြိုးစားတာကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း ရည်​မှန်းချက်​ ထားတဲ့အတိုင်း အောင်မြင်လုနီးဖြစ်လာတာပေါ့။ အဆုံးသတ် လှပချိန်ရောက်ဖို့ ကာလကြာဦးမယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်သိပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ရမယ့် ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ကျန်းမာခြင်းရလဒ်က တကယ်တန်ဖိုးထားရမယ့်အရာအဖြစ် တစ်ခုခုပြောင်းလဲလာသလိုပါ။
ကျွန်တော် ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ရေး ​လေ့ကျင့်​ခန်းတွေအကြောင်း စတင်ဖွေရှာလေ့လာသူဖြစ်လာပါတယ်။ ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့ မိဘတွေပိုင်ဆိုင်ထားရတော့ ကျွန်တော့် ဘ၀ကံ ငြိမ်းတယ်။ သူများတွေလို ၀င်ငွေအတွက် အတက်အကျ ကြမ်းတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်စရာမလိုစွာ အလိုက်သင့် အလျားသင့် မိဘအလုပ်တွေကို ကူညီကြီးကြပ်ရုံဆိုတော့လေ။ အခုလည်း ကျန်းမာရေး အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ကာလကြာရှည် လုပ်လာမိရင်း ကာယဗလမောင် တစ်ယောက် အနေအထားဖြစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်​ချက်​ချ ရည်​မှန်း မိပြန်ရော။
ရက်သတ္တပါတ် နှစ်ပတ်ပြည့်တိုင်းတော့ ကျွန်တော့် ဆရာဝန်လေး ထိုင်တဲ့ အလုပ်နေရာစီသွားကာ ကိုယ်​ခန္ဓာ အလေးချိန်၊ အနေအထားတွေကို စစ်ဆေးပြသ နေဆဲပါ။ ကျွန်တော့် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျလာတာ မြန်ဆန်လွန်းလို့ Chang တစ်ယောက် အံ့အားသင့်​နေသလို Gym သွားဖို့ ဘယ်လိုတွေ ဇွဲသန်​ပြီး လှုပ်ရှားဖြစ်လဲလို့ ကျွန်တော့်ကို မေးပါတယ်။
`Gym ကိုသွားတာကပဲ ကျွန်တော့် အတွက် ရှေ့ဆက်ကစားဖို့ ဖြစ်လာတာပါ။ ဘာကြောင့် စူးစူးနစ်​နစ်​ သဘောတကျ ကစားဖြစ်သွားလည်းဆိုတာတော့ အခုထိ ကျွန်တော် မသိဘူး။ ဒီထက်ပိုပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်ကောင်းအောင် ပုံဖော်ဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားမယ်။´ ပခုံးတွေကို တစ်ချက် တွန့်ပြလိုက်ရင်း အဖြေပေးလိုက်တယ်။
Chang က ပြုံးလိုက်ရင်း ` ကောင်းပါပြီ၊ လေ့ကျင့်ချိန်ပြီးရင် ဘယ်လိုခံစားရလဲ? ထပ်ကစားချင်နေသေးလား ဒါမှမဟုတ်​ မိမိကိုယ်​ကိုမိမိတန်ဖိုးထားလိုတဲ့စိတ်ကော မ၀င်လာဘူးလား?´
`ဟုတ်.....ကျွန်တော့် အထင်ကတော့ confidence ကပဲ ရှေ့ဆက်ဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။ တစ်​ခါတစ်​ရံ ကျွန်တော် ကာယဗလသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာနေကြောင်းကို တွေးမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော် ဒီလိုလုပ်ဖို့ အရည်​အ​ချင်းမီပါ့မလားဗျ´
ကျွန်တော့် ပြောစကားကို သေချာနားထောင်သလို ထပ်ပြီး Chang အံသြဟန်ပြခဲ့ပါတယ်။ `ကောင်းပါတယ်။ သွေးနမူနာ နည်းနည်းယူထားဦးမယ်နော် Test လုပ်ဖို့။ ရလဒ်​ကိုတော့ နောက်နှစ်ပတ်ကြာရင် ပြောပြပါမယ် ညီလိုအပ်ရင်။ Information ရဖို့ကတော့ ပုံစံသုံးမျိုး ရွေးလို့ရမယ်။ တစ်မျိုးက ညီလေးရဲ့ အီးမေးလ်ကို ပို့ပေးမယ် သို့မဟုတ် ညီလေးက မေးလ်နဲ့ လှမ်းမေးလို့ရတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်မျိုးက ညီလေး ဒီကိုလာပြီး Result ကြည့်နိုင်တယ်။အခြား ထူးထူးခြားခြား ကျန်းမာရေး ပြဿနာရှိမရှိ စစ်ဖို့ပါကွာ။ ဒါမှ လေ့ကျင့်မှု ခပ်ပြင်းပြင်း လုပ်တဲ့အခါ အထိအခိုက်မရှိမှာ။´
`အဲဒါဆိုလည်း လုပ်လေ.....ကျွန်တော်ကတော့ ဒေါက်တာဆေးခန်းလာလိုက်တာ ပိုအဆင်ပြေတယ်´
ဒေါက်တာ Chang က “Smart move you got.” လို့ဆိုကာ နှစ်လိုလက်ရ ပြုံးပါတယ်။
ဒေါက်တာ Chang ရဲ့ အပြုံးကတော်တော် စွဲဆောင်မှုရှိတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ နည်းနည်းတောင် horny ဖြစ်သလို ခံစားရပါတယ်။ ဒေါက်တာရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်အပေါ် ခံစားလိုက်ရတဲ့ စိတ်ကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။
`တကယ်ကြီးပေါ့ ၊ အာ.....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောသင့်တာပေါ့နော်´
`လာ...ညီလေး....မင်းရဲ့သွေးဖောက်ယူဖို့ သူနာပြုရှိတဲ့အခန်းကို ကိုယ်ခေါ်သွားမယ်´
`နောက် နှစ်ပတ်ကြာရင် တွေ့ကြတာပေါ့´
ဒေါက်တာ Chang ကထပ်မံပြုံးပြရင်းနှုတ်ဆက်တော့ ကျွန်တော်လည်း လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်ပြီး ခပ်လေးလေး အိမ်ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။
ရက်သတ္တပါတ် နှစ်ပတ်အကြာ ဒေါက်တာ Chang ရဲ့ ဆေးခန်းရောက်တော့ ကျွန်တော် စစ်ဆေးထားတဲ့ သွေးအဖြေ ရလဒ်ကို သိရတယ် လေ့ကျင့်ခန်း အလုံးစုံကစားဖို့ သင့်တော်သည်တဲ့။ သူနာပြုဆရာမက ဒေါက်တာ Chang မနေ့က နေမကောင်းလို့ ဆေးခန်းမလာကြောင်း ကျွန်တော့်ကို ပြောပြတယ်။
ခပ်လန်းလန်း နည်းပြလေးနဲ့ Gym မှာ အလုပ်များချိန် ကျွန်တော့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ ရလဒ်အပေါ် သူ အံ့အားတသင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အုပ်စုလိုက် လေ့ကျင့်ကစားတဲ့ အစီအစဉ်​မှာ ကျွန်တော် ၀င်ကစားဖို့မလိုတော့သလို Weight ထပ်ချဖို့ မလိုတော့ဘူးပြောတယ်လေ။ ကျွန်တော် ၀ိတ်ချဖို့ ဘေးကနေ ကူညီလေ့ကျင့်ပေးရတာ သူပျော်သတဲ့၊ ရလဒ်က သိသိသာသာ တိုးတက်​လာတယ်​ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော် ဘေးကပ်လျက်အခန်းထဲ လျှောက်သွားရင်း တကိုယ်ရည် အုပ်စုမဲ့ကစားဖို့ စာရင်းသွားသွင်းလိုက်တယ်။
ကျစ်​ကျစ်​လျစ်​လျစ်​ သန်မာကြံ့ခိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို လေးလအကြာမှာ ကျွန်တော် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လေးလံနှေးကွေးတဲ့ ဘ၀ကနေ ခပ်တောင့်တောင့် သူငယ်​ချင်း အသစ်တွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရော။ ဒါပေမဲ့ ဒေါက်တာ Chang တစ်ယောက်သာ အခြားသူတွေထက် စွဲငြိမိတာ အမှန်ပါပဲ။ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ ဘ၀စတိုင်လ်၊ အထွေထွေ ကျန်းမာ​ရေးရယ် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မျှတတဲ့ အစားအသောက်တွေအကြောင်း ကျွန်တော် လေ့လာသင်ကြားခဲ့တယ်။
ဒေါက်တာ Chang ဆေးခန်းကိုသွား စစ်ဆေးခန်းလေးထဲမှာသူ့ကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။ အခန်းလေးထဲ ၀င်လာတော့ ကျွန်တော့် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းအပေါ် မြင်တွေ့သွားပြီး သူ တော်တော်တုန်​လှုပ်​သွားရော။
`Uh....တော်တော် အပြောင်းအလဲကြီးကို ညီလုပ်နိုင်ခဲ့တာပဲကွ၊ ညီ ကြိုးစားလုပ်နိုင်ခဲ့တာ အကို ချီးကျူးပါတယ်​၊ ဂုဏ်လည်းယူတယ်ကွာ´ ကျွန်တော့် ပခုံးကို သူဆုပ်ကိုင်ရင်း သဘောတကျ ရယ်မောတယ်ဗျ။
`ဒေါက်တာ့ကို ​မေးခွန်း တစ်ခုလောက် မေးချင်လို့...´ တွန့်ဆုတ်တာမျိုးမရှိဘဲ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က လွှတ်ကနဲထွက်သွားတယ်။
ဒေါက်တာ Chang ကလည်း အေးဆေး....`Sure´တဲ့။
`ဒေါက်တာ့ကို အပြင်ခေါ်သွားလို့ရမလား?´ ကျွန်တော် ရယ်ကျဲကျဲလုပ်ကာ စကားစလိုက်တယ်။
ဒေါက်တာ Chang ကြည့်ရတာ ဇ​ဝေဇ၀ါ ဖြစ်သွားပုံရတယ်။ `ဆောရီး.. ...ညီလေး ဘာပြောလိုက်တာလဲ သဘောမပေါက်ဘူး။ အစ်ကို့ကို ရှင်းအောင်ပြောပြပါလား။´
`စနေနေ့ကြရင် ဒေါက်တာ့ကို ညစာအတူစားဖို့ အပြင်ခေါ်သွားချင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောတာပါ။ ကျွန်တော့် ပုံစံ ပြောင်းလဲသွားအောင် ဒေါက်တာ ကူညီပေးခဲ့တာလေ။ ကျွန်တော့်အသွင်အပြင်သစ်ကို ကျွန်တော် တကယ်သဘောကျတယ်။ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပိုသိနိုင်တာပေါ့ဗျ။ အဆင်ပြေမလား? ဒေါက်တာ အချိန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် အကြိုက် စားသောက်ဆိုင်ကို ခေါ်သွားပါ့မယ်။´
ဒေါက်တာ Chang တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဖိတ်ခေါ်မှုအပေါ် စိတ်မသက်မသာခံစားရတယ်နဲ့တူတယ် `အာ....အဆင်မပြေလောက်ဘူးကွ၊ ညီလေး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် ရလဒ်ကောင်းလာတာကို......အစ်ကိုနဲ့ Date ဖို့ပြောနေတာ နားမလည်ဘူး၊ Dating အတွက်ဆို မြို့ထဲမှာ အဆင်ချောသူတွေ အများကြီးပဲဟာ။´
`ဒေါက်တာက ပိုမိုက်လို့ပေါ့ဗျာ၊ ဒီလိုပဲလေ သဘောကျမိလို့၊ ကျွန်တော်တို့တွေ သူငယ်​ချင်းအဖြစ် ဟန်ဆောင်လို့ရတာပဲ အခြားသူတွေ သံသယ၀င်မနေအောင် [Sighed] No or yes?´
ဒေါက်တာ Chang က ရယ်တယ်ဗျ။ `ဆောရီးကွာ....အဲတာကို ငြင်းပယ်ပါရစေ။ ညီလေးက ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ အခုသတိထားမိနေပြီ။ ဒီကိစ္စကို အစ်ကို တောင်းပန်ပါတယ်။ အကိုတို့ ပြန်ကြစို့လေ။ နောက်ဆေးခန်းမှာ ဘယ်အချိန်ဂျူတီဝင်ရမလဲ ကြည့်ရဦးမယ်။´
`ကျွန်တော်သိတယ်....ဒီအချိန်ပြီးရင် တွေ့ဖို့ မသေချာတော့ဘူးမဟုတ်လား? ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား? အရင်​က တစ်ခါမှ လိင်တူခြင်း မပတ်သက်ခဲ့ဖူးဘူးပေါ့။ ဒီအခန်းထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကို စောင့်ကြည့်နေသူ တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။´ ကျွန်တော် မကြိုက်တာကို ခပ်တိုးတိုး အတွန့်တက်ပစ်တယ်။
ဒေါက်တာ Chang အသက်ခပ်ပြင်းပြင်းရှုလိုက်ရင်း `ကြည့်.....လိင်တူခြင်း ပတ်သက်ရတာ အရင်က Gay ဖြစ်နေရတာကို ပျော်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာက Gay တွေအတွက် စည်းကမ်း အသစ်တွေ ထုတ်ထားတယ်ကွ။ မသင်္ကာစရာ တတွဲတွဲ သာယာခွင့်မရှိဘူး။ သူဌေးသာ ဒီအကြောင်းကို သိသွားရင် ကိုယ်အလုပ်ဖြုတ်ခံရမှာပါ။ လိင်တူ/လိင်​ကွဲ ဘယ်လိုဆက်ဆံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ အမျိုးသားခြင်းတော့ မဖြစ်ရဘူးပေါ့။ ´
`ဟား....ဟား....ဟား´ ကျွန်တော် ရယ်ပစ်လိုက်တယ်။
ဒေါက်တာ Chang က `ဒါ ရယ်​စရာ မဟုတ်ဘူးကွ။ တကယ်လို့ မင်းပြုလုပ်ခဲ့ရင် မင်းချစ်ရတဲ့သူတွေ သိုမဟုတ် အခြားလူနာတွေကို မင်း သွေးလှူ လို့မရဘူး အရိုးခံအတိုင်းပြောပြတာ။ ဒါဟာ ဥပဒေပဲ .....ဆောရီး ညီလေး´
`ကျွန်တော့်အချိန်တွေဖြုန်းသလို ဖြစ်နေတာပေါ့ ဒီနေ့။ မှန်တယ် ဟုတ်?´ ကျွန်တော် မကြေမလည် စကားနာထိုးမိရော။
ဒေါက်တာ Chang လည်း ၀မ်းပန်းတနည်း ခေါင်းငြိမ့်ပြပါရဲ့။
`ကျွန်တော် ကြားဖူးသမျှ ထဲ အတော်ဆိုးရွားတဲ့ ဥပဒေပဲ။ ဒါဆို လက်သမားလုပ်ကြတာကော? အဲ့ဒါကော သက်ဆိုင်တာပဲလား´
ဒေါက်တာ Chang တစ်ယောက် ကျွန်တော့် ပါးစပ်ကနေ အတည်အခန့်စကားလုံးတွေ ထုတ်ပြောလာတာကြောင့် အလန့်တကြားဖြစ်သွားပုံရတယ် ` Uh.....မဟုတ်ဘူး.. .ညီပြောတာ အဆင်တော့ ​ပြေပါတယ်​.. .ဟို...´ တုန်တုန်ရီရီ စကားပြန်ပြောသဗျ။
`ဒါဆို ကျွန်တော်နဲ့အတူ အပြင်ခဏလိုက်မယ်ဟုတ်? ကန့်သတ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေအကြောင်း ပိုသိအောင် ကျွန်တော့်ကို ကူညီလို့ ​ကျေးဇူးတင်စကား သေချာပြောချင်လို့ပါ´ကျွန်တော် သရော်တော်တော် လေသံမျိုးနဲ့ မရည်ရွယ်ဘဲ သူ့ကို ထပ်မံ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် လိင်ကိစ္စ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုခုပြုလုပ်ဖို့ မကြိုးစားရဘူးဆိုတဲ့ ကတိဖြင့် ဒေါက်တာ Chang ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ သဘောတူတယ်။ `အင်း...လေ ဒီရက်တွေအတွင်း အစ်ကိုအားပါတယ်။´
စနေနေ့ရောက်တော့ ကျွန်တော် စားနေကြ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ဒေါက်တာ Chang နဲ့ ကျွန်တော် စကားစမြည်ပြောကြရုံပဲဆိုကာ ချိန်း​တွေ့ဖြစ်ကြပါတယ်။ အသားပေါင်းလို ပေါင်းထားတဲ့ အစားအစာ အတော်များများကို စားပစ်လိုက်တာပဲ။
ဒီလိုကြတော့ တစ်ယောက်ရဲ့ မသိမသာ ခပ်ရူးရူးအကြောင်းလေးတွေ တစ်ယောက်က သိလာကြတယ်ဗျ။ ဒေါက်တာ Chang ခမျာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ် ထွားထွားရယ် တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားဆိုင်တွေကို ကြည့်ကာ သဘောခွေ့လာပုံပေါက်တယ်။
ကျွန်တော်နေတဲ့ ကွန်ဒိုအခန်းသစ်ကို ရောက်တော့ အိပ်ခန်းထဲ တန်းမခေါ်သွားဖြစ်ဘဲ အခြား ပန်းချီကားတွေ၊ စာအုပ်တွေ၊ ရုပ်ရှင်/သီချင်း DVD ခွေတွေကို ဒေါက်တာ Chang အား လှည့်ပတ်ပြတာပေါ့။ ရုတ်တရက် သူ့ပေါင်ခွဆုံပေါ် အကြည့်အရောက် မိုးကာတဲ ဖြစ်နေတာကြောင့် `ဟေး....ဒီကိစ္စက ဘယ်လိုရှင်းမလဲ ပြောဦး´ လို့ သေချာ စိုက်ကြည့်ပေးရင်း မေးပစ်လိုက်တယ်။
ဒေါက်တာ Chang တခစ်ခစ်ရယ်မောရင်း `လက်သမားလုပ်ရုံပေါ့ ဒါပဲလေ၊ ညီလေးနဲ့ တစ်ကြိမ်လောက် အတူလုပ်ကြမယ်....ပြီးရင်တော့ ထပ်မလုပ်တော့ဘူး´ လို့ပြန်ဖြေတယ်။
ကျွန်တော် သူ့တကိုယ်လုံး သိမ်းကျုံး ကြည့်ပြီးနောက် ဒေါက်တာ Chang ဘောင်းဘီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ် ဆွဲချွတ်ချမိရော။ တဖြည်းဖြည်း အားရစရာ ငှက်ပျောသီးကြီး ထိုးထိုးထောင်ထောင်နှင့် ပေါ်လာပါတယ်။ ၇လက်မလောက်ရှည်မယ်။
လိင်တံ ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့် ငပဲက အစွမ်းကုန် မာတောင့်တာတောင် ၅လက်မကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်။ စိတ်မကောင်းသလို အကြည့်နဲ့ တချက်ငေးပြီး ကြီးထွားဖို့ သဘောသဘာဝနဲ့ အနေအထိုင်အကြောင်း ကျွန်တော့်ကို ဒေါက်တာ Chang က အကြံဥာဏ်​ပေးသဗျ။ သူ့ အိုင်ဒီယာ အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောရတာပေါ့။
`ညီလေး ငပဲကိုကြည့်...အား....မိုက်တယ်ကွာ´ နှစ်ဦးသား အ၀တ်မဲ့ ၀တ်လစ်စလစ်နဲ့ လက်သမားလုပ်ကြတာ ဖြေးဖြေးမှန်မှန် နာရီဝက်နည်းပါးကြာသလို စိတ်မာန်ထရင်း ပါးစပ်က ညည်းညူသံတွေ ညံလာတယ်။
ဒေါက်တာ Chang အသက်ရှူ သံပြင်းစွာဖြင့် `Yeah..အကိုတို့ နောက်တစ်ကြိမ်လောက် လုပ်ဖြစ်ကြမှာပါ...အာ´
“Like… Fucking?” ပါးစပ်က ညည်းညူသံ တဆတ်ဆတ် ထွက်ရင်း လက်သမားဆက်လုပ်ကြတယ်။
ဒေါက်တာ Chang က `မဟုတ်ပါဘူးကွာ....လက်သမားပေါ့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ပြန်တော့မယ် ညီလေး၊ တခါတလေ အစ်ကို့ရုံးခန်းမှာ တွေ့ကြတာပေါ့ ´ လို့ဆိုတယ်။
စကားပြောလည်းပြော ကျွန်တော့် ပါးပြင်ကို အနမ်းတစ်ချက်ပေးကာ ဘောင်းဘီပြန်ဆွဲတင် ၀တ်ပြီး ပြန်ချသွားရောဗျာ။
ကျွန်တော့်ကြိုးစားမှုတွေကော အချိန်တွေကော အလဟဿဖြစ်ရသလို ကာလရှည် RS တစ်ခု အဆက်အဆံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်က ဟာသဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အပေါ် ဒေါက်တာ Chang အာရုံမပြတ် ဂရုပြုတာကြာရှည်အောင် နည်းလမ်း တစ်ခုခုရှာကြံရမယ်လေ။
ဒေါက်တာ Chang ရဲ့မျက်ဝန်းထဲ အမြဲတမ်း Hot and Sexy ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော် ဖြစ်နေစေရမယ်လေ ....ဟုတ်တယ်။
Alex Aung (10 June 2018)
Posted by Alex Aung at 12:01 PM No comments:
Gay မျိုးဆက်သစ်များ သိမှတ်ဖွယ်
*** SOGIE, Love and Sex of LGBT, ကာလသားရောဂါနှင့် အခြား ကူးစက်ရောဂါများ***
(LGBT များ အထူးအားဖြင့် Gay မျိုးဆက်သစ်များ သိမှတ်ဖွယ်)
ရေးစရာ၊ တွေးစရာ၊ ဆွေးနွေးစရာတွေကလည်း များလိုက်တာ၊ အိမ်မှာနေရင်းစာဖတ်၊ အင်တာနက်သုံးနေပေမယ့် နည်းပညာခေတ်ဆိုတော့ အိမ်မှာထိုင်နေရင်းကို ကမ္ဘာပတ်လို့ရနေတဲ့ ခေတ်ဖြစ်နေတော့တာကိုး… ဘုန်းကြီးကမုဒိမ်းကျင့်တဲ့ကိစ္စ၊ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ စက်ဘီးခိုးတဲ့ကိစ္စ၊ ဟော မန္တလေးမြို့ကြီးမှာ ဓားဘုရင်တွေ သောင်းကြမ်းတဲ့ကိစ္စ၊ ဥပဒေအရာရှိနဲ့ တပ်အရာရှိတို့ မိသားစုက အိမ်အကူမိန်းမကို သေစေတဲ့အထိ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ ကိစ္စ စတဲ့ ကိစ္စများမြှောင် သည်လူ့ဘောင်မှာ ကိုယ်တွေလို မျိုးတူတွေရဲ့ ကိစ္စကလည်း တယ်မသေးတာပါကလား။
အခုဖတ်နေတဲ့ အဘွားကြီးရေ…. ဆိုတဲ့ ၀တ္တုတိုပေါင်းချုပ်ထဲမှာ လျှာဆိုတဲ့ဝတ္တုလေး ပါလာတယ်။ Gay တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ် (လိင်စိတ်)ကို ချိန်ခွင်လျှာလေးနဲ့ ယဉ်ယဉ်ကလေး ချိန်ထိုးသွားတယ်။ ယနေ့ခေတ်ပြောနေကြတဲ့ အိပ်ယာပေါ်က ကိစ္စလို့ ပြောတဲ့ Top၊ Bottom ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို ပြောသွားတာပါပဲ။
“ ဦးတို့လို လောကမှာ ဘယ်သူကတော့ ယောက်ျားနေရာကနေသူ၊ ဘယ်ဝါကတော့ မိန်းမလိုနေရာကနေသူဆိုတာ အမြဲတမ်းမမှန်ပါဘူးကွယ်၊ ချိန်ခွင်လေးတွေကို မင်းမြင်ဖူးရဲ့လား… အဲ့သည့်ချိန်ခွင်လေးတွေရဲ့ အလယ်မှာ လျှာဆိုတဲ့ ငုတ်တိုလေးတစ်ခုရှိတယ်လေ၊ အဲ့သည့်လျှာလေးက ဟိုဘက်က လေးရင် ဟိုဘက်စောင်းသွားပြီး၊ ဒီဘက်ကလေးရင်လည်း ဒီဘက်ကို စောင်းလာမှာပါ၊ အလယ်မှာ မတ်မတ်ရပ်နေဖို့ဆိုတာကတော့…..” ဆိုပြီး သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ကလေး ရေးသွားတယ်။
SOGIE ဆိုတဲ့ စကားလုံးအကြောင်းကို ရေရေလည်လည် မွတ်မွတ်ကျေ တတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်တန်းတက်မှရလိမ့်မယ် ကိုယ်တွေတောင် ဒေါင်ချာဆိုင်းနေအောင် လည်နေတုန်းရှိပါသေးတယ်။
SOGIE ဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာ GIE ကို အသာထား၊ SO ကို ရှင်းလင်းကြည့်ကြပါစို့ Sex ဆိုတဲ့စကားလုံး Sexual Orientation ဆိုတဲ့ စကားလုံး... တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး သာယာတာ တိမ်းညွတ်၊ကိုင်းညွှတ်တာ… မြင်နေရရင် ကြည်နူးတာ၊ အတူရှိနေရတာကို ရင်ခုန်တာ၊ အသံလေးကိုသာယာတာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာလေးကို နှစ်လိုတာ… ကိုင်း ဘယ်လိုစကားလုံးတွေနဲ့ပဲ ပြောပြော အချစ်ပါ။ ရင်ခုန်တာပါ၊ တပ်မက်တာပါ၊ တွယ်တာတာပါ စသဖြင့် စကားလုံးတွေ ဘယ်လိုပဲပြောပြော ကိုယ်က ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ သာယာလိုစိတ်ရှိတာလည်းဆိုတာ အရေးကြီးသွားပါတယ်။ ရိုးရိုးလေး ပြောရရင် ကိုယ် ဘယ်လိုလူမျိုးကို ချစ်သလဲပေါ့လေ။
စောစောကပြောခဲ့ပြီးပြီ အချစ်ဆိုတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိစ္စပေါ့။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတယ် SOGIE ဆိုတာ သူငယ်ချင်းရယ် ခြောက်လို့ကောင်းအောင်ပြောထားတဲ့ စကားလုံးပါတဲ့ သည်ထက် နက်နဲတဲ့ ကိစ္စတွေ အချစ်အနောက်မှာရှိသေးတယ်တဲ့။
သည်ရက်ထဲမှာ ကိုယ့် Friend list ထဲက ကလေးတစ်ယောက်တင်ထားတာတွေ့တယ်။ သူတို့စုံတွဲ(Gay)စုံတွဲကို ဘယ်သူကယောက်ျားလဲ၊ ဘယ်သူက မိန်းမလဲလို့ မေးလို့ စိတ်တိုတယ်တဲ့။ ကိုယ်လည်း စီနီယာတွေဆီက ကြားတဲ့စကားကို ပြောပြလိုက်တယ်။ တူနှစ်ချောင်းမြင်ရက်နဲ့ ဘယ်သူက ခက်ရင်း ဘယ်သူက ဇွန်းလည်း မေးစရာလားလို့ ပြောလိုက်လို့ မြှောက်ပေးလိုက်တယ်။
ညနေကျတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရင်လာဖွင့်တယ်။ သူတို့ ဂေးလ်စုံတွဲရဲ့ အိပ်ယာပေါ်က ကိစ္စတွေအကြောင်းပေါ့။ Top ပါလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူထားတဲ့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်ယာပေါ်က အခက်အခဲကိုပေါ့။ အကျယ်တ၀င့်ပြောပြရရင် 18+တွေပါ ပါကုန်လိမ့်မယ် အဓိကက သည်အကြောင်းအရာတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာကို ပြောပြချင်တာပါ။
စောစောက စာအုပ်ထဲကလို ချိန်ခွင်လျှာနဲ့ပဲ တွေးကြည့်ကြတာပေါ့၊ SOGIE ဆိုတာ တယ်ရှုပ်တယ်လို့ပြောတယ်မလား၊ လိင်စိတ်ဆိုတာ ဝေခွဲမရပါပဲ နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့ နာကြပါလို့ ပြောပါရစေ၊ မွေးလာကတည်းက သည်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံတွေနဲ့မွေးလာကြတယ်။ ပုထုဇဉ်တွေလေ… အမြဲတစေ လိင်စိတ်ဆိုတာ တသမတ်တည်းရှိနိုင်မတဲ့လား ထူးခြားတဲ့ ဒူးယားတွေ မဟုတ်ဘူးလား။ ယောက်ျားမိန်းမ သံဝါသပြုကြမယ်ဆိုရင်တောင်မှ မှောက်ယက်လေး၊ ပက်လက်လေး၊ မတ်တတ်လေးဆိုတာရှိတတ်သေးတာပဲ သည်ယောက်ျားနှစ်ယောက်၊ မိန်းမနှစ်ယောက် ကာမစက်ယှက်ကြတဲ့အခါ… ရှုတ်ထွေးပွေလီမှုမရှိဘူးလို့ပြောရင် အင်္ဂလန်ဆိုတဲ့ စကားတောင် ထွက်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ (နားနဲမနာ၊ ဖ၀ါးနဲ့ နာလို့ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်)
အဲ့သည်တော့ ယောက်ျားနေရာက နေလိုတဲ့အခါရှိမယ်၊ မိန်းမနေရာက နေလိုတဲ့အခါရှိမယ်၊ Love is not equal sex ပါ၊ အချစ်ဆိုတာ သံဝါသပြုဖို့ တစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တာပဲ။ တစ်ကန့်စီပဲလေ၊ လူတွေရဲ့ ပညတ်ချက်တွေကြောင့်သာ ခြေချုပ်မိနေကြပေမယ့် အိမ်မက်ထဲမှာ ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ကိုယ့်ရည်းစား၊ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်မဟုတ်တဲ့သူနဲ့ ဘယ်လိုတွေ သာယာတတ်ကြသလဲဆိုတာ ၀န်မခံရင်သာရှိမယ် အဲ့သည်လို အိမ်မက် မမက်ဖူးတဲ့သူရှိနိုင်ပါ့မလား ကိုယ့်ကိုယ်ကို စာမေးပွဲစစ်ကြည့်ကြပေါ့လေ။
ဟိုးတစ်လောက ဂျူနီယာ gay လေးနှစ်ယောက် ပြတ်ဆဲသွားကြတယ်။ သူတို့ပြောသလို uke ပေါ့လေ အဲ့သည့်ကလေးနဲ့က ရင်းနှီးနေတော့ နင့်အမျိုးသားကလေ၊ နင့်ယောက်ျားကလေ ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လက်တွဲဖော်ကို နာမ်စားသုံးပြီး ပြောဖြစ်တယ်။ မကြာပါဘူး ပြတ်ဆဲပြီးသကာလ သူ့လက်တွဲဖော်ရဲ့ မိန်းမပုံစံအ၀တ်အစားတွေနဲ့ တက်လာတာတွေမြင်ရတော့ ကိုယ်တွေပြောပြောနေတဲ့ SOGIE ကြီး ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံဖြစ်တော့တာပဲ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ချစ်ကြတာ အိပ်ယာပေါ်က Role တွေ မလိုပါဘူးလို့ ဘယ်လိုပဲပြောနေပါစေ တကယ့်တကယ် လက်တွေ့ဘ၀မှာ ဘာတွေ ပြဿနာ တက်နေကြသလဲဆိုရင်….
Love and Sex of LGBT
အချစ်ဆိုတဲ့ အရာ၊ ကိုယ်တွေ စာသင်ခဲ့သလိုပေါ့ အချစ်ရဲ့ အခြားတစ်ဖက်က လက်ထပ်ခြင်း၊ လက်ထပ်ခြင်းရဲ့ အခြားတစ်ဖက်က ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခြင်း၊ နက်နက်နဲနဲပြောရရင် သံဝါသပြုခြင်း၊ မေထုန်မှီဝဲခြင်း၊ ကာမဆက်ယှက်ခြင်းပေါ့ အင်မတန်မှ ရှုတ်ထွေးလှတဲ့ လောကကြီးမှာမှ ရှုတ်ရှုတ်ထွေးထွေး လိင်တူချစ်ခြင်းဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ချစ်ပါလို့ အစိုးမရတဲ့ကြားထဲ လူနှစ်ဦးချစ်မိသွားပြီ… ကဲ ချစ်ခြင်းရဲ့ အခြားတစ်ဖက်ကိုရောက်ကြပြီ… အဲ့သည့်မှာ ပြဿနာ တတ်တော့တာပဲ (အချစ်အကြောင်းပဲပြောပါ ဘယ့်နှယ့် အိပ်ယာပေါ်က ကိစ္စတွေကို ပြောနေသလဲလို့ စိတ်မစောလိုက်ပါနဲ့ ကြုံလာရမယ့် အရာတွေရှိနေတာမို့ပါ) စောစောက ပြောတဲ့ top ဆိုတဲ့နှစ်ယောက်၊ Bot ဆိုတဲ့နှစ်ယောက် ချစ်ကြပါပြီတဲ့… ဘယ်လိုစခန်းသွားကြမလဲ…
ကိုယ့်ကို ရင်လာဖွင့်တော့ တစ်ခွန်းတော့ ပြောလိုက်ပါတယ်၊ ပညာသင်ခါ မရှက်ရာ၊ ကုန်ရောင်းဝယ်ရာ မရှက်ရာ၊ မေထုန်မှီရာ မရှက်ရာလို့… ချစ်ကြပြီဆိုမှတော့ ကာမဆက်ယှက်ပြီ၊ ထိုးသွင်းဆက်ဆံကြပြီ… အဲ့သည့်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လက်မခံနိုင်ဖြစ်ကြပြီဆိုရင် ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲ။ (ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြပါကုန်)
ကာလသားရောဂါနှင့် အခြား ကူးစက်ရောဂါများ…
အချစ်ရဲ့ အခြားတစ်ဖက်ကို နယ်ကျွံမိတော့ နှစ်ဦးသား အဆင်မပြေကြတော့ဘူး၊ ချစ်တာက နှလုံးသားက ဒါပေမယ့် မွေးရာပါ ပါလာတဲ့ အသားပိုလေးရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကလည်းရှိပြန်… အိမ်ကွင်းမှာ ကန်လို့မရတော့ အဝေးကွင်းကို ကန်ကြပါပြီတဲ့… မတူဘူးနော် နှလုံးသားနဲ့ လိင်အင်္ဂါဆိုတာ သူ့ဆန္ဒနဲ့ သူ… ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်မလိုလားကြတဲ့ အချစ်နဲ့ မောင်မလာ မောင်သာငတ် မောင့်နေရာ လူမလပ်ဆိုတဲ့ လိင်အင်္ဂါနဲ့ စစ်ပွဲတွေဖြစ်ကြပြီ။
သည်လိုနဲ့ Grindr တို့၊ Blued တို့ကနေ ကိုယ့်အတွက်တစ်ခါသုံး အာသာပြေတွေရှာကြပြီ။ သည်နေ့ခေတ်ကြီးမှာ တိုးတက်ခြင်းနဲ့အတူ ကပ်လျက်ပါလာတဲ့ အန္တရာယ်တွေဆိုတာကလည်း အများကြီးကိုး…
အဲ့သည်တော့ အကာအကွယ်သုံးပါတယ်ဆိုပေသည့် ဒွါရ ကိုးပေါက်မှာ သုံးလို့ရသမျှ အပေါက်တွေ အကုန်သုံး အတတ်တွေ ဆန်းကုန်ကြပြီ။ အိမ်ကွင်းမှာ မကန်ရသမျှ အဝေးကွင်းမှာ ကန်ကုန်ကြပြီ။
သည်နေရာမှာ စုံတွဲတွေသာမက အခြားသော တစ်ကိုယ်တည်းကျင်လည်နေကြတဲ့ gay တွေကိုပါ အန္တရာယ်ကို သတိပြုစေချင်တာပါ။
စအိုနဲ့ သာမက ပါးစပ်နဲ့ပါ ဆက်ဆံကြတယ်။ HIV ကူးစက်ခံထားရတဲ့ သူတစ်ယောက်က ပြောပြဖူးတယ်။ ပါးစပ်နဲ့ပဲ သူဆက်ဆံတာပါတဲ့ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုကူးစက်သွားတယ်ဆိုတာ သူမသိပါဘူးတဲ့။ နောက် စအိုနဲ့ ဆက်ဆံချိန်မှာသာ ကွန်ဒုံသုံးပေမယ့် ပါးစပ်နဲ့ ဆက်ဆံချိန်မှာ မသုံးဘူးတဲ့။ အဲ့သည်လို ရှုတ်ထွေးပွေလီတဲ့ သည်လောကမှာ ပထမဆုံးဆိုတဲ့ အကြိမ်ကနေ ကူးစက်ခံလိုက်ရရင် ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ဘူး။
ကိုယ်ချစ်တာက တစ်ယောက် နယ်ဝေးစီဖြစ်နေကြလို့၊ သူက လက်မခံလို့ စသဖြင့် စသဖြင့်တွေအပြင်၊ ရည်းစားမရှိပါဘူးဆိုပြီး အခု GS လို့ခေါ်ကြတဲ့ အတတ်ဆန်းကိစ္စတွေကို တွေးကြည့်ကြစမ်းပါ… ဘယ်လောက်များ ကြောက်စရာကောင်းလိုက်ပါသလဲ။ ကာလသားရောဂါ၊ HIV နဲ့ အခြားအခြားသော ကူးစက်ရောဂါတွေ ဘယ်လောက်များ ပွားလိုက်မလဲ…
ဟိုးတလောက နာမည်ကြီးသွားတဲ့ မယ်လိမ့်လုံ ကိစ္စမျိုးဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ကတော့ HIV awareness တွေ လုပ်နေပါရဲ့နဲ့ ကွန်ဒုံမသုံးတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ သည်လိုလူမျိုးတွေကြောင့် ဘ၀ပျက်ခဲ့ရတဲ့ သူနှစ်ယောက်ကိုကြားရတော့ ကိုယ် တအံတသြနဲ့ ပြောစရာ စကားမဲ့သွားလောက်အောင် ၀မ်းနည်းခဲ့ရဖူးပါတယ်။
တစ်ကြိမ်တစ်ခါ မှားခဲ့တဲ့ အမှားကြောင့် ပေးဆပ်ရမယ့် တန်ဖိုးကလည်းကြီးမားလိုက်လေခြင်း… တစ်ခဏနဲ့ တစ်ဘ၀ မလဲမိစေချင်ဘူး။
SOGIE, Love and Sex of LGBT, ကာလသားရောဂါနှင့် အခြား ကူးစက်ရောဂါများ
ပြောချင်တဲ့စကားတွေ ထွေရာလေးပါမို့လို့ ရောထွေးသွားပါလိမ့်မယ် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်စေချင်တာပါ။ အဲ့သည်တော့ လိင်တူနှစ်ဦးချစ်ကြပြီဆိုရင် အိပ်ယာထဲက ကိစ္စတွေကို ကြိုတင်တွေးကြည့်ပါ ချိန်ခွင်လျှာလေးလို ဟိုဖက်သည်ဖက် ယိမ်းတဲ့အခါရှိလိမ့်မယ်၊ ရှိလည်းရှိကြတယ်။ ချစ်လို့ဘ၀တစ်ခုလုံး ပုံအပ်ခဲ့ကြပြီးပြီပဲ role တွေခွဲလိုက်လို့ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူမှ မြင့်မြတ်မသွားပါဘူး၊ SOGIE ဆိုတာ ပညတ်ချက်တစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ဟာ သံတုံး၊ သံခဲမဟုတ်တဲ့ လူပါ ကိုယ့်အိမ်မှာ အစာ၀၀မကျွေးရင် အပြင်ထွက်စားကြမှာ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ သဘာဝပဲ သည်တော့ ညှိနှိုင်းကြပေါ့လေ။ ညှိလို့လည်း မရဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့် ရှောင်နိုင်ရင်ရှောင်၊ မရှောင်နိုင်ရင်ဆောင်တဲ့… အဲ့သည့်စကားက အလကားထားတာ မဟုတ်ပါဘူး မျက်စိနဲ့ကြည့်ယုံနဲ့ ဘယ်သူကသန့်ရှင်းပါတယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ပါ သတိတစ်ချက် လစ်တာနဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံး ပစ်ရတတ်ပါတယ်။ ရှောင်တာက အကောင်းဆုံးပေါ့လေ… ဆောင်တဲ့သူတောင် ကံမကောင်းတဲ့အခါ ပေါက်ပြဲ ဒိတ်ကုန် မိပြီး ထိချင်ထိသေးတာပဲ။ သည်တော့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ကိုယ် အဆင်ပြေကြပါစေလို့ပဲ အကြံပြုရတာပေါ့။
တကယ်တော့ ရှုတ်ထွေးလှတဲ့ လူ့ဘ၀မှာ ပွေလီနေတာကိုက ခက်ကြတာပါပဲ…
လိင်တူ စုံတွဲများ အပေးအယူညီမျှ ဖေးကူ သူနဲ့ ကျွန်မ ဆိုတာမျိုး ညီညွတ်ကြပါစေ…
ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူများအနေဖြင့်လည်း လူ့စည်းဘီလူးစည်းဆိုတဲ့ အနေနဲ့ အနေထိုင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပါစေ…
မကူးစက်ခံရသေးသူများအနေဖြင့်လည်း အသိနဲ့ သတိ ပိုသည်မရှိ ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ…လို့ ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်…
*** ပြည့်ဖြိုးအောင်ဆိုတဲ့စာသားလေးကို Click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ မူလရေးသားသူရဲ့ Facebook Account ကိုရောက်သွားမှာ
အခုရေးပြမှာက ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အသက်​အရွယ်​ ၂၀နှစ် အိမ်ကနေခွာပြီး တက္ကသိုလ်​ ပထမနှစ် ၊ ဒုတိယနှစ် တက်နေစဉ် ကိုယ့်လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု ဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာ စူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ကာလက အဖြစ်အပျက်ပါ။ လူတိုင်းပြောပုံအရတော့ ကျွန်တော်က ရုပ်မချောပေမယ့် လူကြားထဲ ထင်းနေတဲ့ ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်ပါတဲ့။ အရပ်မြင့်တယ်၊အသားဖြူတယ်၊ ပိန်တဲ့အထဲမပါသလို ၀တဲ့အထဲမပါပါ။ ဆံပင်က နက်မှောင်နေပြီး မျက်ဝန်းတွေက ထူးထူးခြားခြား အညိုရောင် သမ်းနေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပါတ် အနည်းငယ်က ဘာရယ်မဟုတ် စိတ်​ထဲ နှာစိတ် အလွန်​အကျွံ ထန်နေတာနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က စုံတွဲ တစ်တွဲနဲ့ ငြိတိတိစကားလုံးတွေသုံးပြီး chat ဖြစ်တယ်။ အခြားသူတွေ ပြောသလို Dating Application တွေသုံးပြီး လူချိတ်ရတာမျိုး ရှာရတာမျိုးလည်း ကျွန်တော်လန့်တယ်။ IM မှာ စကားစပ်မိလို့ ပြောကြရင်း သိတဲ့ Gay စုံတွဲကတော့ ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်ထင်မိသား။ သူတို့နှစ်ယောက်က အသက် ၃၀နှစ် ၀န်းကျင်တွေဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းမှာ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ sexy ပုံလေးတွေ တင်ထားတတ်တာ တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်ဗျ။
ဟိုတနေ့ညနေ သူငယ်​ချင်းအချို့နဲ့ အပြင်ထွက်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း အွန်လိုင်းပေါ်ခဏတက်မိသေးတယ် သူတို့စုံတွဲများ ရှိနေမလားလို့လေ။ သူတို့တွေ offline ဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်လည်း အပြာကားအချို့ လျှောက်ကြည့်ရင်း လူမှုကွန်ယက်က အခြား profile တွေလည်း စပ်စုစူးစမ်းဖြစ်တယ်။ ရုတ်တရက် စုံတွဲနှစ်ယောက် အွန်လိုင်းတက်လာကြောင်း မီးစိမ်းပြတာကြောင့် စာတို တစ်ကြောင်းလောက်ပို့လိုက်ရော။ ပြီးမှ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ည ၁၁နာရီထိုးနေပြီဗျ။
စက္ကန့်​ အနည်းငယ်လောက် တုန့်ပြန်မှုမရှိ ငြိမ်နေပြီးနောက် `အို...ဟေး...ကိုမိုး....အကိုစည်သူပါ။ အကိုတို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို အင်တာနက်သုံးနည်း၊ Facebook သုံးနည်းတွေ ပြောပြနေကြတာကွ။´ သူတို့ဆီက တုန့်ပြန်မှုလာတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် စိတ်​လှုပ်​ရှားမိပေမယ့် အလုပ်များနေတဲ့ လေသံပေါက်တာကြောင့် သွားမနှောင့်ယှက်မိဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ နှစ်မိနစ်လောက် အကြာမှာတော့ ကိုစည်သူစီက စာတိုပို့လာတယ်ဗျ။ သူတို့သူငယ်ချင်း အခုပဲပြန်သွားပြီ၊ သူရယ် သူ့ပါတနာ ကိုစိုင်းရယ် လမ်းထိပ်က Cafe ကိုလာမလို့ တွေ့ကြမလားတဲ့။ `အနည်းအပါးသောက်ပြီး ညစာစားရုံပါ။ အကိုတို့က ခင်မင်ချင်လို့ပါ´
ကျွန်တော်လည်း တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှု အမြန်လုပ်ပြီး အိမ်ကထွက်လာလိုက်ပါတယ်။ ဘာကိုမျှော်လင့်လို့ရမယ်မှန်း ကျွန်တော်မသိပေမဲ့ စိတ်တော့ အတော်လှုပ်ရှားခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ လမ်းထိပ်ရောက်ကာနီးမှ ဖုန်းလာပြီး သူတို့နေထိုင်ရာ အိမ်လိပ်စာကိုပြောပြကာ လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပြန်တယ်။ အိမ်တံခါးမကို ကျွန်တော် ရောက်အသွား ကိုစည်သူကရပ်စောင့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ မြို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး နာမည်​ကြီးရပ်ကွက် အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတစ်ခုမှာ သူတို့နေကြတာပါ။ ကိုစည်သူက အသက် ၂၈နှစ်လောက်ရှိမယ် ဆံပင်ခပ်တိုတိုကို Ash Gray အရောင် Highlight ဖောက်ထားတာအလန်းစားဗျ။ ခြုံကြည့်ရင် လူရည်သန့်တစ်ယောက်မှန်းသိသာပါတယ်။ အိမ်ထဲ ကျွန်တော်လိုက်ဝင်သွားချိန်မှာ မီးတွေထိန်လင်းနေအောင်ထွန်းတာတာမြင်ရသလို ကိုစိုင်းက မီးဖို​ချောင်​က စားပွဲခုံမှာထိုင်ရင်း တစ်ခုခုသောက်နေတာကို တွေ့ရတယ်ဗျ။ ကိုစိုင်းက နည်းနည်းပြည့်သယောင်ရှိပြီး ဆံပင်ပါးကာ မုတ်​ဆိတ်​ ပါးသိုင်း​မွှေးတွေကို ပုံသွင်းရိတ်ထားတာ ကြည့်ကောင်းလွန်းတယ်။
ကိုစိုင်းက ကျွန်တော့်ကို နွေးနွေးထွေးထွေး ပြုံးပြပြီး `ပျော်စရာကောင်းဦးတော့မယ်´လို့ အဆက်အစပ်မရှိပြောတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ ကျွန်တော်နဲ့ Chat ခဲ့တဲ့ ကိုစည်သူက အနားနားကပ်ရင်း `ငါတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်မပြန်ကြသေးဘူးကွ။ သူတို့လဲ စောင့်ကြည့်လို့ရမလားမေးနေတယ်။ မင်း အဆင်ပြေပါ့မလား? မစိုးရိမ်နဲ့ သူတို့​တွေက အလွန်သဘောကောင်းသလို ယုံကြည်လို့လည်းရပါတယ်။ မင်းက အဆင်ပြေတယ် ပြမယ် မပြဘူးဆိုတာ ငါတို့ အလောင်းအစားတစ်ခုလုပ်ထားကြတာ။ ကြည့်ရတာ ငါတို့နိုင်သွားပြီပဲ´
ဘယ်လိုလဲမသိ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ အလွန်ထန်နေချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်သူစောင့်ကြည့်ကြည့် ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်လေ။ ကိုစိုင်းက ကျွန်တော့် ခါးကို ရစ်သိုင်းဖက်တွယ်ပြီး အပေါ်ထပ်ကို သွားစို့လို့ပြောကာ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံရပါတယ်။ သူ့ လက်မောင်းကြီးတွေနဲ့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်တွယ်ခံရခြင်းက ကျွန်တော့်ငပဲကို ပိုတင်းစေတာ ထူးဆန်း​ထွေလာပါ။ ကျွန်တော် အပေါ်ထပ် အခန်းတစ်ခုထဲ ရောက်သွားတော့ ဖယောင်းတိုင် အနည်းငယ်ကိုထွန်းထားတာ၊ အခန်းထောင့် ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ လူနှစ်ယောက် ပုံရိပ်တွေကို မြင်ရတယ်ဗျ။ ကိုစိုင်းနဲ့ ကိုစည်သူတို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အနမ်းချွေကြရင်း ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီတွေ ဘောင်းဘီတွေကို စတင်ဖယ်ချွတ်ကြပါတော့တယ်။ မာတောင့်ပြီး ဖောင်းနေတဲ့အတွင်းခံကလွဲလို့ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပေါ်ဘာမှမရှိချိန် တစ်ကိုယ်လုံး တဖွဖွ တယွယွ ၀ိုင်းနမ်းကြပြန်တာကြောင့် ယိုင်မလဲအောင် မနည်းထိန်းရပါတယ်။ ​နောက်​ဆုံး ကျွန်တော် သူတို့နှစ်ယောက်ကြား ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်မှ သူတို့ကိုယ်ပေါ်က လက်ကျန်အ၀တ်တွေကို ချွတ်ကြပါတယ်။
ကိုစိုင်းက ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတဲ့ သူ့ငပဲကိုဆွဲထုတ်တယ်။ ပြီးတော့ ခပ်ရို့ရို့ဖြစ်နေဆဲ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို အသာထိန်းကိုင်ကာ လှတပတ သူ့ငပဲကို စိုစွတ်နေသော နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ တို့ထိပေးပါတယ်။ အဲ....ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းတွေက စိုစွတ်မှုကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ငပဲတွေရဲ့ အရသာကို မြည်းစမ်းလို့ ရပြီ။ ကိုစိုင်းက ကျွန်တော့် ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကို သူ့ငပဲနဲ့ တဖတ်ဖတ် ဟိုသည်ရိုက်ခတ်တာမှာ တဖြည်းဖြည်း ပိုမာလာသလို ပိုလည်းတုတ်လာတယ်။ ကျွန်တော် ဟန်မဆောင်နိုင်စွာ သူ့ငပဲကို ဆွဲကိုင် ပါးစပ်ထဲသွင်းပြီး ဆံပင်တွေ တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်တဲ့အထိ ကဲပစ်လိုက်တယ်လေ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြန်တော့ ကိုစည်သူက ကျွန်တော့် ဦးခေါင်းကို ဆွဲကိုင်လှည့်ပြီး သူ့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲ အတင်းထိုးသွင်းတော့တာပဲ။ မာတောင့်ပြီး သန်​သန်​မာမာ ငပဲနှစ်ချောင်းကို တပြိုင်တည်းနည်းပါး စုတ်မှုတ်ရတာပေါ့။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ တိုးဝင် တိုးထွက်နေတဲ့ ငပဲတွေကို Lollipop စုပ်သလို ကစားတော့ ကိုစိုင်းနဲ့ ကိုစည်သူတို့ အသံထွက် ညည်းသံပေးပါရော။ ပါးစပ်သိုင်းကျင့်နေရင်း မျက်ဝန်းထောင့်က ဖျက်ကနဲဆိုသလို ကျွန်တော်တို့ လှုပ်ရှားမှု မှန်သမျှ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ကူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံဟန်ကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော် လုပ်ကိုင်နေသမျှရပ်တန့်ပြီး မှတ်တမ်းတင်တာ ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာ မကြိုက်ဘူးလို့ပြောပစ်လိုက်တာပေါ့။ ကိုစိုင်းနဲ့ ကိုစည်သူတို့ နှစ်ယောက်သားက ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သူတို့ငပဲတွေ အ၀င်အထွက်ဖြစ်နေတာလောက် အရေးမပါဘူးဆိုရင်း လုပ်လက်စအလုပ်ကို ရှေ့ဆက်ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာ ပုံရိပ်နှစ်ခု ထရပ်လာပြီး ရှေ့တိုးလာကြတာ အ၀တ်မပါ ငပဲတွေ တရမ်းရမ်းဆိုတော့ လန့်များလန့်စရာ ကောင်းပါ့။
တစ်ယောက်သောသူရဲ့ ပစ္စည်းက အမွှေးထူသလို တော်တော်ကြီးတယ်ဗျ။ သူက ဆဲလ်ဖုန်းကင်မရာကို ကျွန်တော့် မျက်နှာဘက် ချိန်ရိုက်ထားရင်း `ငါ...ဗီဒီယိုကို ဖျက်ပစ်မှာပါ....ဒါပေမဲ့ တစ်ခုခုတော့ ငါ့ကို ပြန်လုပ်ပေးရမယ်´လို့ လုပ်ပြုံးကြီးပြုံးရင်းတောင်းဆိုတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ပခုံးအစုံကို ဆွဲယူရင်း မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းကာ ၀တ်ထားတဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအားဆွဲချွတ်ပြီး တင်ပါးတွေရယ် တကိုယ်လုံးရယ် စတင်ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်ရော။ သူ့ အခြားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်း ကျွန်တော်တို့ အနားတိုးကပ်လာတာမှာ အရပ်သိပ်မမြင့် ဆံပင်​ကွေးကောက်ကောက်နဲ့ ပုံမှန်ဆိုဒ် ငပဲပိုင်ရှင်မှန်းမြင်သိရပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့် နားရွက်တွေနဲ့ လည်တိုင်တွေကို မွတ်​သိပ်​စွာ စနမ်းသလို တင်ပါးကို တစ်ချက် နှစ်ချက် လက်နဲ့ ရိုက်ရော။ ကျွန်တော့်မှာ ငပဲထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ ငနဲလေးယောက်ကြားမှာ မတ်မတ်ရပ်ကာ တင်ပါးအစုံကို တဖျပ်ဖျပ် ၀ိုင်းရိုက်ကြတာခံရပါတယ်။ တစ်နာရီဝန်းကျင် ကြာသည့်တိုင်အောင် ဘယ်သူနဲ့မှ အနမ်းမချွေရသေးတာတော့ အမှတ်​တရပဲ။ ဆဲလ်ဖုန်းကိုင်ထားတဲ့လူက သူ့သူငယ်ချင်း ကိုစည်သူကို အကြည့်ပေးရင်း `ဒီ Website မှာ ငါတို့ စာရင်းသွင်းဖို့ လိုပြီထင်တယ်´လို့ ကိုစိုင်းကို လှမ်းပြောတယ်လေ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ခရေ၀ထဲ လက်ချောင်းတွေနဲ့ တွင်းနှိုက်တယ်ပေါ့။
ခဏနေတော့ ဆဲလ်ဖုန်းကိုင်ထားတဲ့လူက ကျနော့်ကို အခန်းနံရံဘက် ရင်ကိုအပ် တင်ကိုနောက်ပစ်တဲ့အနေအထားပြောင်းနေစေပြီး ကျွန်တော့် ခရေ၀သာမက အတွင်းသားထိအောင် လျှာနဲ့ ထိုးမွှေ ကလိပါတယ်။ အားလုံးက ၀ိုင်းကြည့်နေပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ ကိုစည်သူက ကျွန်တော့် အနားတိုးကပ်လာရင်း `အဆင်ပြေတယ်နော်´ လို့စူးစမ်းရော။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုပြောရမလဲ `ဟုတ်​ကဲ့.. .အဆင်ပြေတယ် ´ ပြောလိုက်တာ သူက နှစ်လိုလက်ရ ပြုံးသွားပြီး ကျွန်တော့် ငပဲကိုကိုင် ပါးစပ်ထဲ ထည့်ရင်း ရေခဲချောင်း စုပ်သလို တပြွတ်ပြွတ် စုပ်တော့တာပဲ။ အဲ့အချိန် ကျွန်တော့် ခရေကို အလျက်ခံနေရစဲနော်။
`အာ....မိုက်တယ်.. ...ငါတို့လေးယောက် ၀ိုင်းကျွေးကြစို့၊ ကြပ်ညှပ်ပြီး တင်းနေတဲ့ ငနဲလေး ခရေ၀ထဲ ငါ့ငပဲကို ဖိသိပ်ချင်နေပြီ´ လို့ ကိုစိုင်းက စကားဆိုလာတော့ ဆဲလ်ဖုန်းကိုင်ထားတဲ့လူက သူ့လက်ချောင်းတွေကို ချောဆီလူးကာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲတွင်းနှိုက်လမ်းကြောင်းရှင်းပြီး ကိုစိုင်းငပဲကြီးအတွက် ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ အဲ့အချိန် ကိုစိုင်းက သူ့ငပဲနဲ့ ကျွန်တော့် တင်ပါးတွေကို တဖျပ်ဖျပ် ရိုက်နေသေးတာ။ နောက်မှ သူ့ငပဲကို ခရေ၀ထဲ တဖြည်းဖြည်း ဖိဖိသွင်းရင်း နှဲ့ကစားရောလေ။ အော်....လေးဘက်ထောက်ပြီး
နေလိုက်တာပေါ့ ကိုစိုင်းက ခပ်ဖြည်းဖြည်းအထုတ်အသွင်းလုပ်နေချိန် ကိုစည်သူနဲ့ ဆံပင်ခပ်ကွေးကွေးပိုင်ရှင်က သူတို့ငပဲတွေကို ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ ထည့်ဖို့လုပ်တာကိုးဗျ။ ကျွန်တော့် ခါးအစုံကို ကိုစိုင်းက လက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ ထိန်းကိုင်လျှက် ခပ်သွက်သွက် လှုပ်ရှားချိန် ကိုစည်သူနဲ့ ဟိုလူက သူတို့ဟာကို လည်မျိုထဲ ရောက်အောင် အပြန်အလှန် ထည့်တမ်းကစားတယ်။ ဆဲလ်ဖုန်းနဲ့လူကတော့ ကောင်းကောင်းလေး မြင်ရအောင် အကွက်အကွင်းလှည့်ပတ်ကြည့်နေတာများ အာရုံမရ ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တောင် မြင်နေရတယ်။
ကိုစိုင်း သူ့ငပဲကြီးကို တနင့်တပိုး ဖိသွင်း ဆွဲထုတ်လုပ်ချိန်တိုင်း လေထဲမျောနေရောပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ခရေကြွက်သားတွေကို ထိထိမိမိ အလုပ်ပေးရတဲ့ ခံစားချက်က တကယ့် အလန်းဆိုတာ စတင်ခံစားမိရပါတယ်။ စိတ်ထဲက တလှိုက်လှိုက်ဖြစ်ကာ ပြီးချင်သလိုလို ဖြစ်လုလုမှာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကိုစိုင်းလေ သူ့ငပဲကို ဆွဲထုတ်ပြီး ကိုစည်သူ့ငပဲနဲ့ အစားထိုး လဲလှယ်​ စေရောဗျာ။ `မင်းကောင်လေး_င်အရသာမြည်းကြည့်လေကွာ´လို့ ပြောလည်းပြော သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ တွန်းထိုးထည့်ပြန်ရော ကိုစိုင်းလေ။ Oh fuck ဒါတော့ တော်တော် များသွားပြီ ဆံပင်ကောက်ကောက်နဲ့ ငနဲက ဘေးကနေ ဘုံတံခေါက်နေရင်း `အာ...အ ငါပြီးတော့မယ် ပြီးတော့မယ်´လို့ ပြောချိန် ကိုစိုင်းက သူ့ငပဲကို ဆွဲထုတ်ပြီး နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တာ ဆံပင်ကောက်ငနဲလေ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ ဖိသွင်းလိုက်ရင်း သုက်ရည်တွေကို အားရပါးရ ပန်းထည့်တော့တာပါပဲ။ ဆဲလ်ဖုန်းကိုင်ထားပြီး တချိန်လုံးလိုလို မှတ်တမ်းတင် လိုက်ရိုက်နေတဲ့ ဘဲကြီးလည်း သူ့ငပဲကို လစ်ဟာသွားတဲ့ ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ ထည့်မွှေရင်း ဆက်လက် ရိုက်ကူးတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော် ကင်မရာသမားနဲ့ ကိုစိုင်းရဲ့ ငပဲနှစ်ချောင်းကို လက်နဲ့ ဆွဲကိုင်လှည့်ပြီး အာဘွားပေး ပါးစပ်ထဲထည့် လျှာနဲ့ ရစ်​လိမ်​ ပညာကုန်သုံးနေချိန်မှာ နောက်ဖက်က ကျွန်တော့် virgin ass ကို ကိုစည်သူက အပီအပြင်ထိုးဖွင့်နေပါတယ်။ လျောကနဲ လျောကနဲ စက်သေနတ်ပစ်သလို တဒိုင်းဒိုင်းပစ်ရင်း ပါးစပ်က အော်ညည်းသံ ပိုပိုကျယ်လာတယ်။ အာ....ကိုစည်သူက ကျွန်တော့် ကိုယ်လုံးကို ဆွဲယူချီမကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပက်လက်အနေအထားပြောင်းလိုက်တာ လူကို Half feels ကကျိုးကကြောင်ဖြစ်ရော။ ပြီးမှ ပါးစပ်ထဲ သွပ်လက်စ ငပဲနှစ်ချောင်းကို ပြန်ယူ ကိုစည်သူလည်း ကျွန်တော့် ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားပြန်ဝင်ပြီး တဗြုန်းဗြုန်း အုံးတော့တာပါပဲ။ ခဏအကြာမှာတော့ ကိုစည်သူစီက မသဲမကွဲ အော်ညည်းသံနဲ့အတူ သုက်ရည်တွေကို ကျွန်တော့် ခရေ၀ထဲ ကော့ကေားသွင်းတာ ခံစားလိုက်ရတယ်။ သူ့ငပဲကို တဆုံးဖိသွင်းပြီးမှ ပန်းထည့်တာနော်။
ကိုစိုင်းနဲ့ ဟိုငနဲ ကျွန်တော့် မျက်နှာအနှံ့ သုက်ရည်နွေးနွေးတွေနဲ့ ဖျန်းနေချိန် ကိုစည်သူက ကျွန်တော့် ငပဲကို ကိုင်ကာ လက်စကစားပါတော့တယ်။ ကိုစိုင်း အော်ညည်းသံက တမျိုးတစ်ဘာသာဗျ ပြန်မပြောပြတတ်ဘူး။ `ငါ..ငါ...ပြီးပြီး....အာ့..အ ပြီးပြီး...ပြီ´ လို့ စကားလုံး တစ်လုံးခြင်းကို အားရပါးရ အော်ပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာကနေ ရင်ဘတ်ပေါ်အထိ စီးကျအောင် သုက်ရည်နွေးနွေးတွေ အများကြီး ဖျန်းတာ ဟိုလူ့ဟာတွေကောဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေတော့။
ခပ်ကြိမ်းကြိမ်းဖြစ်နေတဲ့ ခရေ၀တစ်ဝိုက်ရယ် မျက်နှာရယ် ရင်ဘတ်တေရယ် စီးကပ်ကပ်ဖြစ်ကုန်တာကြောင့် ကိစ္စအ၀၀ ပြီးပြီးခြင်း ကျွန်တော် ထရပ်ပြီး သန့်စင်ခန်းထဲဝင် အကုန်နှိုက်ချွတ် ဆေးကြောပစ်လိုက်တယ်။
နွေရာသီကာလ နောက် semester မတက်ရသေးခင် အချိန်ထိ ကိုစည်သူနဲ့ ကိုစိုင်းတို့ရယ် ချိန်း​တွေ့ဖြစ်သေးပေမယ့် ပထမအကြိမ်တုန်းကလို အုပ်စုလိုက်တော့ မလုပ်ဖြစ်ကြတော့ဘူးဗျ ။
Alex Aung ( 14 May 2018)
Posted by Alex Aung at 6:30 PM No comments:
ငယ်ဘ၀ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးကို ပြန်လည်ငဲ့စောင်းကြည့်မိစေတဲ့ အမှတ်တရ ပြောကြားချက်များကို စုစည်းမှု တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးကာ သူငယ်ချင်းတို့ကို ဝေငှပါမယ်။ အဲ လိင်ကိစ္စကို ဘယ်လိုစ ကရုပြုမိခဲ့သလဲဆိုတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ "How I Learned To Masturbate" ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ အခန်းဆက် စာတွေကို ဖတ်ဖူးခဲ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ စိတ်​ကူးယဉ်​ ဖန်တီး ရေးသားချက်များမဟုတ်ဘဲ ချစ်သူ ခင်သူမိတ်ဆွေများနဲ့တကွစကားလက်ဆုံကျမိသူများရဲ့ပြောပြချက်အစစ်အမှန်များဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါတယ်။ အယောက်ပေါင်းများစွာရဲ့ စကားတွေဟာ အ​ကြောင်းအရာ ထပ်နေတာလည်း ရှိနိုင်တာကြောင့် သေချာသတိထားပြီး ပြန်လည် ဝေငှရေးသားပါမယ်လို့ေပြောပါရစေ။
ကျနော့် အသက် ရှစ်နှစ်လောက်ရှိတုန်းက အသက် ဆယ့်တစ်နှစ်အရွယ် အစ်ကို ခေါင်းအုံး တစ်လုံးကို ညှောင့်နေတာ မြင်ခဲ့ဖူးတယ်ဗျ။
အပြင်က ပြန်လာပြီး တစ်ခုခုယူဖို့ အပေါ်ထပ်ကိုတက် ကျနော့် အခန်းဆီသွားခဲ့တယ်။ အိမ်မှာ ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်တွေးထင်ခဲ့သလို ကျွန်တော့် အစ်ကိုကလည်း အဲ့သလိုတွေးတော ယူဆခဲ့တာ ထင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ စာကြည့်တဲ့နေရာ ကျောင်းစာပြန်လေ့ကျက်တဲ့နေရာ အဖြစ်ခေါ်တဲ့ ဘေးအဆွယ်နေရာလေးရှိပါတယ်။ မကြာခဏ​ဆိုသလို ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းမှပေးတဲ့ အိမ်စာလုပ်လေ့ရှိတဲ့ စာရေးစားပွဲရယ် အခန်းနံရံကိုကျောပေးထားတဲ့ ဆိုဖာရှည်တစ်ခုရယ်က အခန်းတံခါးကနေ မြင်သာထင်သာကြီးဗျ။ ဆိုဖာပေါ် ကျောမှီခေါင်းအုံးနှစ်ခုကို အနေအထားတစ်မျိုးမှီလို့ အဲ့ဒီအပေါ်ကနေ ဘိုဘိုလှဲမှောက်နေတာ တစ်​မျိုးကြီးပဲ။ ခပ်နှေးနှေး စည်းချက်ကျကျ လှုပ်ရှားမှုက သူ့ဘောင်းဘီကို အောက်ဘက် တဖြေးဖြေးလျောကျလာစေပါတယ်။ အခန်းထဲလည်းမ၀င် တံခါးဝမှာ မတ်တပ်ကြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက် ကျွန်တော် ငေးနေမိခဲ့တယ်လေ။
ကျွန်တော် နှစ်ခုတော့မှတ်မိတယ်ဗျ။ ပထမတစ်ခုက ဘိုဘိုရဲ့ ဖင်ပြောင်ကြီးပဲ။ ကျွန်တော့် အစ်ကိုက ထွားကျိုင်းတဲ့အထဲပါတော့ သူ့တင်ပါးတွေကလည်း တကယ့်အကြီးကြီးပါ။ တင်ပါးတွေက ၀ိုင်းစက်ပြည့်တင်းနေသလို ပေါင်တံတွေကလည်း ကျစ်လစ်နေရော။ သူ့တင်ပါးအကွဲကြောင်းထဲက ဖင်ပေါက်အပါအ၀င် မြင်နိုင်သမျှ အကုန်မြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ မမြင်ဖူးခဲ့တော့ လိင်အာသာဖြေတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို မရိပ်စားခဲ့မိတာ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော့် အစ်ကိုက ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်နေသလဲ သိပါတယ်။ တစ်ခုခု ကောင်းတာကို ခံစားရလို့ဖြစ်မယ်။
ကျွန်တော် မှတ်မိနေတဲ့ ဒုတိယအကြောင်းအရာက နည်းနည်းလေး ထူးဆန်းတယ်​။ ကျွန်တော့် အစ်ကို ခေါင်းအုံးကို ညှောင့်လိုက်တိုင်း ခုန်းထလာတဲ့ လည်တိုင်နောက်ဘက်ပိုင်းက ကြွက်သားမြှောင်း နှစ်ခုဟာ ကြီးထွားတယ်လေ။ ဘိုဘိုရဲ့ လည်တိုင်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူဘယ်လောက်ထိ အားစိုက်ထုတ်နေသလဲ သိသာပါတယ်။
ဘိုဘို ဘာသံမှ မကြားရသေးခင် လာလမ်းအတိုင်း တိတ်​တဆိတ်​ ကျွန်တော် နောက်ဆုတ်ရင်း ပြန်ခေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အစ်ကို သို့မဟုတ် အခြားတယောက်ယောက်အား ပြန်လည် ဖောက်သယ်ချခြင်း ပြောခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဘာသာ သူပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စအတိုင်း စူးစမ်းကြည့်ပေမယ့် အသက် ၈နှစ်အရွယ် ချာတိတ်​ဆိုတော့ ဘာမှမတွေ့ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော် အသက် ၁၂နှစ်အရွယ် ရောက်သောအခါ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်ကြည့် ကြိုးစားကြည့်သောအချိန်မှ နားလည်ခဲ့ရပါတယ်။
`ဘယ်လိုပြောရမလဲ လိင်အာသာဖြေတာ (_ွင်း_ိုက်)နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဆန်ဆန် ပြောပြရလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့် အသက် ၁၂နှစ် - ၁၃နှစ်လောက်အရွယ်မှာ လူအတော်များများနဲ့ အတူတူ လက်သမားလုပ်ဖူးနေခဲ့ပြီဗျ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က သွားနေကြ ဇော်တူး နဲ့ ဘရန်မိုင်အိမ်ကိုသွားလည်ရင်း အတူတူ လက်သမားလုပ်ခဲ့တာကိုပြောပြမယ်လေ။ ဘရန်မိုင် အ၀တ်မပါဘဲ ရေချိုးနေတာကို ကျွန်တော်မြင်ပြီး လုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်သွားတာပါ။ ဘရန်က ကျွန်တော်နှင့် အတူတူ Grade 8ဖြစ်ပြီး သူ့ညီကတော့ Grade7ဖြစ်ပါတယ်။ ဘရန်က ဆံပင်ခပ်နက်နက်၊ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီး သူ့ညီဆံပင်ကတော့ ကောက်ကောက်ကွေးကွေးပါ။ သူတို့ငပဲတွေက တော်တော်ကြီးတယ်ဗျ....အဲ...ဒါမှမဟုတ်​ သူတို့နဲ့ အတူတူလက်သမားမလုပ်မိခင် ထင်ရာမြင်ရာဖြစ်နေသလားပဲ။
ဘရန့်ဆီးခုံမှာ နက်မှောင်တဲ့ အမွှေးအမျှင် အချို့ရှိသလို ငပဲက မမာတောင့်ခင်ကို အမြင်လှပြီး ရွှေဥတွေကလည်း အဲ့ဒီအောက်မှာ ခပ်ထွားထွားတွေ့ရပါတယ်။ နောက်ဘက်ကနေကြည့်ရင်ကို သူ့ပေါင်ကြားထဲ အလွယ်​တကူ မြင်ရတာပါ။ ဇော်တူးငပဲကတော့ ပိုမိုရှည်လျားပေမယ့် သိပ်မတုတ်ဘူး၊ ရွှေဥတွေကလည်း သိပ်မကြီးဘူးဗျ။ ထိပ်အရေပြားကလည်း သိပ်မပွင့်ချင်သေးဘူး ရှေ့နောက် ခပ်သွက်သွက် လက်ကစားတာတောင် အင်တင်တင်နဲ့။ ထန်လာမှ သူ့ငပဲက ပန်းရောင်သမ်းလာတာ ပုံမှန်ဆိုရင် ဖြူဖျော့ဖျော့ပဲ။ ဆီးစပ်က အမွှေးနုတွေရှိပေမယ့် ကောက်ကွေးနေတာ ခေါင်းက ဆံပင်တွေလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့် ငပဲက သူတို့လောက်မထွားပေမယ့် ပုံမှန်​ပဲ ရှိသင့်တဲ့ အရွယ်အစားလို့ ပြောရင်ရပါတယ်။ ရွှေဥတွေကလည်း ထို့အတူဖြစ်ပြီး ဆီးမွှေးနက်နက်တွေက ဘရန်မိုင်အတိုင်းပေါ့။
ကျွန်တော် သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်မှာ အတူလုပ်ဖြစ်ကြတာများပါတယ်။ ဘရန်မိုင်ရဲ့ အိပ်ရာပေါ် အများဆုံး ကမြင်းကြတာပါ။ ဒါကပဲ ကျနော့်အတွက် "show-ers and grow-ers." တွေရှိတယ်လို့ သဘောပေါက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဘရန်ရဲ့ ငပဲက မာတောင့်လာချိန်မှာလည်း ထူးပြီးမရှည်လာပါဘူး။ အလွန်ဆုံး တစ်လက်မခွဲလောက်ပဲ ရှည်လာတယ်ပြောရမယ်။ သူ့ငပဲက သုက်ရည် ပန်းထွက်ချိန်အထိ တဆုံးမာတောင့်လာတာမျိုးမရှိဘူးဗျ။ ဇော်တူးက ပိုပြီးရှည်လာသလို မာလည်းအတော်မာတယ်။ ခပ်ပိန်ပိန် လူတွေရဲ့ အားသာချက်က ငပဲထွားကြတာလားမသိပါဘူး။ အခြား သတိထားမိတဲ့ အချက်က ဒီညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် အဆုံးသတ်ဖို့ဆိုရင် သူတို့ရွှေဥတွေကို အနည်းဆုံး ငါးမိနစ်လောက် တို့ထိနှိုးဆွပေးရတာပါ။ ဆွလေ....သူတို့လက်တွေကသွက်လေပေါ့။ နောက်ဆုံးဆယ်စက္ကန့်မရောက်မခြင်း ကပ္ပါယ်အိတ် ကကျုံ့သွား ကပ်သွားတာမျိုးမဖြစ်ဘူးဗျ။ ကွန်တော့်ငပဲက ဒုံးပျံတစ်စင်းလို မာတောင့်နေသလို ပြီးဆုံးချိန်ဆိုရင် ကပ္ပါယ်အိတ်က မြန်​မြန်​ကျုံ့သတဲ့လေ။
ဟေ့လူရ လူအမျိုးမျိုး ငပဲကလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့။ ဘရန်မိုင် နဲ့ ဇော်တူးတို့က အပြသမားတွေပါ၊ ပိုမိုပြီး ထွားလာတာမရှိဘူး။
`ကျွန်တော်က ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်ပြီး ဖေဖေ့အချစ်တော် ပစားပေးဆက်ဆံခံရသူ အစ်ကိုကြီးက ပထမမြောက် သားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အကိုက ဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ သာမန်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်စိတ်ဆန္ဒအရ လုပ်ဆောင်သည့်အရာများပဲဖြစ်ဖြစ် ဖေဖေချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းစဉ်​များကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးဟာ အာရုံစိုက်ခံရအောင် အမြဲလုပ်ဆောင်နေတဲ့သူလို့ ထင်မြင်ခံရပါတယ်။ ကြာလာတော့ ကျွန်တော်က မိသားစုရဲ့ သီးသန့်​လူသားဖြစ်သွားရော။ ဂရုမထား အရာရာ တာဝန်ကျေ ဆက်ဆံနေကြသလားပဲ။
ဖေဖေ့လိုလူရဲ့ အာရုံစိုက်ကာ ဂရုစိုက်ဆက်ဆံခံရဖို့ ကျွန်တော့် ကြိုးစားမှုဟာ ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပြောရမယ်။ မိသားစုမဟုတ်တဲ့ အခြားမိသားစုက အမျိုးသားတွေဆီက attention ရဖို့ဖြစ်လာရော။ ကျွန်တော့် အသက် ၉နှစ် သို့မဟုတ် ၁၀နှစ်လောက်ရောက်ချိန် ဘေးအခန်းကို တက္ကသိုလ်​တက်နေသော သားတစ်ယောက်ပါဝင်တဲ့ မိသားစုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဘေးအိမ်က ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံပေးတယ်ဗျ။ သူ့မှာ Nintendo တစ်လုံးရှိတော့ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားချင်နေတဲ့ ကျွန့်တော့်အတွက် မျှော်လင့်ချက်ပေးသူဖြစ်လာရော။ ဖေဖေက ကျွန့်တော့်ကို Nintendo တစ်လုံးမပြောနဲ့ ဂိမ်းစက်တစ်ခုခုတောင် မ၀ယ်ပေးသလို အကိုဖြစ်တဲ့သူကလည်း တက်နေတဲ့ ကျောင်းအတွက် စကောလားရှစ်ရရေး အမြဲ အာရုံစိုက်နေတာကိုက အချိန်ပိုမရှိသလို အားချိန်ဆိုလျှင်လည်း mathematical puzzles တွေဖြေရှင်းဖို့ပဲလုပ်နေတာပါ။
ကျနော့်အိမ်နီးနားခြင်းအသစ် ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ နာမည်က ဒေးဗစ်ပါ။ သူက ကျွန်တော့်ကို အခန်းထဲ ၀င်ခွင့်ပေးသလို အချိန်ရရင် ဂိမ်းကစားခွင့်လည်းပေးပါတယ်။ ဆိုဖာပေါ်ကို သူထိုင်ပြီးကစားတဲ့ တစ်ကြိမ်မှာ ကျွန်တော် သူ့ကိုမှီတွယ်တာ အားမလိုအားမရဖြစ်စွာ ဖက်ပြုတာတွေ လုပ်မိစဉ်ခဏ စိတ်ထဲ တစ်ခုခု သာယာသလိုခံစားရပါရဲ့။ သူငြင်းပယ်တာတွေ ဘာဘာညာညာပြောတာ မပြုလုပ်တော့ Nintendo ကစားဖို့ အချိန်ရတဲ့ နောက်တစ်ကြိမ်မှာတော့ သူ့ပေါင်ပေါ် ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးကစားမိပါတယ်။ ဘယ်လို ကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေ ရင်ထဲတလှိုက်လှိုက် ဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး Nintendo ကစားခွင့်ရနေတာထက်ပိုသလိုပါပဲ။
ကျွန်တော် ကစားနေတဲ့အချိန် တစ်ချက်တစ်ချက် ကျွန်တော့် ခါးအစုံကို လက်နဲ့ ထိန်းထိန်းကိုင်ရင်း နေရာရွှေ့ထိုင်စေတာကြောင့် စူးစမ်းမိရာ ဒေးဗစ်ငပဲက မတ်ထောင် မာတောင့်နေတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ အစက အခြားပေါင်တစ်ဖက်မှာ ကပ်သပ်ထိုင်မိတယ်လို့ထင်နေတာ။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို သူ့ပေါင်ပေါ် ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဆိုဖာပေါ်ပြောင်းထိုင်စေပါတယ်။ ကစားနေတာ ပြီးသွားပြီလို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။ ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ မဟုတ်ဘဲ နောက်ပိုင်း သူ့အခန်းထဲ ၀င်ခွင့်မရတော့သလို ကျွန်တော်လည်း Nintendo ဆော့ခွင့် မရှိတော့ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့အချိန်​ကစပြီး အရွယ်ရောက် အမျိုးသားတွေရဲ့ ငပဲတွေအကြောင်း အတွေးဝင်နေမိသလို အခြားသော ငနဲလေးတွေရဲ့ ရွှေပန်းတွေအကြောင်း စိတ်​ကူးယဉ်​ မြင်ကြည့်မိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ဘာသာရပ် တစ်ခုပဲဗျ , LOL.
ရောရောထွေးထွေးမှတ်မိနေတာ တစ်ခုက ကျွန်တော်နှင့် ညီအကို ၀မ်းကွဲတစ်ယောက် စာကြည့်ခန်းထဲ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီတွေနဲ့ လိုက်တန်းပြေးတန်း ကစားကြတာရယ် ဘောင်းဘီတွေ ချွတ်ချပြီး တစ်ယောက်ပစ္စည်း တစ်ယောက်ပြကြ ကိုင်ကြည့်ကြတာလေးပါ။ အသက်​အရွယ်​ ၅နှစ် ၆နှစ်လောက်ရှိပြီ ထင်တယ်။ ဦးလေးက လှေကားအတိုင်းတက်လာရင်း အခန်းထဲ ၀င်လာတော့ မြင်သွားပြီး အအော်ခံရ အတားမြစ်ခံရ နောက်တစ်ခါ မလုပ်အောင် ဒဏ်ပေးခံရပါတယ်။
အိမ်သာသုံးစက္ကူ ကို အသုံးပြု ပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာ မှတ်မိသေးတယ်။ တစ်ခါ သို့မဟုတ် အပါးအယား လက်ကစားပြီး (အာသာဖြေတာ)နောက် ရသမျှ အိမ်သာသုံးစက္ကူ နဲ့ သုတ်သင်ဖယ်ရှားရတာ အတော်အာရုံနောက်တယ်ဗျ။ ရေမရှိလို့ သုတ်လိုက်တာ စက္ကူ ဖတ်တွေက ငပဲခေါင်းမှာ ကတ်ကုန်ရော။ ဆွဲဖယ်လိုက်တော့လည်း ရေမရှိတာကြောင့် နံရံကပ်ပိုစတာကို ကော်ကွာအောင် ခွာရသလိုပဲ အတော်နာတာပါ။ တစ်ယောက်ယောက်က ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကျွန်တော့် ငပဲကို မြင်သွားမှာစိုးရိမ်တယ်ဗျ ကျွန်တော် ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သူသိသွားနိုင်တယ်လေ။
နောက်ထပ် ရှက်စရာကိစ္စလို့ပြောရမလား အထက်​တန်းတက်တုန်းက ရေချိုးရင်းဖြစ်ခဲ့တာလေးလဲ ရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော့် အရွယ် သူငယ်ချင်းအတော်များများကလည်း အထူးတဆန်း ​ရေချိုးခန်း ပုံပြင်တွေရှိကြတယ်ပြောတာပဲ။ အသက်က ၁၃ - ၁၄နှစ်လောက်ရှိဦးမယ် လူအများစုသုံးကြတဲ့ ​ရေချိုးခန်းမှာ စိတ်ထဲမရိုးမယွဖြစ်ရင်း ပေါင်ကြားက ငပဲက သိသိသာသာ ခေါင်းထောင်ထလာတာလေ။ စဉ်းစားကြည့် ၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီက အပါး လူအများစုချိုးနေတဲ့အချိန် ငပဲက မာတောင့်လာတာဆိုတော့ လူတွေအမြင်မှာ ကြည့်ကောင်းဖို့ ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလည်းဗျာ။ အဲ့ဒါထက် ရှက်စိတ်နဲ့ ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားရတာရယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်က လှမ်းခေါ်ပြီး စနောက်လိုက်မလားလို့ အသေစိုးရိမ်ခဲ့ရတာပါပဲ။
နောက်ထပ် ခပ်သဲ့သဲ့ မှတ်မိသေးတာရှိသေးတယ်။ ကျောင်းဆင်းချိန် အိမ်ကို အမေပြန်မရောက်ခင် မြန်မြန်သွားပြီး လိင်အာသာဖြေဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ ကျောင်းကနေ အိမ်ကိုပြန်တာ တံခါးပေါက်အရောက် မိနစ် ၂၀ကြာတယ်။ ပြီးတော့ အပေါ်ထပ် အခန်းထဲက ရေချိုးခန်းစီပြေးတက်ကာ အာသာဖြေတာ လေး - ငါးမိနစ်လောက် ကြာတယ်ပေါ့။ ကျနော် Lotion အသုံးပြု လက်ကစားဖြစ်ခဲ့ရင် သန့်ရှင်းရေးအတွက် တစ်မိနစ် - နှစ်မိနစ်လောက် အချိန်ထပ်ဆောင်းပေးရတာပါပဲ။ အာရုံနောက်တဲ့ အ​ပြေးအလွှား ကိစ္စတစ်ခုပါ၊ ပြီးအောင်လုပ်ဖို့လည်း အတော်ဆိုးတယ် ကျွန်တော့် နာမည်ကို လှမ်းခေါ်သံကြားခဲ့ရချိန် ရေချိုးခန်းထဲက ဖွထားတာတွေ အမြန်ကွယ်ဝှက်ဖို့ လုပ်ခဲ့ရတယ်။
ကျနော့် အသက် ၁၀နှစ်ဝန်းကျင်လောက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နပမ်းလုံးရတာကို အတော်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တယ်။ လိင်စိတ်ကို မသိမသာ ကြိုတင်သာယာနေခဲ့တာလားတော့မသိဘူးဗျ။ ဆွဲလွဲချုပ်ကိုင်ရတာ၊ ပွေ့ဖက်ဖျစ်ညှစ်ရတာ၊ ကျနော့် ဘော်ဒါတွေကို အပေါ်က အုပ်မိုး ဖိကပ်ထားရတာတွေရဲ့ အထိအတွေ့ခံစားချက်ကို သဘောကျတယ်။ ဒါတွေအားလုံးက အ၀တ်​အစား ၀တ်ဆင်ထားလျက် အမှတ်​မထင်​ ပြုလုပ်မိခဲ့တာတွေပါ။
ကျွန်တော့် အသက် ၁၃နှစ်ပြည့်ကာနီးအချိန်မှာတော့ အဲ့သလို နပမ်းလုံးရင်း ပေါင်ကြားက ညီဘွားက မာတောင့်တာ မကြာခဏ​ ဖြစ်ဖြစ်နေတာပါ။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်ချကာ အသစ်လဲလှယ်ချိန် မြင်လိုက်ရတဲ့ အ၀တ်မဲ့ တင်ပါးအစုံက စိတ်​လှုပ်​ရှားမှုပို​ပေးသလားပဲ။ နပမ်းလုံးရင်း ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်​အပိုင်း အချင်းချင်း ဖိကပ်ပွတ်သပ်လို့ မသိမသာ သဘောကျစိတ်ဝင်တာဟာ လိင်ကိစ္စနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာ အသက် ၁၂နှစ်အရွယ်မတိုင်ခင်အထိ မသိခဲ့တာတော့အမှန်ပါ။ ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်တဲ့ ကိစ္စအချို့ကော ငပဲမသိမသာ မာမာသွားတာကော ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ သိသွားပြီးနောက်မှာတော့ နည်းနည်းလည်း ရှက်စိတ်ဝင်လာမိတယ်ဗျ။
လိင်အာသာဖြေတာ (_ွင်းဘယ်လိုတိုက်တာ)ကဘာ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မသိမတတ်ခင် အသက် ၁၂ _ ၁၃နှစ်လောက်အရွယ်မှာ စိတ်တွေ ထန်လာခဲ့တာ ကျွန်တော် မှတ်မိတယ်။ အချိန်​က တော်တော်လေး ကြာပြီဆိုပေမယ့် ဂျင်းဘောင်းဘီ ခပ်ကြပ်ကြပ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်ဝတ်ဖူးတဲ့ ကလေးအထာပေါ့ဗျာ။ သဘာဝမကျတာ မဟုတ်​တရုတ်​ တော့မဟုတ်ဘူးလေ။
လိမ္မာတဲ့ကလေး၊ သပ်​သပ်​ရပ်​ရပ်​ ၀တ်စားဆင်ယင်တတ်တဲ့ကလေး၊ ပုဆိုးဝတ်ရင်တောင် အောက်ခံဘောင်းဘီ ၀တ်ဆင်တတ်တဲ့ကလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ပါ။ ရာသီဥတုကလည်းပူ ၀တ်မယ့် ဂျင်းဘောင်းဘီကလည်း အမိုက်စားဆိုတော့ အတွင်းခံကို မ၀တ်တော့တဲ့ နေ့အကြောင်း ပြောမှာပါ။ ဘောင်းဘီကို ၀တ်ထားရင်း မှန်ထဲကြည့်တာ ခန္ဓာကိုယ်​နဲ့ သပ်​သပ်​ရပ်​ရပ်​ ကပ်လို့ နေရတာလည်း မဆိုးဘူးပေါ့။ ခါးစပ်က မသိမသာ လျှောကျတာလေးရယ် ခွဆုံက ချွေးနည်းနည်းစို့ထွက်တာရယ်
ကျွန်တော့် မသိစိတ်မှ မရိုးမယွဖြစ်စေတာ အမှန်။ ပေါင်ကြားက ငပဲက မမာ့တမာ ခေါင်းထောင်ထလာတာ ခွထားတဲ့ စက်​ဘီးဘောင်နဲ့ တွန်းတိုက်မလိုလိုဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါအန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပြုအမူပါ မာတောင့်နေတဲ့ ငပဲနဲ့ စက်ဘီးဘောင်တန်း ရိုက်ခတ်မိရင်လေ။ ဒါကြောင့် လူလစ်တဲ့နေရာဘက်ကို စက်ဘီး အသာနင်းသွားလိုက်ရင်း ဘောင်းဘီထဲ လက်လျှိုနှိုက်ပစ်တယ်။ ပြီးတော့ ဘောင်းဘီဇစ်ဖွင့် မမာ့တမာ ငပဲကို တ၀က်လောက် အပြင်ထုတ်ကြည့်မိရော။ အနားမှာ လူတစ်ယောက်မှ မရှိလို့တော်သေးတယ် အရင်နဲ့မတူ ပြောင်းလဲတာကို အားရအောင်ကြည့်ပြီး ဘောင်းဘီထဲ ပြန်ထည့်ရတာပေါ့နော်။
နောက်နှစ် နွေရာသီ ကျွန်တော့် အသက် ၁၄နှစ်လောက်မှာတော့ ဘယ်လို ဘောင်းဘီ အမျိုးအစားကို ၀တ်ရင် လိင်စိတ်နိုးကြွမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိပြုမိပြီး လိင်အာသာဖြေတာကို ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ တတ်သွားပါပြီ။ အချိန်ကာလတိုအတွင်း ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်​ပြောင်းလဲလာမှုကိုလည်း သတိပြုမိတယ်။ အ၀တ်အစားနဲ့တော့ သိပ်အသက်ဆိုင်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော့် တင်ပါးအစုံကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပင့်တင်ထားသလို ခံစားရတဲ့ ဘောင်းဘီကို ၀တ်ဆင်ပြီး စက်ဘီးစီးရတဲ့အခါ အခြားသာမန်အချိန်တွေနဲ့ ကွာခြားတယ်ဗျ။ မာတောင့်လာတတ်တဲ့ ငပဲက ခြောက်လက်မနည်းပါးဆိုတော့ ဘောင်းဘီထဲ ချိန်ညှိထားရတာ တခါတလေ အဆင်မပြေဘူး။
စက်ဘီးကို လူသိပ်မရှိတဲ့ အသွားအလာကင်းတဲ့ဘက် စီးရတာ နင်းရတာရယ်၊ စက်ဘီး အနင်းရပ်ပြီး လက်ကစားရတာကို ကျွန်တော် သတိရသေးတယ်။ ဘောင်းဘီထဲက အတင်းနင်းကန် ခေါင်းထောင်ထတဲ့ ငပဲကြောင့် နေရတာလည်း အဆင်မပြေသလို စက်ဘီးနင်းရတာလည်း မကောင်းဘူးလေ။ ပန်းခြံထဲက သစ်တောဘက်ကိုသွားတဲ့ လမ်းသွယ်လေးအတိုင်း နင်းသွားရင်း မြက်ရိုင်းရှည်တွေအနားမှာ လက်သမားလုပ်ပစ်တာပေါ့။ ချွေးရွှဲ မှုကြောင့် ပြောင်ချောနေတဲ့ ငပဲခေါင်းကို ကိုင်ရတာ ငါးရှဉ့်​ခေါင်းလိုပဲဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ နွေရာသီမှာ စက်ဘီးနင်းရတဲ့ ခံစားချက်ကို အခုထိ မမေ့ဘူး။ Yeah!
အကောင်းဆုံး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံလို့ပြောရင် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်က ကျွန်တော့် အိမ်နီးခြင်း ညီညီနဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာကိုပြောရမယ်ထင်တယ်။ သူတို့အခန်းက ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းရဲ့ ဘေးကပ်ရက်ပေါ့ဗျ။ အဲ့ဒီအချိန်​က သူ့အသက်က ဆယ်နှစ် သို့မ​ဟုတ် ဆယ့်သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီး ကျွန်တော့် အသက်က ဆယ့်သုံးနှစ်ကနေ ဆယ့်ငါးနှစ်အတွင်း ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူက ကျွန်တော့်အပေါ် အစ်ကိုတစ်ယောက်လို ဆက်ဆံပေမယ့် တကယ်တန်းကြတော့ တော်တော်ထွားတဲ့ ညီညီ့အရပ်အမြင့်က ဆယ့်သုံးနှစ်မှာပဲ 180 cm လောက်ရှိနေပြီ။ ကျနော့် အရပ်က အဲ့ဒီအရွယ်မှာ 183 cm လောက်ပဲမြင့်တာလေ။
ညီညီက ရိုးရိုးအေးအေးနဲ့ သဘောထားကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်က ဆယ့်နှစ်နှစ်အရွယ်လောက် ရောက်ကတည်းက လိင်အာသာဖြေတာ လုပ်တတ်နေခဲ့ပြီ။ တစ်နေ့ နှစ်ခါ သုံးခါမက လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လိင်ကိစ္စအကြောင်း မတွေးတောဘဲ မနေနိုင်ခဲ့ဘူးဗျ။ ညီညီနဲ့ ကျွန်တော် အရင်းနီးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမယ့် ခင်ခင်မင်မင် လက်​ပွန်းတတီး အချိန်အတူဖြုန်းတာမျိုးတော့ လုပ်ဖူးတယ်။ သူ့အသက် ဆယ့်နှစ်နှစ်အရွယ် ပြောင်းလဲစမှာ ကျွန်တော့် မိန်းကလေး အတွေ့အကြုံ နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းအချို့မေးလာပါတယ်။ ဒါကပဲ သူနဲ့ တစ်နှစ်နည်းပါးရှည်ကြာမယ့် boy sex ပတ်သက်ဖို့ ဦးတည်သွားတာပါပဲလေ။
သူဘာတွေသိခဲ့လည်း၊ ဘယ်လောက်ထိသိထားလည်း ကျွန်တော် မေးမြန်းကာ ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ information ပြသ ညွှန်းဆိုဖို့ အဆင်ပြေမယ့် Laptop ရှိရာ ကျွန်တော့် အခန်းကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အပြောအရတော့ လိင်အာသာဖြေတာ (masturbation) ကို သိပါသတဲ့။ အွန်လိုင်းကနေ ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော်နဲ့အတူ လုပ်မလားလို့ မေးလိုက်တယ်။ သူ့ငပဲကို ကိုင်ထားရုံသာတတ်ပြီး ကောင်းအောင် ဘယ်လိုဆွ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာ မသိကြောင်း ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုကိုင်မလဲ ဘယ်လိုလက်ကစားမလဲဆိုတာ သူ့အကြည့်ရှေ့မှာ ကျွန်တော် လုပ်ပြသလို သုက်ရည်ထွက်တဲ့အထိ နည်းပြလိုက်တယ်လေ။ သူကလည်း ကျွန်တော် ပြုလုပ်သည့်အတိုင်း လိုက်လုပ်ပေမယ့် မပြီးဆုံး သုက်မထွက်ပါဘူး။ သူ့ငပဲက သူ့ခန္ဓာကိုယ်လောက် မထွားပေမယ့် ကျွန်တော့် ငပဲဆိုဒ် 12 cm ​လောက်​ရှိသလို ဆီးခုံအထက်မှာ အမွှေးအနည်းငယ်ပေါက်နေပြီဗျ။
ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်တည်းလိုလိုဖြစ်နေချိန်ဆိုရင် နှစ်ယောက်အတူဆုံဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ရယ် သူရယ် အခြားတစ်ယောက် လက်သမားလုပ်တာကို အခြားတစ်ယောက်က လိုက်လုပ်ရင်း ကျေနပ်နေကြတာ ရက်သတ္တပါတ် အတော်ကြာခဲ့ပြီးနောက် နှစ်ဦးသား နပမ်းလုံး နပမ်းသတ်မှု စလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြရော။ ကျနော်က ပိုသန်မာသလို ကြွက်သားတွေ ပိုရှိပိုတောင့်ပါတယ်။ ညီညီက ခန္ဓာကိုယ်ပိုကြီးပေမယ့် နုညံ့ငြင်သာသူလို့ပြောရမယ်။ နှစ်ယောက်က ရင်ခြင်းအပ် လက်ခြင်းကပ်ရင်း ပေါင်တွေကြားက မာတောင့်နေတဲ့ ငပဲအား ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်မိကြတာ ခဏခဏ။ မကြာခဏဆိုသလို ကျွန်တော် အပေါ်စီးကရောက်သလို သုက်ထွက်တာလည်း သူ့အပေါ် ပန်းမိလျက်သားပါ။ လအနည်းငယ်ကြာတော့ ညီညီက ရှင်းစလင်းစပြုလာသလို သုက်ရည်လည်း ထုတ်တတ်လာပါတယ်။ ဘယ်သူက အပေါ်စီးရောက်အောင် နပမ်းသတ်နိုင်သလဲ? အပေါ်ရောက်သူ သုက်ရည်နဲ့ပန်းတာကို အောက်ကလူ ဘာမှမပြောကြေးလေ။
အဲ့အချိန် ကျွန်တော် သူ့ကို လုပ်ခွင့်ပြု မလားမေးပြီး လုပ်လဲလုပ်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ဗျာ နေ့ရက် အချိန်တိုင်းလိုပဲ ညီညီနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာကို မတွေးဘဲ မနေနိုင်ဖြစ်လာတယ်။ သူလည်း ကျွန်တော့်ကို လုပ်တာပါပဲ။ ဒီကိစ္စက ကျွန်နော့်အတွက် အလွန့်အလွန် သီးသန့်ဆန်သလို သူတစ်ယောက်တည်းကိုသာ လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တခါတလေ ကျွန်တော့် စိတ်တွေ အရမ်းထန်တဲ့အချိန်ဆိုရင် မစောင့်နိုင် မအောင့်နိုင် အိပ်ရာပေါ် သူလှဲတာနဲ့ ဘောင်းဘီတွေ အတွင်းခံတွေကို ဆွဲချွတ်မိတယ်။ သူက အဲ့သလို အကြမ်းပတမ်းလုပ်တာ အိ​နြေ္ဒမရဖြစ်တာကို သဘောမကျပါဘူး။
သူတို့မိသားစု အိမ်ပြောင်းသွားချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် ၀မ်းပန်းတနည်း ငိုရှိုက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရက်မှာ မိဘတွေ မမြင်ရတဲ့ နှုတ်ဆက်အနမ်းပေးဖြစ်တယ်။ အရင်ကလည်း မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့် ပထမအကြိမ် အချစ်စစ် အနမ်းတစ်ချက်.. .ပေါ့။
မိသားစုတွေ ပြန်ဆုံကြတဲ့ပွဲတစ်ခုလို့ပြောရမယ့် ညစာအတူစားဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့က ညီဝမ်းကွဲ ပြည့်စုံနဲ့ ထပ်ခိုးအခန်းထဲမှာ အိပ်ကြတာပါ။ ပုံမှန်ဆိုရင် အေးအေးဆေးဆေး လာအနားယူမှ ရောက်တဲ့အခန်းဆိုတော့ နှစ်ယောက်အိပ် မွေ့ယာကိုပဲ မျှသုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့် အသက် ဆယ့်လေးနှစ်ရှိပြီ၊ ပြီးတော့ နံနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် ပုံမှန် လိင်အာသာဖြေတာ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် နံနက်ခင်းမှာပဲ ခေါင်းအုံးပေါ် မျက်နှာအပ်လုနည်းပါးအခြေအနေနဲ့ နိုးလာပြီး လက်တွေက ည၀တ်ဘောင်းဘီထဲရောက်ရင်း ငပဲကို ပွတ်သပ် လက်ကစားတဲ့ အနေအထားဖြစ်နေရော။ ပြည့်စုံလည်း နိုးနေကာ ကျွန်တော်လုပ်သမျှကို ကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်။ သူကလည်း ဘာမှမပြော စကားမစတာကြောင့် လုပ်လက်စအလုပ်ကို မရပ်တန့်ဘဲ ပြီးတဲ့အထိလုပ်ပစ်လိုက်တယ်လေ။ ပြည့်စုံက ကျွန်တော် ဘာလုပ်နေခဲ့လည်းမေးပေမယ့် ညကျမှ အဖြေပေးလိုက်တယ်။
ညရောက်တော့ အခန်းတံခါးတွေကို ကျွန်တော် အသေအချာစစ်ပိတ်ပြီးမှ သူ လိင်အာသာဖြေ (_ွင်းတိုက်တာ) တာမလုပ်ဘူးလား မေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် ဘာပြောတာမှန်းကို သူမသိဘူး သဘောမပေါက်ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျ။
`အင်း...မင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ လက်တွေ့ပြရမလား?´
အိပ်ရာပေါ် ပက်လက်လှဲအိပ်လိုက်ရင်း ဘောင်းဘီကို အောက်ထိဆွဲချွတ်ကာ ငပဲကို လက်ကစားပြပစ်တာ အရှင်းပဲ။ ပြည့်စုံက သေချာကြည့်ရင်း သူ့ဘာသာလုပ်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။
အသက် ဆယ့်သုံးနှစ် ရေကူးသမား ကျွန်တော်က အရပ်မြင့်တယ် ကျစ်လစ်သန်စွမ်းပုံပေါက်ပေမယ့် ပြည့်စုံက ခပ်ထွားထွား နည်းနည်း ပြည့်သယောင်ပေါက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ ခပ်ကြီးကြီး ပေါင်တံတွေ ပြည့်​ပြည့်​၀၀ ရင်အုပ်တွေပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ သူဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီကို အောက်လျှောချလိုက်တော့ အမွှေးမဲ့ ကပ္ပါယ်အိတ်နဲ့ ထိပ်အရေပြား ဖြတ်ထားတဲ့ ငပဲကို တွေ့ရရော။ သူ လက်ကစားကာစမှာ လေးလက်မ၀န်းကျင်ရှိပေမယ့် တမျိုးတမည် ပြောင်းလဲလာပါတယ်။
နောက်တနေ့ နံနက်ရောက်တော့ ပြည့်စုံက ကျနော့် နောက်မှ နိုးထလာပြီး နောက်တစ်ကြိမ်လောက် လုပ်ရအောင်တဲ့။ `ဒီတခါ အရင်ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ကြည့်စို့။ မင်းဘောင်းဘီကိုချွတ်လိုက်။ မင်းတင်သားတွေအပေါ်ကို ငါညှောင့်မယ်ကွာ´လို့ ကျွန်တော် ပြောလိုက်တယ်။ သူ့ကို အတော်ပြောလိုက်ရတယ် ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး မှောက်အိပ်ဖို့။ တတုံးတခဲကြီးပေါ်ကို ကျွန်တော် တက်မှောက်ပြီး ခါးအစုံကို လှုပ်ရှားရင်း ကိစ္စပြီးတော့ သူကလည်းပြန်လုပ်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ရက်သတ္တပါတ် တစ်ပတ်ရဲ့ နားရက်တိုင်း လုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ နံနက်တစ်ခါလုပ် နေ့လယ်နေ့ခင်း တရေးအိပ်ပြီး နိုးတဲ့အချိန် နောက်တစ်ကြိမ်လုပ်ဖြစ်ရော။
ကျွန်တော် ပြန်စဉ်းစားတော့ ပြည့်စုံက အပေါ်မှာ နေပြီးတက်ညှောင့်ချိန်ဆို ပေါင်သားပြည့်ပြည့်တွေနဲ့ ထိကပ်နေရတာ၊ ကျွန်တော်က တမျိုးတမည် တက်ညှောင့်ချိန်ဆိုရင် သူ့ဗိုက်သား အိအိတွေနဲ့ ထိတွေ့နေရတာတွေ မကြာခဏ​ ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပြန်မဆုံဖြစ်တာလည်းကြာပြီ မကမြင်းဖြစ်ကြတာလည်း နှစ်အတော်ကြာပါပြီ။ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်ဟာ "chubby chaser" တစ်ယောက် အသေအချာ ဖြစ်လာရတာ ပြည့်စုံနဲ့ ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ များကြောင့် ဖြစ်မှာပါပဲလေ။
နွေရာသီ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး ပျော်ပွဲစားထွက်တုန်းက ကြုံခဲ့ဖူးတာဗျ။ ကျွန်တော့် အသက် ၁၂နှစ် ၊ ကျော်ကျော်က ဆယ့်လေးနှစ် သူငယ်ချင်းအုပ်စုကို ဦးဆောင်သူတွေပေါ့။ ကျော်ကျော့်ဆံပင်တွေက သဘာဝအရ နီညိုရောင်လို ဖြစ်နေတာပါ အနက်ရောင်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြို့ပြင်နားက ရေကန်ကြီးမှာ ရေသွားကူးကြတာပါ။အဲ့အချိန်တုန်းက အခုလို အတွင်းခံနဲ့ ရေကူးဘောင်းဘီ ကောင်းကောင်းဝယ်လို့မရသေးဘူး အိမ်ချုပ် ချည်သားဘောင်းဘီတိုတွေကို အောက်ခံသဘောဝတ်ကြရတာလေ။ ကျော်ကျော့်ငပဲကို ရေစိုဘောင်းဘီပေါ်က ထင်းကနဲမြင်နေရတာများ လေးလက်မခပ်ပျော့ပျော့တွဲလောင်းဗျ။ သေချာအရှင်းအလင်း ငပဲခေါင်းတွေရော ရွှေဥတွေကော အလုံးစုံတော့ မမြင်ရပေမယ့် ကောက်ကြောင်း လိုင်းထနေတာ အတိုင်းသားလေ။ ကျွန်တော် မျက်လုံး အကြည့်မလွှဲ သေချာစိုက်ကြည့်ပစ်တာပဲ။ ဒါက အတွေးထဲ ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်လာတဲ့ ငပဲ (_ီး) ပါ။
ကျွန်နော်က အစ်ကိုတွေအများကြီးရှိတဲ့သူပါ။ ကျွန်တော့် အသက် ရှစ်နှစ် ၊ ကျွန်တော့် အစ်ကိုတစ်ယောက်က ဆယ့်ခြောက်နှစ်ပြည့်တော့မယ့် အချိန်လောက်က အဖြစ်အပျက်ပါ။ ကျွန်တော်က ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို လှဲလျောင်းနေရင်း ကာတွန်းစာအုပ်ဖတ်နေချိန် သူကစာရေးစားပွဲမှာထိုင်ပြီး စာလုပ်နေတာပေါ့။ အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ ဆိုပေမယ့် မေ့လျော့ပြီး တင်ပလ္လင်ချိတ်ထိုင်တာကြောင့် ငပဲက အံထွက်လာတာ မြင်ရပါရော။ ကျွမ်တော်ကော အစ်ကိုကော ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတာဆိုတော့ မြင်နေရတာ မှိုခေါင်းကြီးလိုပဲ ဖောင်းဖောင်းကြီးရယ်။ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းထက် အများကြီးကြီးတာသေချာတယ်ဗျ။ ဒါပါပဲ ပထမဆုံးအကြိမ် အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်အင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်တစားဖြစ်ဖူးတာ။
(same conversation as above)
ကျွန်တော့် အသက် ဆယ့်သုံးနှစ် ၊ အသိတစ်ယောက် ရှိန်လင်းက ဆယ်သုံးနှစ်ကျော်အရွယ် အဲ...သူက နှစ်ဝက်လောက် အသက်ပိုကြီးတယ် အဲ့အချိန်ကလေ။ သူနဲ့ ကျွန်တော် ကွာခြားချက်ပြောရရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ သူကပိုကြံ့ခိုင်သလို ပိုရင့်ကျက်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရတော့ သူက အရူးပါပဲ။ Psycho အရူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ခပ်ပေါပေါနေတတ်သူလို့ပြောတာပါ။ နွေရာသီ အားလပ်ရက် စနေနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ မြို့တစ်ဘက်က သစ်တောအုပ်ထဲ သွား ဘီယာခိုးသောက်ကြတယ်။ ဘယ်လိုပြောမလဲ သစ်တောအစပ်လို့ပြောပေမယ့်ဆောက်လုပ်လက်စ လူနေအိမ်အဆောက်အအုံအချို့ရှိတဲ့နေရာဘက်ပေါ့။ ရှိန်လင်းတစ်ယောက် သေးပေါက်ချင်တာနဲ့ ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲဖွင့် အကြမ်းထည်ကြမ်းပြင်ပေါ်နဲ့ ခြောက်သွေ့စ နံရံကို ပန်းပစ်တယ်လေ။ ကျွန်တော်ကတော့ ခြောက်နေတဲ့ နံရံပေါ် မပန်းပါဘူး တော်ကြာ ဆောက်လုပ်ရေးက ဘိုးတော် သိသွားရင် ဖင်ပိတ်အကန်ခံရမှာ သိတယ်။
ဘာကို သတိပြုမိလိုက်လဲဆိုတော့ ရှိန်လင်းရဲ့ ငပဲဆိုဒ်ပါ။ ပျော့နေတာတောင် လေးလက်မကျော်လောက်ရှည်ပြီး တုတ်လည်းတုတ်တယ်။ သေးပေါက်ပြီးတော့ အနည်းငယ် မာတောင့်လာတာတွေ့ရပါရဲ့။ ကျွန်တော် မြင်သွားမှန်း သူသိသွားလို့ထင်တယ် မျက်နှာကြီးရဲလာပြီး ခဏအကြာမှာတော့ မချိုမချဉ်အမူအယာအချို့ပေါ်လာတယ်။ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော် စိုက်ကြည့်မိတာ လုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးဗျ။ လက်နဲ့ အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်ကာ ဂုဏ်ဆာ လက်ကစားပြပါတယ်။ နောက်တော့ အခြားတဘက်က အခန်းတစ်ခုထဲ ၀င်သွားရင်း ကျောပိုးအိတ်ထဲက အ၀တ်တစ်ခုကိုထုတ် ကြမ်းပြင်ပေါ်ဖြန့်ခင်းလိုက်ရော။
သူဝတ်ထားတဲ့ quarter ဘောင်းဘီကို ဒူးအထိလျောချ ခင်းထားတဲ့အပေါ်ထိုင်ကာ ငပဲကိုဆုပ်ကိုင် စတင်လက်ကစားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း မာန်ပါပါ လုပ်နေတဲ့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး ငပဲကမိုးပေါ်ထောင်လာပါသောလေ။ ပေါင်တံတွေကို အသေအချာ ကားထိုင်ရင်း သူအပြင်းအထန် လက်ကမြင်းတယ်။ သူလုပ်နေတာကို ခိုးခိုးကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို မိမှာလည်းစိုးရိမ် အားရစရာ သူ့ငပဲအတုတ်ကို မြင်ရုံနဲ့ စိတ်ကလည်းထန် နှစ်ယောက်သား ငရုတ်​သီးအထောင်းပြိုင်တာ ငါးမိနစ်ကျော်လောက်ကြာတယ်ထင်ရဲ့။ ရှိန်လင်း အဆုံးသတ် သုက်ရည်တွေ ပန်းထုတ်ချိန် မီးသတ်ရေပိုက်ခေါင်းက ပြေးထွက်လာတဲ့ အတိုင်းမြင်ရတာပါ။ သူ့ဗိုက်သားနဲ့ ခြေထောက်တွေပေါ် ခြောက်လျော့လောက်ပန်းထုတ်တာဆိုတော့ စီးကျနေတာ အများကြီးဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်က ရှိန်လင်းလို့မဟုတ် ပြည့်​ပြည့်​၀၀ နှစ်ကြိမ်လောက်ပဲ ပန်းထုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ သူက ဘောင်းဘီပြန်မ၀တ်သေးဘဲ ငပဲကိုကိုင် ခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာနဲ့ ရီဝေေ၀အကြည့်တွေ ကျွန်တော့်ဆီလွှတ်နေသေးတာ အချိန်အတော်ကြာ။
ကျွန်တော်တို့ 9th Grade လောက်အထိ အတူတူ အရက်ခိုးခိုးသောက်ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် လက်ကစားတာကိုတော့ ပထမဆုံး အကြိမ်ကလွဲလို့ နောက်ထပ် မလုပ်ဖြစ်ကြတော့ဘူးဗျ ။
`ငါးကြိမ်သော အိပ်မက်စိုပုံပြင်´ ကိုပြောပြမယ်ဗျာ။ မနေ့ညကမက်တာမဟုတ်ပါဘူး လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တာပါ။
Gym တစ်ခုထဲမှာ ကြိုးတစ်ခုကို အားရပါးရဆွဲပြီး အပေါ်ကို ကျွန်တော်တက်နေတာဗျ။ လက်မောင်းကြွက်သားတွေ ဖောင်းကြွပြီး အမြှောင်းလိုက်ထလာတဲ့အထိ အပေါ်ကို မြင့်သထက် အမြင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားဆွဲတက်တာပါ။ ကျွန်တော့် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း Kevin က ကြိုးအောက်ခြေအဖြားကို ဖြောင့်တန်းအောင် ဆွဲကိုင်ထိန်းပေးတယ်။ ကျွန်တော်က တစ်ချက်ဆွဲတက်လိုက် သူကဖမ်းထိန်းလိုက်ဆိုတော့ ပေါင်ခြံနားလောက်က ကြိုးထုံးနဲ့ ခွဆုံ ပွတ်သပ်သလိုဖြစ်ပြီး အထိန်းအကွပ်​မဲ့စွာ ငပဲခမျာ မာတောင့်လာရပါတယ်။ အသက်ရှူ ဖို့ မနည်းကြိုးစားနေရဆဲ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကြိုးကိုင်ထားတဲ့လက် ဆစ်ကနဲနာကျင်ပြီး ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်စွာ အောက်ကိုလျောကျပါရော။ Kevinကို လှမ်းအော်သတိပေးရင်း တရှိန်ထိုးလျောကျတာများ ပေါင်တံတွေ ခြေသလုံးတွေ မီးလောင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။
ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို အရောက် အိပ်ရာကလည်း ကျွန်တော် နိုးပါတော့တာပါ။
အိပ်ရာထဲ ပစ်လှဲလိုက်တဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အလားသဏ္ဌာန်တူပါတယ်။ မျက်ဝန်းတွေကိုမှိတ် မဖွင့်သေးဘဲ အတန်ကြာ ငြိ်မ်သက်နေမိသေးတာပါ။ မာတောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့် ငပဲဟာ အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုမိုးကာတဲ ၀ါးလုံးထောက်ထားသလို တွန်းကန်နေပြီး နက်ပြာရောင် ခြည်သားပေါ်ချွဲကျိကျိ အရည်တွေရွှဲစိုနေရောဗျ။ အသက်ရှူ.. ....နှလုံးခုန်ငြိမ်အောင် ခဏဆက်လှဲနေဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် ငုံ့ကြည့်လိုက်တာ အရည်ကွက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရတော့ ဒါဟာ သေးပေါက်ချထားတာမဟုတ်မှန်းသိရဲ့။ ဘောင်းဘီထဲ လက်လျှိုထည့်ကြည့်ကာ မမာမပျော့ကို စမ်းကြည့်သေးတယ်။ ပြီးမှ ​ရေချိုးခန်းရှိရာကို သွားပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖို့ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်တယ်။ အဲ....ဘာမှ မဟုတ်ဘဲ နိုးထလာပြန်ရော။
အပေါ်က အဖြစ်အပျက်တွေ အသက် ၁၂နှစ်အရွယ်လောက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာ။ နောက်မကြာခင် လအနည်းငယ်ကြာတော့ ကျွန်တော် အရပ်ရှည်ထွက်စပြုလာသလို အသံထွက်​ တမျိုးတမည် ဖြစ်လာပါတယ်။ Gym မှာ Climbing ​လေ့ကျင့်​ခန်း ကြိုးဆွဲတက်တာ ကျွန်တော် လုပ်ဖြစ်ရင် ငပဲက မာမာလာပေမယ့် အိပ်မက်ထဲကလို သာယာမှုတွေ သိပ်မဖြစ်လိုက်ပါဘူး။ ပေါင်ကြားက ကြိုးနဲ့ ပွတ်သပ်တာ ပူစပ်​ပူ​လောင်​ ဖြစ်တာကလွဲလို့ပေါ့။ ရုတ်တရက် သုက်ရည် ပန်းထွက်တာတို့ ဘာတို့ကို ကျွန်တော် မသိခဲ့တော့ စာအုပ်တွေ မွှေဖတ်မှ `အိပ်မက်စို´ နဲ့ ညအချိန်​မှ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝကို သိရတယ်။ ပြီးတော့ အရွယ်ရောက်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ လိင်အာသာဖြေခြင်း အကြောင်းတွေကိုလည်း ဖတ်ခဲ့ရတာပါ။
သည်လို သည်လို သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပါ လေ့လာနိုင်တဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေကို ကျွန်တော်တော့ ကျေးဇူးတင်တယ်။ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ပြောင်းလဲလာချိန်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာပေါ် အမွှေးအမျှင်တွေ မပေါက်သေးပါဘူး။ ကပ္ပါယ်အိတ်ကတော့ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေထက်စာရင် အရောင်နည်းနည်း ပိုရင့်လာပါတယ်။ သတိထပ်ပြုမိတာက နှစ်လလောက်ကြာတော့ ဆီးခုံမွှေးအချို့ ရှည်လာတာကိုပါ။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မှန်ထဲက ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာရတာ သဘောကျလာတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော် လေ့လာဖို့ထပ်မံတွေ့ရှိရတဲ့ `biological science´ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်မှာပါပဲ။
Alex Aung (7 May 2018)
Labels: လိင်ဝတ္ထု, ပေးစာ
ကျွန်တော့် လိင်တံ အရမ်းသေးနေသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို အမျိုးသားတွေက သူတို့ရဲ့ လက်တွဲဖော်တွေကိုတော့ ထုတ်မမေးတတ်ကြပေမဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါကျရင်တော့ ဒါက မေးလေ့မေးထရှိတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ Cohen ကလေးဆေးရုံမှ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကလေးအထူးကု ဖြစ်သူ လိန်း အက်စ် ပေါလ်မာ (Lane S. Palmer) ကတော့ ” ဖခင်တွေက သူတို့သားတွေရဲ့ လိင်တံအရွယ်အစား သေးနေလားဆိုတာကိုမကြာခဏမေးလေ့ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ သူတို့လိင်တံရော သေးနေလားဆိုတာကို မေးမြန်းလေ့ရှိကြပါတယ် ” ဆိုပါတယ်။
လိင်တံအရွယ်အစားသေးနေလားဆိုတာကို မေးကြတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ တစ်ခြားအကြောင်းရင်းကြောင့် ဆရာဝန်ကိုလာတွေ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် နယူးယောက်မြို့ Lake Success ရှိ စမစ် ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်မှ မျိုးပွားအင်္ဂါနဲ့ လိင်မှုဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူ ပါမောက္ခ ဘရုစ် အာ ဂီးလ်ဘတ် (Bruce R. Gilbert) ကဆိုပါတယ်။ သူတို့တွေ ဆေးရုံကို တစ်ခြားကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလာပြတဲ့ အချိန်မှာ “ အော် ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကျွန်တော် ကျွန်တော့်လိင်တံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်နေတယ်ဆရာ။ ” လို့ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒီလိုမေးကြတဲ့ အမျိုးသားအများစုကတော့ အသက် ၂၀ ကနေ ၄၀ ကြားဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ အသက် ၄၀ ကနေ ၅၀ ကြားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဒီထက် အသက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသားတွေတောင် မေးတတ်ကြပါတယ်။ ” လို့ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသားတွေ လိင်တံအရွယ်အစားသေးနေတယ်ဆိုပြီး စိုးရိမ်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လိင်တံအရွယ်အစား အရမ်းသေးနေလို့ဆိုပြီး စိုးရိမ်တာကတော့ သာမန်မဟုတ်တော့ပါဘူး။
လိင်တံအတွက်အရွယ်အစား ဘယ်ဆိုဒ်က ပုံမှန်လဲ၊ ဘယ်ဆိုဒ်က ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလဲ။
သင့်အနေနဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်တံက အလုပ်လုပ်နေသ၍ သူ့မှာ ဘာပြဿနာ မှမရှိဘူးလို့ ထင်မိနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို ထင်နေတာက မှားပါတယ်။ လိင်တံအရွယ်အစားဟာ အမျိုးသားတစ်ယောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်မြင်တဲ့ပုံရိပ်ရဲ အဓိက အခြေခံအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်တစ်ချက်က အမျိုးသးအများစုက သူတို့လိင်တံရဲ့ အရွယ်အစားကို သေးတယ်လို့ပဲ မြင်တတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင် အချိန် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ အီတလီက ဆေးရုံတစ်ရုံမှာ အမျိုးသား ၆၇ ယောက်တိတိဟာ သူတို့လိင်တံသေးနေတဲ့အတွက် ခွဲစိတ်ပြုပြင်လို့ရမလားလို့ လာရောက်စုံစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း သူတို့အားလုံးရဲ့ လိင်တံတွေဟာ ပုံမှန် လိင်တံအရွယ်အစားတွေ ပဲ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
” ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက ကျွန်တော့်လူနာတစ်ယောက်ဆို လိင်တံကို တစ်နေ့ တစ်နာရီလောက်အချိန်ပေးပြီး တိုင်းနေရင်း သူ့လိင်တံကအရမ်းသေးနေတယ်လို့ ထင်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့လိင်တံကလည်း ပုံမှန်အရွယ်အစားပါပဲ။ ” ဂီးလ်ဘတ်ကဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမျိုးစိုးရိမ်တာ သူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသား ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က လိင်တံကြီးတာ ပိုလိုချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီး ၈၅ % ခန့်က သူတို့ အဖော်ဖြစ်သူရဲ့ လိင်တံအရွယ်အစားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျေနပ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဒီလို အမျိုးသမီး ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က သူတို့ အဖော်ဖြစ်သူနဲ့ လိင်တံအရွယ်အစားကို ကျေနပ်ကြပေမဲ့ အမျိုးသားအများစုကတော့ ထောင်မတ်နေတဲ့ အချိန် သူတို့လိင်တံဘယ်လိုပုံစံရှိလဲ၊ ပျော့နေတဲ့အချိန် သူတို့ လိင်တံ ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတာ စိုးရိမ်နေကြတုန်းပါပဲ။
ဒီတော့ သူတို့ရဲ့ လိင်တံဟာ ပုံမှန်အရွယ်အစားလား၊ အရွယ်အစားကြီးလား၊ သေးလားဆိုတာကို အမျိုးသားတွေ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ဖိနပ်အရွယ်အစားနဲ့ လိင်တံဆိုဒ်ကို ခန့်မှန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံတမ်းစကားတွေအရ သိတာကိုပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သေချာအတိအကျသိဖို့ကတော့ရှင်းပါတယ်။ သေချာတိုင်းတာဖို့ပါပဲ။
ဒါဆိုရင် လိင်တံကို ဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲ။
လိင်တံ တစ်ခုရဲ့ အရွယ်အစားကို တိုင်းတာတာဟာ ထောင်မတ်နေတဲ့ အချိန်တိုင်းတာရတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အမျိုးသား အများစု အံ့အားသင့်သွားကြမှာပါ။ ဒီလိုတိုင်းတာ နည်းက အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်အချရဆုံး လိင်တံကို တိုင်းတာနိုင်တဲ့ နည်းက SPL လို့ခေါ်တဲ့ stretched penis length ပါ။ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ SPL က ရှည်လေလေ ၊ ထောင်မတ်တဲ့ အခါ ရှည်လေလေပါပဲ။ SPK ကို လိင်တံ ပျော့ခွေနေတဲ့ အချိန်တိုင်းတာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းတာမယ်ဆိုရင် ပေတံဖြစ်ဖြစ်၊ ပေကြိုးဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကို လိင်တံအရင်းနားဆီးခုံရိုးကို တင်းကျပ်စွာ ကပ်ထားလိုက်ပါ။ ကပ်ပယ်အိတ်နဲ့ လိင်တံခွာသွားတဲ့ နေရာကနေ စပြီး မတိုင်းတာပါနဲ့။ ဒီလိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင် အဖိုးတန်တဲ့ အတိုင်းအတာတွေ လျော့သွားမှာပါ။ ဒီလိုပေတံထောက်ပြီးတာနဲ့ လိင်တံထိပ်ကို သေချာမြဲမြဲကိုင်ပြီး အရှေ့ကို ရောက်နိုင်သမျှရောက်အောင် ဆွဲဆန့်ပါ။ ပြီးရင် ဆီခုံးရိုးကနေ ဆွဲဆန့်ထားတဲ့ လိင်တံထိပ်ထိအတိုင်းအတာကို တိုင်းလိုက်ပါ။ တိုင်းတာပြီးတော့ ၅ လက်မနဲ့ တစ်လက်မ လေးပုံတစ်ပုံ ရှိအတိုင်းအတာကို ရပါသလား။ ရတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ လိင်တံဆိုဒ်က လုံးဝ သဘာဝ အရွယ်အစားရှိနေပါတယ်။ အရွယ်ရောက် အမျိုးသားအများစုက သာမန်အားဖြင့် ၅.၂၄ လက်မခန့် ရှိကြတယ်လို့ ပေါလ်မားက သူ့စစ်တမ်းများအရ ဆိုပါတယ်။ လိင်တံအရွယ်အစားတိုင်းတာတဲ့ စစ်တမ်းများအားလုံးနီးပါး ဒီအရွယ်အစား ပတ်လည်ခန့်မှာသာရှိပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီအတိုင်းအတာထက် နည်းနည်း တိုနေမယ်ဆိုရင် သင့်မှာ အဖော်အများကြီးရှိပါတယ်။ သာမန်လိင်တံအရွယ်အစားအောက်ထက် အနည်းငယ်သေးငယ်တဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ သာမန်အရွယ်အစားအနည်းငယ်ကြီးတဲ့ အမျိုးသားတွေလိုပဲ အများအပြားရှိပါတယ်။
ပေါလ်မားရဲ့ စစ်တမ်းများအရ အမျိုးသား ဝ.၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကသာ SPL ၆.၈ လက်မနဲ့ အထက် ရှိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိင်တံကြီးနေတာကိုတော့ အမျိုးသားတွေ စိုးရိမ်လေ့မရှိကြပါဘူး။
ဘယ်အရွယ်အစားလောက်ဆို အမျိုးသား လိင်တံအရမ်းသေးတယ်လို့ ပြောလို့ရလဲ။ (Micropenis)
လိင်တံအရမ်းသေးတဲ့ အမျိုးသားတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကို ဆေးပညာအရ micropenis လို့ခေါ်ပြီး အမျိုးသား ဝ.၆ ရာခိုင်နှုန်းဟာ micropenis ပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပေါလ်မားရဲ့ စာရင်းဇယားများအရ micropenis အရွယ်အစားဟာ ၃ လက်မနဲ့ ၂ လက်မ ကြားသာရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တောင် အမေရိကန်ဒေါက်တာတွေကတော့ SPL ၃ လက်မခန့်ရှိ အမျိုးသားတွေကို ခွဲစိတ်ဖို့ သိပ်ညွှန်ကြားလေ့မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လိင်တံခွဲစိတ်ခြင်းဟာ အန္တရာယ်များလို့ပါ။ micropenis လိင်တံပိုင်ရှင်တွေဟာ သူတို့ လိင်တံဟာ micropenis ဖြစ်နေကြောင်းကို လူပျိုပေါက်အရွယ်ရောက်မှ သိရတာ မဟုတ်ပါလူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ micropenis ဟာ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ဟော်မုန်းများ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက် ဖြစ်ရတာ ဖြစ်ပြီး လိင်တံသေးတဲ့ အပြင်တစ်ခြားပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါများလည်း ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လိင်တံဟာ သန္ဓေသား ၈ ပတ်အရွယ်ကတည်းက စတင်ဖွံ့ဖြိုးတာပါ။ ၁၂ ပတ်အကြာမှာတော့ လိင်တံဟာ အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီး စတင်ကြီးထွားပါတော့တယ်။ ဒုတိယ သုံးလပတ်နဲ့တတိယ သုံးလပတ်ကြားမှာတော့ အမျိုးသားလိင်ဟော်မုန်းတွေက လိင်တံကို ပုံမှန်အရွယ်အစားအထိကြီးထွားစေပါတယ်။ အဲ့အချိန် ဟော်မုန်း ထုတ်လုပ်ခြင်းကို နှောင့်ယှက်တဲ့အရာတွေရှိလာရင် လိင်တံကြီးထွားခြင်း ရပ်တန့်သွားပါတယ်။
သန္ဓေသားဘဝမှာ micropenis ဖြစ်နေတာကို စောစောတွေ့မယ်ဆိုရင် လိင်တံကြီးထွားမှုကို လှုံဆော်ပေးတဲ့ တက်စတိုစတီရုန်း ဟော်မုန်းနဲ့ ကုသလို့လိုရပါတယ်။ ဒီလို တက်စတိုစတီရုန်း ဟော်မုန်းနဲ့ ကုသခြင်းဟာ ကလေးဘဝနဲ့ လူပျိုဖော်ဝင်ပြီးတဲ့ အချိန်ထိတောင် လိင်တံကြီးထွားစေနိုင်ပြီး စိတ်ချရတဲ့ နည်းလမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းများအရတော့ ဒီကုသမှုနည်းလမ်းဟာ လူပျိုပေါက်အရွယ် လိင်တံကြီးထွားမှုကို ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
“ အရွယ်ရောက်တဲ့ အချိန် အထိ micropenis ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ရွေးချယ်စရာက နည်းလာပါပြီ။
လူပျိုပေါက်လူနာတစ်ယောက်အတွက် လိင်တံအတု တပ်ဆင်ခြင်းကလွဲပြီး micropenis ကို လုံလုံလောက်လောက်ကုသပေးနိုင်တဲ့ နည်းမရှိပါဘူး” လို့ ဂီးလ်ဘတ်က ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းတာတစ်ခုက micropenis ဟာ ရှားပါးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။micropenis ထက်ပိုပြီး အတွေ့ရများတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုက လိင်တံကို သေးကွေးနေတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အရမ်းမသိသာတဲ့လိင်တံ အခြေအနေ inconspicuous penis လို့ခေါ်ပါတယ်။
inconspicuous penis သို့မဟုတ် အရွယ်အစားကြောင့် ပြဿနာတက်နေတာ မဟုတ်တဲ့ လိင်တံ
inconspicuous penis ဆိုတာ အတွေ့ရခက်တဲ့ လိင်တံကိုပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Micropenis ဆိုတာတကယ်သေးငယ်နေတဲ့ လိင်တံ ကိုခေါ်တာဖြစ်ပြီး inconspicuous penis ခေါင်းစဉ်အောက်က အတွေ့ရနည်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ inconspicuous penis ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲက အတွေ့ရများတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ အသားချင်းကပ်နေတဲ့ လိင်တံနဲ့ အသားထဲမြုပ်နေတဲ့ လိင်တံတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အသားချင်းကပ်နေတဲ့ လိင်တံဆိုတာ ကပ်ပယ်အိတ်ဟာ လိင်တံရဲ့ အောက်ခြေ အရင်းထိ ကပ်နေတဲ့ အတွက် လိင်တံကို အောက်စိုက်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းထဲ ပိုရောက်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ခေါ်တာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် လိင်တံဟာ ကပ်ပယ်အိတ်နဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရှိနေတာ ဖြစ်ပြီး အသားချင်းကပ်နေတဲ့ လိင်တံ မှာတော့ ကပ်ပယ်အိတ်ဟာ လိင်တံနဲ့ တွဲနေပြီး ဘယ်နေရာနားကွဲသွားလဲဆိုတာ သိပ်မသိသာပါဘူး။
အသားထဲမြုပ်နေတဲ့ လိင်တံဆိုတာကတော့ လိင်တံက အရေပြားအောက်ထဲရောက်နေတာကိုခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လိင်တံမျိုးဟာ အဝလွန်နေတဲ့ ဗိုက်မှ အဆီတွေက တွဲကျပြီး လိင်တံကို ဖုံးအုပ်နေစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တွေ့ရတဲ့ ပုံစံမျိုးက ကပ်ပယ်အိတ်နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ အပိုင်းက မပါလာတဲ့အခါမှာ လိင်တံက ဆီးခုံရိုးသို့ ကပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခြားမြုပ်နေတဲ့ လိင်တံ အမျိုးအစားကတော့ လိင်တံထိပ်ငုံ အရေပြားက အရမ်းကြီးမားလွန်းနေတဲ့ အခါမှာ လိင်တံကိုမြုပ်နေစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကပ်တွဲနေတဲ့ လိင်တံကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့် ကုသလို့ရပေမဲ့ မြုပ်နေတဲ့ လိင်တံတွေ ဆိုရင်တော့ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း နဲ့ liposuction လို့ခေါ်တဲ့ အဆီတွေကို စုပ်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ ဖြစ်စဉ်တွေမှာလည်း ခွဲစိတ်နည်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါတယ်။
small penis syndrome လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ ကိုယ်မှာ လိင်တံကြီးကြီးမရှိလို့ ယောက်ျားအစစ်တစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးထင်နေတဲ့ ယူဆချက်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား အများစု ဒီအချက်ကို ယုံကြည်ကြတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ အမျိူးသားအများစုက ပုံမှန်လိင်တံအရွယ်အစား ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို မသိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား အများစုကို ပုံမှန်လိင်တံအရွယ်အစား ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ မေးမြန်းတဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုမှာလည်း အမျိုးသားအများစုက မှားယွင်းကြပြီး ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းက သူတို့ မသိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ယောက်ျားလေးတွေ အကြည့်များတဲ့ အပြာရုပ်ရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါလ်မားကတော့ သူ့ရဲ့ လိင်တံအရွယ်အစား သေးငယ်နေလို့ဆိုပြီး အကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးကို ကုသပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေချာ စစ်ဆေးတဲ့ အခါမှာတော့ သူရဲ့ လိင်တံဟာ လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလို ခံစားနေရတာလဲဆိုတဲ့ အဖြေကိုရှာကြည့်တော့ ဒီလူငယ်လေးဟာ အင်တာနက် အပြာရုပ်ရှင်များကို ကြည့်ရှုသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီအပြာရုပ်ရှင်ထဲက ပုံဖျက်ထားတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံကိုမြင်ပြီး ဒီလို ခံစားချက် ဖြစ်လာတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လိင်တံအရွယ်အစားဟာ အမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဓိကပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အမျိုးသားအများစုဟာ လိင်တံအရွယ်အစားကို အာရုံစိုက်ရင်း body dysmorphic disorder လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပြစ်ချက်တွေ အပေါ် အလွန်အကျွံ စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာကို ခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ body dysmorphic disorder နဲ့ တစ်ခြားသော စိတ်ရောဂါတွေကို ခံစားနေရမယ်ဆိုရင် စိတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေါလ်မားရော ဂီးလ်ဘတ်ကပါ ဒီလို စိတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရတာ ပျောက်ကင်းဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီအမျိုးသားတွေကို သူတို့ လိပ်တံ အရွယ်အစားက လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြရင် ပျောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“ ကျွန်တော် လူနာတစ်ယောက်ကို ကုပြီဆိုရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဖြစ်စဉ် နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်တို့ ကို သေချာ စစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆေးပညာအရ ပြဿနာ ရှိမနေဘူးဆိုရင် ကျွန်တော် လူနာနဲ့ သေချာစကားပြောပြီး သူ့မှာ တစ်ခြားကျန်းမာတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေလိုပဲ အရွယ်အစားတူတဲ့ လိင်တံရှိကြောင်းပြောပြရပါတယ် ”
ဒါပေမဲ့ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ အတိုင်း တစ်ချို့သော အမျိုးသားတွေကတော့ တစ်ချို့ အမျိုးသားတွေထက် လိင်တံသေးကြမှာပါ။ ဒါကလည်း ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ တကယ်လို့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်တံဟာ သာမန် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အားလုံးကို ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရဲ့ လိင်တံ အရွယ်အစားကို လက်ခံရပါမယ်။ သင့်အနေနဲ့ အရပ်ပုတဲ့ လူကို ရှည်လာအောင် လုပ်လို့ မရပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံရပါလိမ့်မယ်။
ခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့် သေးနေတဲ့ လိင်တံကို ကြီးလာအောင် လုပ်လို့ရလား။
လိင်တံကြီးစေမယ့် ဆေးနည်းတွေ၊ ကိရိယာတွေ၊ ခွဲစိတ်မှုတွေ အကြောင်းကြော်ငြာတွေဆိုရင် အမျိုးသား အများစုက စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အထက်ပါ အရာအများစုက အလိမ်အညာတွေ သာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဆေးပညာအရ လိင်တံကြီးလာအောင် လုပ်ဆောင်လို့ရရဲ့လား။
“ လိင်တံကြီးစေဖို့ လုပ်ဆောင်လို့ ရတာတော့ သိပ်မရှိပါဘူး။ ခွဲစိတ်မှု အရဆိုရင်တောင် လိင်တံအရွယ်အစားနဲ့ လုံးပတ်ကို သိသိသာသာ ကြီးလာအောင် လုပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဒီလို ခွဲစိတ်ရင် ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတွေတောင် ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါသေးတယ် ” လို့ ပေါလ်မားကဆိုပါတယ်။
augmentative phalloplasty လို့ခေါ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှု တစ်ခုကတော့ လိင်တံ လုံးပတ်ကို ပိုကြီးလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီခွဲစိတ်မှုဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်ခြားသော အစိတ်အပိုင်းက အဆီတွေကို လိင်တံထဲ ပေါင်းထည့်ပေးတာ ဖြစ်ပြီး လိင်တံပျော့ခွေနေတဲ့ အချိန် လိင်တံကို လက်မဝက်လောက် ပိုရှည်လာစေပါတယ်။
“ ဒါပေမဲ့ ဒီလို အဆီအစားထိုးမှုတွေ လုပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ခန့်မှန်းလို့ မရနိုင်တဲ့ အပြင် တစ်ခါတစ်ရံ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ သင်အနေ့နဲ့ အဆီတွေ ဖုထစ်နေတဲ့ လိင်တံကိုတော့ မလိုချင်မိပါစေနဲ့။ ဒီခွဲစိတ်မှုကို လုပ်ရတာလည်း မလွယ်ပါဘူး ” လို့ ပေါလ်မားက ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသားအများစုဟာ သူတို့လိင်တံရဲ့ သုံးပုံ နှစ်ပုံသာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ထွက်နေတယ်ဆိုတာကို မသိကြပါဘူး။ ကျန်တဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံဟာ အရွတ်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်အရိုးများနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး လိင်မှု ကိစ္စ လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ဒီလို ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ရှိနေတဲ့ လိင်တံ အရွတ်တွေကို ဖြတ်ထုတ်ပြီး လိင်တံကို တစ်လက်မ၊ ၂လက်မ အထိရှည်လာစေတဲ့ ခွဲစိတ်မှုလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂီးလ်ဘတ်ကတော့ ဒီလို့ ဖြတ်ထုတ်လိုက်ခြင်းဟာ လိင်တံတွေရဲ့ ထောင်မတ်အားကို လျော့ကျစေတဲ့ အတွက် အားမပေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
“ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေ လိင်တံရဲ့ အတွင်းပိုင်းကို ယူပြီး ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ အခါ အဖြစ်များတာကတော့ ကြာကြာမထောင်မတ်နိုင်တော့တာပါပဲ။ တကယ်လို့ အမျိုးသားတစ်ယောက်က သူ့လိင်တံကို ပိုရှည်စေချင်တယ်ဆိုရင် လိင်တံ မထောင်မတ်နိုင်တော့တာမျိုးရော လိုချင်ရဲ့လားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကို ပြန်မေးသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီကိုလည်း ဒီဟာကို အရင်လို ပြန်ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရလားလို့ မေးတဲ့ သူတွေရှိကြပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံမှာဆို ဒီလို လိင်တံ ရှည်လာအောင်လုပ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေက အန္တရာယ် များလွန်းတဲ့ အတွက် ဆေးအာမခံတွေတောင် သိပ်မထုတ်ပေးကြပါဘူး။ ဒီလို ခွဲစိတ်မှုတွေဟာ စမ်းသပ်ခွဲစိတ်မှုတွေသာ ဖြစ်ပြီး အကျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ လိင်တံပြန်တိုသွားခြင်း၊ အဖုအထစ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ချို့ယွင်းခြင်း၊ လိင်တံကွေးကောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ပြန်ပြင်လို့ မရတော့ပါဘူး။
ပစ္စည်းတွေကရော သေးနေတဲ့ လိင်တံကို ကြီးလာအောင်လုပ်လို့ရလား။
လိင်အင်္ဂါကို ဆွဲပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ တစ်လက်မခန့် လိင်တံကို ပိုရှည်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဂီးလ်ဘတ်ကတော့ ဒီပစ္စည်းတွေ အသုံးပြုနေတဲ့ လူနာနှစ်ယောက်ကို ကုသပေးဖူးခဲ့ပြီး “ ဒီပစ္စည်းတွေကို တစ်ရက်မှာ နာရီအကြာကြီးတပ်ဆင်ထားရပြီး လပေါင်းများစွာခန့်အထိ ဝတ်ဆင်ရပါတယ်။ အမျိုးသားအများစုက လိင်တံ အရမ်းကြီးချင်ကြပေမဲ့ သူတို့မှာ အဲ့လောက်အချိန်မရှိကြပါဘူး။ လူနာ အများစုလည်း ဒီလောက်ဇွဲရှိကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး ” လို့ ဆိုပါတယ်။ Vacuum devices တွေဟာ အမျိုးသားတွေ လိင်တံ ထောင်မတ်ခြင်း ပြဿနာ ဖြစ်နေတာကို ကုသပေးနိုင်ပေမဲ့ လိင်တံကိုတော့ ပိုရှည်လာစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အသစ်ဖြစ်စေတဲ့ ဆေးဝါးတွေကရော သေးနေတဲ့ လိင်တံကို ရှည်လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်လား။
လေ့လာချက်အရတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ regenerative medicine ကို အသုံးပြုပြီး တိရစ္ဆာန် လိင်တံတွေကို ကြီးထွားစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့မှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ဒီလို ဆေးနည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး small penis syndrome ဝေဒနာရှင်အမျိုးသား ၆၉ ယောက်ကို ကုသပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ လူနာဝှေးစေ့အရည်ပြားတွေကို လိင်တံကို အစားထိုး ထည့်သွင်းပြီး ကြီးထွားစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ ဒီ regenerative medicine ဆေးတွေနဲ့ဆို နောက်ပိုင်းရွေးချယ်စရာရှိလာတော့မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆေးတွေကို လူတွေမစမ်းသပ်ရသေးပါဘူး။ ဒီဆေးဟာ အလားအလာအများကြီးရှိပေမဲ့ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ လူနာတွေကို ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်သေးပါဘူး” လို့ ဂီးလ်ဘတ်က ဆိုပါတယ်။
Labels: Sexual Health, ဗဟုသုတ
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှ သတင်းစုံ ကြေငြာတာ ပြီးသွားပါပြီ။
ယခုထိ ကိုကြီးအောင် ရေချိန်မကိုက်သေး။
မကိုက်ဆို တညနေလုံး ဘာတစ်စက်မှ မသောက်မမျိုရသေးပဲကိုး။
တစ်ဆိုင်ဝင်လည်း မျက်နှာရှုံ့ပြ၊ နောက်တစ်ဆိုင်ကျပြန်တော့ ခေါင်းရောကိုယ်ပါ ခါပြကြနှင့် သုံးဆိုင်တောင် ရောက်ပြီးပြီ။
ထမင်းဆာတာနဲ့မတူ၊ ရေငတ်ခြင်းထက် ပြင်းထန်၍ အငတ်တကာ အငတ်ထဲတွင် အဆိုးဆုံးသော အရက်ငတ်ဘေးဆိုက်နေသော ကိုကြီးအောင်ပါ။
အလိုက်ကန်းဆိုးမသိစွာ တစိမ့်စိမ့်ရွာနေသော မိုးဒဏ်ကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံး ခိုက်ခိုက်တုန်နေခဲ့ရသလို ၀မ်းခေါင်းထဲမှ မွတ်သိပ်မှုဆန္ဒကြောင့် မီးကျီခဲ မျိုချထားရသည့်အတိုင်း မျက်လုံးတွေပြာပြီး ဒူးတွေ မခိုင်ချင်တော့ပါ။
သည်ကြားထဲ မြိုင်ဟေ၀န် ဈေးလမ်းထိပ် ဂင်ဇာဘားပေါ်သို့ ရွဲ့စောင်းယိုင်နဲ့နေသော နှစ်ဆစ်ချိုးလှေကားအိုကြီးမှ ကြိုးစားပမ်းစား တွယ်ဖက်တက်ခဲ့မိပြန်ရသေးသည်။
ဂင်ဇာဘားသည် သူ့နောက်ဆုံး မျှော်လင့်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း အပေါ်ထပ်အခန်းတွင်း ခြေချမိလိုက်သည်နှင့် အားခဲထားသမျှ လေထဲမျောကုန်ရတော့သည်။
စားပွဲတွေ အားလုံးနည်းပါး လူရှင်းနေသည်ပဲ။
ခါတိုင်း သံပတ်ရုပ်လေးလို တတောက်တောက် ပြေးလွှားနေသော စားပွဲထိုး ကိုဇော်ဝင်းမှာ အ၀င်ဝ စားပွဲတစ်လုံး၌ ငုတ်တုပ်မှိုင်နေ၏။
တံခါးဝမှ လူရိပ်မြင်လိုက်သဖြင့် ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုကြီးအောင်အား မြင်သွားပြီး စိတ်​ပျက်​လက်​ပျက်​ မျက်နှာလွှဲလိုက်သည်။
စားသောက်ဆိုင် ကောင်တာနောက်မှ ကိုဆွေမင်း ခမျာလည်း ဘယ်လောက်ရောင်းကောင်းသည်မသိ၊ ကောင်တာပေါ် လက်မောင်း ခေါင်းအုံး အိပ်ငိုက်လျက်။
ကိုကြီးအောင် ဖျတ်ကနဲ သတိရလိုက်သည်။
ဟိုချေး သည်ချေး နှစ်ဆယ့်လေး။
ပေါင်လား ရောင်းလား နှစ်ဆယ့်ငါးဆိုတဲ့ အပုပ်ရက်တွေလေ။
ကိုကြီးအောင် စိတ်ဓာတ်ကျသွားသည့်ကြားမှ ဇွတ်အတင်းကြီး ရှေ့တိုးမိသည်။
အလယ်တိုင်ခြေ စားပွဲလေးမှ လူနှစ်ယောက်ထံ ကပ်သွားမိ၏။ မျက်နှာပေါ်မှာလည်း ခပ်ဝါ၀ါသွားများပေါ်အောင် အပြုံးဆောင်လို့ "ငါ့ညီတို့တောင် မတွေ့တာကြာပြီနော်" နိဒါန်းပျိုးလိုက်သည်။
လူရွယ်နှစ်ယောက်စလုံးက သူနှင့် မျက်​မှန်းတန်းမိထားသူတွေမို့ အရဲစွန့်လိုက်ခြင်းပါ။
"အမယ်လေးကွာ ငါ့ညီတို့ ဘိုင်ပြတ်တာကမှ ဆိုင်လာထိုင်နိုင်သေးတယ်။ အစ်ကိုများတော့ အာဆွတ်ရုံလေးတောင် မသောက်ရသေးဘူး။ ဟဲ....ဟဲ"
"မသောက်ရသေးလည်း မသောက်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်တို့တောင် ကပ်သပ်ပြီး ကြံဖန်မူးနေရတာ၊ ကောင်းကောင်းမ၀ချင်သေးဘူး။ ခင်ဗျား ရှိရင်တောင် ပြန်တိုက်သွားဦး ကိုကြီးအောင်ရေ "
"ငအောင်တို့ ထောလို့ကတော့ ဆွေမျိုးတောင် မပြောဘူး။ ကျေးဇူးရှင် အပေါင်းအသင်းတွေ သဘောရှိ၊ ကုန်တာမသိ ဘုဉ္စာဟိပေါ့။ အဲ..လောလောဆယ်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဖွဲမွတ် ဖွတ်မွဲဖြစ်နေတယ်ကွ၊ တစ်ငုံလောက်ဆိုတော်ပါပြီ"
"ရှုပ်မနေစမ်းပါနဲ့ဗျာ၊ သွားစမ်းပါ။ စိတ်ညစ်လို့ အရက်လာသောက်ပါတယ်၊ ဘိုးဘိုးအောင် အညံ့စား ခင်ဗျားနဲ့တွေ့မှ ညစ်သထက်ညစ်ရော၊ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ သောက်ထားတာလေးတွေတောင် ဘယ်ပျောက်ကုန်မှန်းမသိတော့ဘူး။ ကဲ....သွားဗျာ"
ဒုတိယလူက အော်ကျယ်ဟစ်ကျယ်ပင် မောင်းထုတ်လိုက်သည်။
ကိုကြီးအောင် ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နှင့် အပြုံးမပျက် ကုတ်ချိချိလေး နောက်ဆုတ်ခဲ့ရသည်။
ရင်ထဲမှာတော့ ၀မ်းနည်းပက်လက်၊ ရှက်လည်း ရှက်သွားသည်။ ခက်တာကလည်း မရပါဘူးဆိုမှ ပိုတောင် ဆာလောင်လာသည့်အဖြစ်။
သြော်....သူ့ကို ရွှေဇိုးလို့ နာမည်ဖျက်ကြတာလည်း အပြစ်မဆိုသာ။
မျက်​မှန်​ကြီးနှင့် ညို ညိုတုတ်တုတ် ဆိုင်ထိုင် မန်နေဂျာကြီးကို တွေ့ရသည်။
ဆိုင်ထိုင်ကြီးက သဘောကောင်းသလို တစ်ခါတလေ ကိုကြီးအောင်အား ခွက်ကပ်ပုလင်းကပ် လက်ကျန်လေးများ စွန့်ကြဲတတ်သည်။ ခုလည်း သူ့ကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေသည်။
မတတ်နိုင်ပါ။ တင်လဲဖြူပဲရရ ရှိခိုးတောင်းပန်ရင် တစ်ပက်လောက်တော့ သောက်ရတန်ကောင်းရဲ့။
ညစ်ထေးထေး ခေါင်းပေါ်က Jungle Hat စစ်ဦးထုပ်အစစုတ်အပြတ်ကို ချွတ်ရင်း ဆိုင်ထိုင်ကြီးရှိရာသို့ သွားမယ်လို့ အပြင် ...
သူ့နောက်က ခေါ်သံကြားလိုက်၍ လှည့်ကြည့်မိသည်။
သည်တော့မှ အခန်းထောင့် ချောင်စားပွဲလေးဆီက လူငယ်တစ်ယောက်။
ကိုကြီးအောင် ၀င်လာလာချင်း မွှန်ထူနေသဖြင့် လူရှိမှန်း သတိမထားမိခဲ့။
လူငယ်က တရင်းတနှီး ပြုံးပြရင်း ဖော်ရွေလှိုက်လှဲမှုများဖြင့် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြန်သည်။
လူငယ်ရှေ့သို့ ကိုကြီးအောင် ၀င်ရပ်မိသည်။
အတန်ကြာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အကဲဖြတ်နေမိကြသည်။
အသက်အစိတ်လောက်၊ အသားဖြူဖြူ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးသဲ့သဲ့နှင့် ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ဆံရှည်ကိုယ်တော်လေး။
ပြီးတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ ဂျင်းဂျာကင်၊ အဖိုးတန် စပို့ရှပ်၊ တလက်လက်တောက်နေသော နာရီတွေဝတ်လို့။ သူဋ္ဌေးသားလား၊ အရာရှိကြီးသားလားပဲလေ။
ဒါက ကိုကြီးအောင်ရဲ့ တဒင်္ဂသုံးသပ်မှု။
အင်း......လေးဆယ်ကျော် လူလတ်ပိုင်းရောက်၍ ဆံပင်​ ဘုတ်သိုက်၊ အဆီပြန်မျက်နှာ ၊ သွားကျဲကျဲ၊ နှုတ်ခမ်းမွှေး ထိုးထိုးထောင်ထောင်နှင့် အမြဲတမ်းလို ပြုံးနေသဖြင့် ခင်မင်စရာကောင်းပုံပေါ်သော....
ကုပ်ဖွာဖွာ လည်တိုအင်္ကျီ၊ စုတ်ပြတ်ပြတ် ညစ်ထေးထေး တက်ထရက်အင်္ကျီအောက်က မိုးရေစက်လက်နှင့် အကြမ်းစားလုံချည်တစ်ပတ်နွမ်းလေးကို ကပိုကရိုဝတ်ထားသော သနားစရာ လူကြီးတစ်ဦး သို့မဟုတ် အရက်ကျေးကျွန်ကြီး တစ်ယောက်။
ဒါကတော့ လူငယ်ဘက်က အမြင်။
လူငယ်က ထွေထွေထူးထူး မေးမနေပါ။
`ရမ် သုံးပက်၊ ခုနလို ကြက်ကြော်အသေးတစ်ပွဲဗျာ´
မှာလိုက်ပြီး ကိုကြီးအောင်ဘက်လှည့်၍ -
`ဟာ..ဘယ့်နှယ့် ပြောလိုက်ပါလိမ့်။ ဖြစ်သမှ ဖျစ်ဖျစ်ဖျစ်ဖျစ်ကို မြည်ဦးမယ်။ အိုကေမှ စိုပြည်လေသတည်းပေါ့´
လူငယ် ညွှန်ပြရာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကုလားထိုင်သို့ ကိုကြီးအောင် ၀င်ထိုင်မိသည်။
`​ကျေးဇူးပါပဲ ညီလေးရယ်၊ ဒါနဲ့ ညီလေးကို အရင်က ဒီဆိုင်မှာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး ထင်ပါရဲ့။ ´
´ကျွန်တော်က သိပ်သောက်တတ်တာမှ မဟုတ်ဘဲ၊ တစ်ခါတလေ အပျင်းပြေဆိုသလိုသာ ၀င်လုပ်တာပါ.....´
မှာထားသော အရက်နှင့် ရေခဲ၊ ဆိုဒါများ ရောက်လာသည်။ လူငယ်ကိုယ်တိုင်က ငှဲ့ပေးသည်။
ကိုကြီးအောင်လည်း ဟန်မဆောင်နိုင်ဘဲ အငမ်းမရ ကောက်သောက်လိုက်မိသည်။ ပါးစောင်ကပင် လျှံကျလာသည်အထိ။ ပြီးတော့မှ လူငယ် ငေးကြည့်နေသည့်အဖြစ်ကို သတိပြုမိလိုက်သလို၊ နှုတ်ခမ်းစွန်းမှ အရက်များကို လက်ခုံနှင့် သိမ်းသုတ်ရင်း မလုံမလဲ.. ...
`အစ်ကို့ဘ၀ကတော့ ဆုံးပါပြီကွာ၊ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ အရက်နဲ့အသက်ဆက်နေရတာ၊ ဒီအရက် ဂြိုဟ်မွှေလို့လည်း မယားနဲ့ကွဲ၊ သားနဲ့ကွဲ တစ်ယောက်တည်း ပျက်စီးခန်းဆိုက်ခဲ့ရတာပေါ့။ မကောင်းမှန်း သိပေမယ့်လည်း ဖြတ်လို့မရတော့ဘူး။ အဲ....ခပ်ဆိုးဆိုးမယားကို ယူထားမိသလိုပဲပေါ့ကွာ...ဟဲ ဟဲ ဟဲ´
စေတနာရှင် လူငယ်က ကိုကြီးအောင်ကို ပြုံးကြည့်နေမိသည်။
ကိုကြီးအောင်ကား စကားတပြောပြောနှင့် တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် အာသွက်သထက် သွက်လာ၏။
"အရက်ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ရှိသကွ၊ တစ်ခါက အရက်သမားတစ်ယောက်ဟာ အရက်ကို စိတ်နာပြီး အရက်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူဖြတ်ပုံက အိတ်ထဲကို ပိုက်ဆံအပြည့်ထည့်ပြီး အရက်ဆိုင်သွားထိုင်တာပဲ၊ သူများတွေ သောက်နေတာကိုပဲ ထိုင်ကြည့်တယ်၊ သူ့စိတ်ထဲကလည်း ငါအရက်မသောက်ဘူး၊ ငါအရက်ပြတ်တယ်လို့ ဂါထာမန်းသလို မန်းနေတယ်ဆိုပဲ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ညကုန်တဲ့အထိ မသောက်ဘဲနေလိုက်နိုင်တယ်။ နောက်တစ်နေ့ နောက်တစ်ဆိုင်ကူး လေ့ကျင့်ပြန်ရော။ ဒီလိုနဲ့ သူ့စိတ်ကို တော်တော်လေး ထိန်းနိုင်ပြီး တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ အရက်ပြတ်သလိုဖြစ်သွားပြီ၊ ဒီတင် ၀မ်းသာအားရနဲ့ သူ့စိတ်သူ ချီးမွမ်းသတဲ့၊ မင်း သိပ်တော်တဲ့ကောင်ပဲ၊ အရက်ကိုနိုင်အောင် ထိန်းနိုင်တယ်၊ မင်းကို ငါဘယ်လိုကျေးဇူးဆပ်ရမှန်းတောင် မသိဘူးဆိုလိုက်တော့ သူ့စိတ်က ဘာပြန်ပြောသလဲ သ၊လး၊ ကျုပ်ကို ကျေးဇူးဆပ်ချင်တယ်ဆို ၀ီစကီနဲ့ ကြက်ကြော်နဲ့ ဂုဏ်ပြုပါတဲ့...ဟားဟား "
ပုံပြင်​အဆုံးမှာတော့ ရမ်သုံးပက် ချောသွားပြီ။
`အစ်ကို ကြက်ကြော် စားလေဗျာ´
`တော်ပါပြီကွာ၊ အစ်ကို့အတွက် ဒါပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ´
ဖန်ခွက်ကို မြှောက်ပြလိုက်သည်နှင့် လူငယ်က အလိုက်သိစွာပင် နောက်သုံးပက်ထပ်မှာပေးသည်။
`ပျော်ပျော်နေ သေခဲဆိုပဲကွ၊ ပြီးတော့ အစ်ကိုကြီးဘ၀က မပျော်လို့မဖြစ်ဘူး၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ပျော်အောင်နေ သူများလည်း ပျော်အောင်လုပ်ပေးရတဲ့ လူကိုး.....လူရွှင်​​တော်​ ကိုကြီးအောင်ဆိုရင် တချိန်တုန်းက သဘင်လောက ပြဇာတ်လောကမှာ မသိသူ ခပ်ရှားရှား၊ ရုပ်ရှင်တောင် တစ်ကားနှစ်ကား ၀င်ရိုက်ဖူးသေးရဲ့။´
`ဒါကြောင့် အစ်ကိုကြီးကို မြင်ဖူးပါတယ် အောက်မေ့နေတာကိုး´ ကိုကြီးအောင် သဘောခွေ့သွား၏။
`အစ်ကိုကြီးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီး လူတွေက အထင်သေးချင်ကြတယ်၊ တကယ်တမ်းကျတော့ အစ်ကိုကြီးသိတဲ့ ကြီးကြီးမာစတာတွေမှ တပုံကြီးပေါ့ကွာ၊ လိုချင်တဲ့ အကူအညီအခုသွားတောင်းလို့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် အစ်ကိုကြီးကလည်း ကိုယ့်မာနနဲ့ကိုယ် ဘာအကူအညီမှ မတောင်းဘူး။ ပိုက်ဆံပေးတောင် မယူဘူး၊ အဲ....ခင်ရင်တော့ အရက်တိုက်....ဒါပဲ´
`ကျွန်တော်လည်း အစ်ကိုကြီးကို မြင်မြင်ချင်းခင်ပါတယ်ဗျာ၊ ကျွန်တော့်နာမည်လည်းမှတ်ထား ဘိုဘိုကျော်တဲ့´
`ဒါနဲ့ ငါ့ညီကြည့်ရတာ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် ရှိုးတောင့်တောင့်နဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသားဒီဇိုင်းပဲကွ၊ ရုပ်ရှင်ဘက်ကော ၀ါသနာမပါဘူးလား´
`စိတ်တော့ ကူးမိတာပဲ အစ်ကိုကြီးရယ်´
`ဟာ...ဒါဖြင့် ဘာမှ မပူနဲ့၊ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်လုံး ရှိတယ်၊ အစ်ကိုကြီးက ဘ၀စုံခဲ့သလို ပေါင်းခဲ့တဲ့ လူတွေလည်း စုံလို့ပဲ၊ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုလောကဆိုရင် ခုထိအဆက်အသွယ် မပြတ်သေးဘူး၊ အဲ....အစ်ကိုကြီးက ဗေဒင်လက္ခဏာလေးလည်း တတ်ထားတာဆိုတော့ သူတို့ကို သွားသွားတွက်ချက်ပေးတာကိုး´
`စုံဆို အဋ္ဌာရဿ ကုန်သလောက်ပဲ၊ မျက်လှည့်ကျွမ်းတယ်၊ သိုင်းတို့ ဘာတို့ရော စမ်းဦးမလား၊ ပြီးတော့ လျှပ်စစ်ပြင်ချင်လည်း ရမယ်၊ လက်သမားလည်း လုပ်လိုက်တာပဲ၊ ခုတော့ အဲဒါတွေ ငြီးငွေ့လို့ အရက်သမားပဲလုပ်စား၊ အဲ အဲ လုပ်သောက်နေတယ် ဆိုပါတော့ကွာ´
ဘိုဘိုကျော်ကတော့ ကိုကြီးအောင်စကားကို မကြားတော့အောင် အတွေးလွန်သွားဟန် ရှိနေ၏။
စားပွဲထိုး ဇော်ဝင်းရောက်လာရာမှ အရက်ချပေးရင်း ဆိုင်ပိတ်တော့မည့်အကြောင်း သတိပေးသည်။
ဘိုဘိုကျော်က ရမ်တစ်လုံးပေးရန် ဘောင်းဘီနောက်အိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံအိတ်ကို နှိုက်၍ ထောင်တန်အရွက်တချို့ ထုတ်ပေးလိုက်ပြန်သည်။
`ဆိုင်က ဘယ်အချိန်ထိဖွင့်သလဲ အစ်ကိုကြီး´
`ခု ၉နာရီ ထိုးတော့မယ်၊ ကျွန်တော့်မှာ ချိန်းထားတာလေးတစ်ခုရှိလို့ပါ၊ မကြာပါဘူး၊ နာရီဝက်အလွန်ဆုံးပဲ၊ အစ်ကိုကြီး ဒီကပဲစောင့်ပေါ့။ ကျွန်တော် ဆက်ဆက်ပြန်လာခေါ်မယ်၊ ကျွန်တော့်အိမ်ကျမှ ဆက်သောက်ရင်း စကားပြောကြရအောင်၊ ရော့...ပုလင်းကို အစ်ကိုကြီး ယူထား၊ လောလောဆယ် ဒီသုံးပက်သောက်နှင့်ပေါ့ ဟုတ်လား´
သူကိုယ်တိုင်က လက်ကျန်ကောက်မော့လိုက်ပြီး ဘိုဘိုကျော်ထွက်သွားသည်။
ကိုကြီးအောင်ကား ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်လျက်သား ကျန်ခဲ့၏။
`အင်း.....တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ဒီလောက်ရက်ရောတဲ့ လူမျိုး မတွေ့ဘူးသေးပါလား။ သူတော်ကောင်းလေး သွားလေရာ အန္တရာယ်ကင်းလို့ ဘေးရှင်းပါစေ။ ထိမယ့်ခလုတ်ဆုတ်ပါစေ၊ ကြံတိုင်းအောင်ပြီး ဆောင်တိုင်းမြောက်ပါစေကွာ´
လာမှ လာပါတော့မလား၊ ကိုကြီးအောင် သံသယ၀င်မိသည်။
အို.....သူ့ကြည့်ရတာ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ကတိတည်မယ့်ပုံပါ။ မလာဘဲတော့ နေမှာမဟုတ်ပါဘူးလေ။
မလာတော့ကော ဘာအရေးလဲ၊ ရမ်ကြီးတစ်လုံးလုံး အပ်ထားခဲ့တာ ငါ့အတွက်​ အရှုံးမှ မရှိဘဲ။
ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ၀တ္တရားအတိုင်း ငါစောင့်ရမှာပေါ့။
ဒီလို ကျေးဇူးရှင်အကောင်းစားလေးမျိုး တွေ့ရခဲပါဘိခြင်း။
အဆင်သင့်ရင် တစ်သက်စာ ဒကာလေးတောင် ဖြစ်သွားဦးမယ် မဟုတ်လား။
ဧရာမ စိတ်​ကူးယဉ်​ မျှော်လင့်ချက်ကြီးများဖြင့် ကိုကြီးအောင်တစ်ယောက် ရမ်သုံးပက်ကို ဇိမ်ဆွဲ၍ မျှင်းသောက်ခဲ့ရာမှ တစ်စက်ပင် မကျန်တော့။
ကိုဇော်ဝင်းတို့ လူသိုက်လည်း ဆိုင်ပိတ်ဖို့ ပြင်နေကြပါပြီ။
ကိုကြီးအောင်လည်း အရက်ပုလင်းကြီးပိုက်၍ အောက်ဆင်းခဲ့တော့သည်။
နောက်ထပ် ၁၀မိနစ်လောက် ထပ်စောင့်တော့မှ သူ့ရှေ့သို့ (ကက)လေးတစ်စင်း ၀ူးကနဲ ထိုးဆိုက်လာသည်။
`အစ်ကိုကြီး ကိုကြီးအောင်.. ..စောင့်ရတာ စိတ်ညစ်နေပြီလား´
ဒရိုင်ဘာဘေးမှ ခေါင်းပြူနှုတ်ဆက်လိုက်သူက ဘိုဘိုကျော်။
`ကဲလာ တက်၊ ၀င်လေဗျာ...ဘာကြောင်နေတာလဲ´
အံ့အားသင့်​နေသော ကိုကြီးအောင်အား သူကိုယ်တိုင် ထွက်တွဲပြီး ကားနောက်ခန်း၌ ဘေးချင်းယှဉ်ထိုင်ခဲ့၏။
`ဟိုမှာ ချိန်းထားတဲ့လူနဲ့ မတွေ့ခဲ့ဘူးဗျ ၊ ဒါပေမယ့် အစ်ကိုကြီး တစောင့်စောင့်ဖြစ်နေမှာစိုးတာနဲ့ ပြန်ပြေးလာတာ။ ကျွန်တော့်အိမ်မှာ ဆက်သောက်နေပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိစ္စပြတ်အောင် လိုက်လုပ်ရဦးမယ်၊ အလုပ်က အရေးကြီးလို့ပါ´
`မိန်းမရှိတယ်လေ၊ ဒါပေမယ့် သဘောကောင်းပါတယ် သူ့အတွက် စိတ်သာချ။ ကျွန်တော် မီးသေပြီးသား....အိမ်မှာ အစ်ကိုကြီး အေးအေးဆေးဆေးအိပ်လို့တောင်ရတယ်၊ အစ်ကိုကြီးကိုလေ ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူး၊ ကျွန်တော် တကယ်သံယောဇဉ်ရှိနေတာ´
`ဘ၀ရေစက်ပဲပေါ့ကွယ် အစ်ကိုကြီးကတော့ ငါ့ညီအပေါ် တကယ်လေးစားသွားပြီ ချစ်လည်းချစ်တယ်´
မာလာမြိုင်လမ်း အောက်ဘက်တစ်နေရာတွင် ကားရပ်ခိုင်းလိုက်သည်။
ကိုကြီးအောင်သည် အရက်ရှိန်နှင့် ဒယီးဒယိုင်​ -
အုတ်လှေကားတွေက နဂါးလိမ် နဂါးပတ်မို့ လှလှကြီး ကွေ့ချိုးနေရ၍ လမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာပင် ချာချာလည် ယက်​ကန်​ယက်​ကန်​ ဖြစ်နေသည်။
ဘိုဘိုကျော်က အမြင်မတော်သလို ပွေ့ဖက်တွဲခေါ်လာရသည်။
နောက်ဆုံးတော့ သုံးထပ် သူ့အခန်းရှေ့ရောက်ခဲ့ရပြီး တံခါးသော့ဖွင့်မိ၏။
မြို့လယ်တိုက်ခန်းတွေ၏ ထုံးစံ၊ ၀င်ဝင်ချင်းက ဧည့်ခန်းဖြစ်၍ အိပ်ခန်းက အရှေ့ဘက်မှာရှိသည်။
ကိုကြီးအောင်အား ဧည့်ခန်းထဲထားခဲ့ပြီး ဘိုဘိုကျော် အိပ်ခန်းထဲ ၀င်သွားသည်။ တီးတိုးစကားသံတွေကြားလိုက်ရသည်။ ချက်ချင်းလိုပင် ပြန်ထွက်လာကာ နောက်ဖေး မီးဖို​ချောင်​မှ ရေခဲသေတ္တာ ဖွင့်ပိတ်သံများ ထွက်လာသည်။
ဖန်ခွက်လွတ်တစ်လုံး ပန်းကန်တစ်ချပ်နှင့် ပြန်ရောက်လာသည်။
`ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးတော့ သိုးနေပြီ၊ နှိုးလို့မရတော့ဘူး။ နိုးလာရင် ကြက်ဥလေးဘာလေးကြော်ခိုင်းမလားလို့၊ ခုတော့၊ ဒီ ငါးမြစ်ချင်းကြော်လေးပဲ အမြည်းလုပ်လိုက်ပေတော့ ကိုကြီးအောင်ရေ ´
`ရပါတယ်ကွာ၊ အစ်ကိုကြီးအတွက် အမြည်းမှ မလိုဘဲ။ သက်သက် ဒုက္ခရှာလို့´
ကိုကြီးအောင်က ပုလင်းအပိတ်ကို လှည့်ဖွင့်ပြီး ပုလင်းလိုက် မော့ချလိုက်သည်။
ဘိုဘိုကျော်က လက်ပတ်နာရီကို ကြည့်လိုက်ရာမှ -
`ကဲ....အစ်ကိုကြီး ခဏနေလိုက်ဦး၊ ဘာမှ အားမနာနဲ့နော်၊ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်သာနေ၊ အစ်ကိုကြီးကို ကျွန်တော် ယုံပါတယ်၊ အချိန်လေးရှိတုန်း ပြေးလိုက်ဦးမယ်။ ချိန်းထားတဲ့ လူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတာနဲ့ ချက်​ချင်း ပြန်လာမှာပါ´
လှေကားဆင်းရင်းတန်းလန်းမှပင် သူ့ခေါင်းပေါ်က ဆံပင်အတု၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးအတုတွေ ဖြုတ်သိမ်းလာခဲ့သည်။
မာလာမြိုင်လမ်းပေါ်မှာ လူပြတ်နေသလို၊ မိုးတစိမ့်စိမ့်ကြားမှ ရွှေနှင်းဆီဈေးဘက်သို့ သုတ်သုတ်လေး လျှောက်လာခဲ့မိသည်။
ကံအားလျော်စွာ စူပါရုဖ် တက္ကစီတစ်စီးကို ဖမ်းတွေ့လိုက်သည်။ လက်တားလိုက်ပြီး သူနေထိုင်ရာ ဘူတာရုံလမ်း ဘော်ဒါဆောင်ကို မောင်းခိုင်းလိုက်၏။
ကားပေါ်ရောက်မှ ဘိုဘိုကျော် သက်ပြင်းချနိုင်သည်။
ကိုသုတ အဲ...မမမြသုတကိုလည်း မှတ်မှတ်ရရ မျက်စိထဲမြင်ယောင်မိလိုက်သည်။
မမမြသုတနှင့် သူ့ပြဿ နာက မပြေလည်သော မေတ္တာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့ပြောလို့ရသလို လူမြင်မသင့်သော အချစ်ဇတ်လမ်းတစ်ခုပါ။
မမမြသုတသည် အရာရှိသူဋ္ဌေးကြီးတစ်ယောက်၏ ယောက်ျားမဟုတ်သော ဒုတိယဇနီးဖြစ်သလို သူကလည်း မမမြသုတ၏ တိတ်တိတ်ပုန်း အတူအိပ် ရည်းစားလေး။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို `တစ်ဝမ်းကွဲ ညီ´တော်သူဟု လှည့်စားပြီး အရာရှိကြီး နောက်ကွယ်၌ အချစ်ခန်းဖွင့်ကြသည်။
မကြာမီ ရက်ပိုင်းကတော့ မမမြသုတ ဗွေဖောက်လာ၏။
`ချစ်လေးရယ်.....တိတ်​တိတ်​​ခိုးတွေ့နေရတဲ့ ဘ၀မှာ မပျော်တော့ဘူးကွယ်၊ မမမြသုတကို အိမ်တစ်ဆောင် မီးတစ်ပြောင်နဲ့ ထားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါလား´
`သြော်ဗျာ....ကျွန်တော့် ဘ၀မှာ ကိုယ့်ဝမ်းမှ ကိုယ်အနိုင်နိုင်ရယ်ပါဗျာ´
`ဒါဖြင့်လည်း မမမြသုတ အစ်ကိုကြီး စိုးထိုက်ကိုပဲ ဆက်လက်တွဲသွားရမှာပေါ့၊ အသည်းနာနာနဲ့ လမ်းခွဲကြရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့ ချစ်လေးရယ်.. ´
`ကျွန်တော့်ကို ဆက်မပတ်သက်ပါနဲ့တော့လို့ ဆိုလိုတာလား မမမြသုတ၊ ကောင်းပြီလေ....မမမြသုတ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေရပါ့မယ်၊ ငြိမ်းကျော်အတွက်တော့ လမ်းပေါ်ကလူ အမှိုက်ပုံရောက်ရတာ ဘာမှ မဆန်းပါဘူး´
ဘိုဘိုကျော်ဆိုသည်မှာ ကိုကြီးအောင်ကို ပါးစပ်ထဲ တွေ့ကရာပြောခဲ့တဲ့ နာမည်တု။
တကယ်စင်စစ်......မမမြသုတ သူ့ကို ကန်ထုတ်ချင်မှန်း သူနားလည်လိုက်သည်။
မမမြသုတ၏ အစ်ကိုကြီးစိုးမှာ မိန်းမအစစ် မယားကြီးရှိသလို သားနှစ်ယောက်လည်းရှိသည်။ အစ်ကိုကြီးစိုးရဲ့ မိန်းမကြီးက သူ့ယောက်ျား ကြိတ်ပုန်းခုတ်နေသည့်ကိစ္စ အစအဆုံးသိကာ အရှက်သည်းပြီး ကွာရှင်းတော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် မမမြသုတက နံပါတ်တစ်ရာထူး တက်ယူတော့မည်။ မမမြသုတ အတွက် ငြိမ်းကျော်က ကြီးစွာသော အဟန့်အတား `ခလုတ်´ကြီးတစ်ခုပဲ မဟုတ်ပါလား။
ဆယ်သိန်းလောက်နှင့် သူ့မေတ္တာကို ဈေးဖြတ်ပေးဖို့ပေါ့။
ဒါပေမယ့် မမမြသုတက ​ပေးစရာ တစ်ပြားမှမရှိဟုဆိုပြီး ငြင်းသည်၊ တင်းသည်။
မမကေသီကို ဘယ်လို ဆုံးမရမလဲ ကြံခဲ့သည်။
အကြံထုတ်နေဆဲ ကိုကြီးအောင်နှင့် ဆုံဆည်းရခြင်း ဖြစ်သည်။
အရက်ဂျိုးကြီးကို အရက်နှင့် မျှားထားခဲ့ပြီး မမမြသုတကို အချိုသပ် သွားတွေ့ကာ လည်ပင်းညှစ်သတ်လိုက်သည်။
မမမြသုတဆီမှ လက်ဝက်လက်စားတွေ၊ ငွေတွေ သိန်း ခြောက်ဆယ်လောက် ယူပြီး သူ့အဆောင်မှာ ပြန်သိမ်းသည်။ ထို့နောက်မှ ကိုကြီးအောင်ကို ပြန်ခေါ်၍ မမမြသုတအခန်းကို သူ့အခန်းလိုလို ပုံမှားရိုက် အယုံသွင်းပြီး ပစ်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မမမြသုတ၏ ယောက်ျားကြီးမှာလည်း အပတ်​စဉ်​လာနေကြ။ မကြာခင်ရောက်လာတော့မည်။
ထိုအခါ.....အမူးလွန်ပြီး လဲနေမည့် ကိုကြီးအောင်။
အိပ်ခန်းထဲမှ မမမြသုတရဲ့ ဖြူဖွေးလတ်ဆတ်သောအလောင်း။
ကိုကြီးအောင် ခမျာတော့ ထောင်ချောက်မိသော တန်ဆာခံသားကောင်မှန်း မသိရှာ။ ရမ်တစ်လုံးနှင့် ပျော်ပျော်ပါးပါး နှစ်ပါးသွားကောင်းနေဆဲ။
ဘိုဘိုကျော် ပြန်လာနိုးနိုးက အရက်တစ်ပိုင်း ထပ်ကုန်သွားသလို လူကလည်း လူမှန်းမသိလောက်အောင် ဒေါင်ချာဆိုင်းနေပါပြီ။
အလကားရ အလကားသောက်၊ ခုမှ ရေရေလည်လည် တကယ်မူးတာပါလား...ဘုရား....ဘုရား။
မူးပြီဆိုတော့လည်း ရဲစိတ်တွေ ကြွလာသည်။ မူးနေသည့်ကြားက အိမ်ခန်းတခွင် လေ့လာစူးစမ်းမိသည်။
ဇာခန်းစီးပါးပါးလေး ကာထားရာ အိပ်ခန်းဘက် မကြာမကြာ လှမ်းကြည့်မိသည်။
သူ့စိတ်ထဲ မသိုးမသန့်ကြီးဖြစ်နေတာတော့ အမှန်။
နောက်ဆုံး အရဲစွန့်ပြီး အိပ်ခန်းဝ သွားရပ်မိပါပြီ။
နှစ်ယောက်အိပ် ခုတင်၊ နိုင်လွန်ခြင်ထောင်ထဲမှ ဖဲမွေ့ယာပေါ်တွင် ပိုးလို့ပက်လက် အိပ်မောကျနေသော လူရွယ်တစ်ယောက်။
ဖြူဖျော့ဖျော့ လက်တစ်ဖက်ပင် ခြင်ထောင်အပြင်ထွက်၍ ခုတင်အောက် တွဲလောင်းကြီး ကျနေသေး။
ကိုကြီးအောင် ခေါင်းကို တစ်ချက်ခါရင်း သည့်ထက် ဆက်မကြည့်ရဲသလို မတော်ပါဘူးလေဆိုပြီး ဧည့်ခန်းထဲ ပြန်လာထိုင်သည်။ ဘိုဘိုကျော် ပြောတော့ဖြင့် သူ့မိန်းမဆိုပြီး....အို...။
အရက်ငှဲ့သောက်ရင်းမှ သူ့တိုက်ပုံအိတ်ထဲ ဟိုနှိုက်သည်နှိုက်နှင့် ပိုက်ဆံအိတ်လေးတစ်လုံး ထွက်လာသည်။
လေကလေးတစ်ချက် ချွန်လိုက်ရင်းမှ ပိုက်ဆံအိတ် အကောင်းစားလေးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်လာသုံးလေးရွက်၊ ငါးထောင်တန် အချို့နဲ့ နှစ်ရာတန် အကြွေတချို့။
အထွေအထူး ​မေးစရာ မလိုပါ။
စောစောက လှေကားအတက် အမူးလွန်ချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့သော သူ့ကို လှမ်းဖက်တွဲတက်ခဲ့စဉ် နှိုက်ယူထားလိုက်တဲ့ ဘိုဘိုကျော်ရဲ့ သားရေစစ် ပိုက်ဆံအိတ်လေးပါ။
စင်စစ်တော့ ဘိုဘိုကျော်ကို နောက်ပြောင်ကျီစယ်မယ်ဆိုပြီး တတ်တဲ့ပညာ မနေသာဆိုသလို လက်လှဲ့လေး တစ်ကွက်ပြခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဘိုဘိုကျော် ပြန်လာမှ ပိုက်ဆံအိတ်ပြန်ပေးပြီး သူ့အစွမ်းကို ကြွားလုံးထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့။
ဒီကြားထဲမှ ပိုက်ဆံအိတ်ပါ မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားနှင့် ဒရိုင်ဘာလိုင်စင်ကို ထုတ်ကြည့်မိသည်။
နှုတ်ခမ်းမွှေးမပါ၊ ဒွေးကေနှင့် ဓာတ်ပုံရှင်ရဲ့ နာမည်က ငြိမ်းကျော်.. ...
ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ မျက်ခုံး၊ မျက်လုံးနှင့် နှုတ်ခမ်းတွေ၏ ပကတိပုံရိပ်အရ ဘိုဘိုကျော်မှန်း သူတန်းသိပါသည်။
ဒါဖြင့်......ဘာကြောင့်များ ငါ့ကို နာမည်လိမ်ပြောသွားပါလိမ့်။
အချိန်လည်း မရှိတော့ဘူး ပြန်မှပဲ။
ကိုကြီးအောင်.. ..ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက နှစ်ရာတန် လေးငါးရွက်ဆွဲနှုတ်ခဲ့သည်။
ဘိုဘိုကျော် ပြန်လာလျှင် သူ့အပေါ် အထင်မလွဲအောင်ဆိုပြီး မှတ်ပုံတင် ၊ လိုင်စင်နှင့် ငွေတွေပါသော ပိုက်ဆံအိတ်လေးကို တံခါးအတွင်းဘက်မှာ ပစ်ချထားခဲ့သည်။
ဒါမှလည်း သူတော်ကောင်းလေး ပြန်လာတဲ့အခါ ပျောက်နေတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် အိမ်ထဲမှာ ကျကျန်ခဲ့တာပါလားလို့ တွေ့သွားမည်ပေါ့။
ကိုကြီးအောင် လက်ကျန်ပုလင်းလေး ချိုင်းကြားညှပ်လျက် ကြောင်လိန်လှေကားမှ လိမ့်မကျအောင် ဆင်းခဲ့ပြီးနောက် မိုးရေထဲ သိုင်းကွက်နင်းထွက်ခဲ့ပါတော့သည်။
ထိုတိုက်လှေကားသို့ မတ်တူးကားကြီးတစ်စီး ထိုးဆိုက်လာကာ အရာရှိပုံစံနှင့် လူထွားကြီးတစ်ယောက် ဆင်းလာသည်။
ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတက်နှင့် ကိုကြီးအောင် အထွက်မှာ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် စက္ကန့်ပိုင်းလေးသာ ခြားသွား၏။
သြော်.. ..ပြောင်လက်နေသော မာကြူရီမီးရောင်အောက်မှ နိုင်လွန်လမ်းမများပေါ်မှာတော့......
ကိုကြီးအောင်၏ အရိပ်သဏ္ဌာန်က ရောင်ပြန်ဟပ် ယိမ်းထိုးလျက်...။
ညီညီနိုင် (18 April 2018)